ကိုကိုမောငျနဲ့ခြိုခြိုအောငျ – My Blog
ဘူးခါးသီးရေးသညျ။ (မောငျနှမအငျးစကျဇာတျလမျးဖွဈပါသညျ။ဖွဈရပျမှနျပျေါအခွခေံထားပါသညျ။) ” ဒေါကျ ဒေါကျ သမီး ခြိုခြိုအောငျရေ ” ”ရှငျအမေ” ”သမီး နငျ့အကိုရော” ”သိဘူးလအေမေ သူ့အခနျးထဲရှိမှာပေါ့ ” ”မရှိဘူးမမေကွေညျ့ပွီးပွီ ခုပဲပွနျရောကျတယျ ဘယျလဈပွနျပွီလဲ မသိဘူး” ”ခုန လမျးမှာတော့ သူ့သူငယျခငျြးဖုနျးလာလို့ပွောတယျအမေ ကိုကြျောကွီးတို့နဲ့ခြိနျးနတောကွားတယျ” ”အငျး ဒီကောငျလေးကတော့ ခဏနေ ဖုနျးဆကျ ပွီး အိမျမှာပွနျလာ နခေိုငျးစမျးသမီး ဘယျမှလြှောကျမသှားနဲ့လို့ ဒီည မမေနေဲ့ဖဖေေ ပှဲရုံလုပျငနျးရှငျတှအေစညျးအဝေးရှိတယျ အဲ့မှာပဲညစာစားဖွဈမယျ သမီးတို့မောငျနှမ တဈခုခုသာဝယျစားကွတော့ အိမျမှာဘာမှမရှိဘူး” ”ဟုတျကဲ့အမေ သမီးဖုနျးဆကျပွီးပွနျချေါလိုကျမယျ” ”အေးအေး အာ့ဆိုမမေသှေား ပွီ သမီးဖဖေကေသှားနှငျ့နပွေီ ကိုကိုမောငျပွနျမလာခငျ တံခါးတှလေိုကျပိတျအုနျးသမီး ခတျေကာလ ကကောငျးတာမဟုတျဘူး ဂရုစိုကျနျောသမီး” ”ဟုတျကဲ့အမေ” မမေအေခနျးဝမှထှကျသှားတော့မှကိုကို့ကိုချေါထုတျရသညျ။ ”ကိုကိုထှကျလာတော့ မမေသှေားပွီ တံခါးတှသှေားပိတျအုနျး” ”အေးပါ ဟ ဟူးးးးးတျောသေးတယျ မမေမေတှသှေ့ားတော့မလို့” ”အငျးလေ တျောသေးတယျ အာ့ကွောငျ့ပွောတာပေါ့ကိုကို့ကို အတငျ့မရဲပါနဲ့လို့ မတျောလို့မမေေ တှသှေ့ားရငျ သပွေီ”
”ကဲကဲ အဝတျလဲ ရတှေဘောတှပွေောငျအောငျဆေးထား ပွီးရငျပှဲတျောတယျမယျ” ”ဟှနျ့ ဒါပဲ ကိုကိုက” ”ခဈြတာကိုးကှ” ”ဟှနျ့ ကိုကိုခဈြတာကွီးကလညျးတျောပါ နရေ့ောညရောမနားရဘူး ညီမလေးအဖုတျတှလေညျးကြိနျးလှပွီ” ”အာ့ညီမလေးအဖုတျလေးကလိုးလို့ကောငျးတာ ကိုးကှ” ”ကိုကိုနျော ညဈစုတျ သှား တံခါးတှသှေားပိတျ မမေပွေောသှားတာ ကွားတယျနျော တျောကွာ တံခါးတှမေပိတျဘဲ လုပျနတေုနျးအနုကွမျး ဝငျစီး သှားမှ ဒုက်ခတှရေောကျကုနျမယျ” ”ကိုကိုသိပါတယျ ခဈြလေးရာ စိတျမပူနဲ့” ”အာ့ဆို ခုသှားပိတျတော့လေ” ”အာဘှားပေး” ”ပွနျလာမှပေးမယျလေ” ”မ ရဘူးခုပေး ” ”ဟှနျ့ တျောတျောလကျပေါကျကတျတဲ့ကိုကို” ”အုအု ပွှတျပွှတျပွှတျ” ”ရပွီ ပွနျလာမှဆကျလုပျပေး” ကမြကခြိုခြိုအောငျပါ။ဖဖေဦေးခြို မောငျ မမေဒေျေါခိုငျခိုငျအောငျ ကိုကို ကိုကိုမောငျနဲ့ ကမြရယျ မိသားစုလေးယောကျပဲရှိတာပါ။ ပှဲရုံလုပျငနျးကိုအဓိကလုပျကိုငျပွီး မိသားစုအားလုံး ပှဲရုံမှာ အလုပျလုပျ ကွပါတယျ။ဖဖေနေဲ့မမေကေပှဲရုံလုပျငနျးရှငျမြားဥက်ကဌနဲ့အဖှဲ့ဝငျဆို တော့အလုပျမြားတယျ။ကမြနဲ့ကိုကိုက ကြောငျးမပွီးခငျကတညျးက ပှဲရုံ မှာဖဖေနေဲ့မမေကေိုဝိုငျးကူနလောတာခုထိပဲ။အီကိုနဲ့ကြောငျးပွီး ထားတဲ့ကမြတို့မောငျနှမနှဈယောကျအတှကျအခွားအလုပျလညျး သှားလုပျစရာမလိုပါ ဘူး။မိသားစုအလုပျကိုပဲလုပျရုံပါပဲ။နောငျလညျး ဒီပှဲရုံကွီးကိုဦးစီးရမှာပဲလေ။ကိုကိုနဲ့ကမြ ခုလို မောငျနှမခွငျး လိငျဆကျဆံမိတာကတော့ sexအကွောငျး တှပွေောရငျးဆကျဆံမိ သှားတာပါ။ပွောရရငျ နညျးနညျးတော့ရှညျတယျ။ကမြတက်ကသိုလျ နောကျဆုံးနှဈကပေါ့ရှငျ။ရညျးစားထားတယျပေါ့။မမေနေဲ့ ဖဖေကေ ကမြတို့မောငျနှမကိုလှတျလပျခှငျ့အပွညျ့ပေးထားပါတယျ။
လှတျတာလှတျ လပျတော့မလပျစနေဲ့ဆိုတဲ့စကားတဈခှနျးနဲ့ပဲ ထိနျးထားတယျ။ကိုကိုကတော့ ရညျးစားတဈယောကျပွီးတဈယောကျ ထားတယျ။ပှတေယျ။ ဆျောရရငျဖွုတျပွီး ပွတျတာမြားတယျ။ခုလညျး စျော၂ယောကျနဲ့ရှုပျနတေုနျး။ကမြကိုတော့မမေကေ သမီးကိုယျ့ကိုကိုယျတနျဖိုးထားရမယျ အညှာမလှယျရ ဘူးလို့ပွော တယျ။ကမြရညျးစားကိုကမြကမပေးဘူး။နှုတျခမျးပဲပေးနမျးတယျ။ တဈခါတဈလေ နို့ပေးကိုငျတယျ။ဒီလောကျပဲ။ဒါပမေယျ့သူက ဒီလောကျနဲ့ မရောငျ့ရဲဘူး။အဆငျ့တကျခငျြတာ။ကမြကမပေးဘူး။ သူဘယျလောကျစောငျ့နိုငျမလဲစမျးသပျခငျြတာနဲ့ညှငျးထားလိုကျ တယျ။အဲ့မှာသူက မစောငျ့နိုငျဘဲ ကမြကိုပဈပွီး နောကျတဈယောကျ နဲ့တှဲသှားတယျ။သဈစိမျးခြိုးတုံးတိဖွတျတာခံလိုကျရလို့ကမြ အသဲကှဲခဲ့ရတာပေါ့။ကိုကိုက အဲ့ကောငျကို ပေးလိုကျ လားမေးတော့ မပေးလို့ခုလိုဖွတျသှားတာပွောတော့ ကောငျးတယျတဲ့လေ။သူက သူသာ သူမြားသားသမီးတှလေိုကျလုပျပွီးဖကျြပဈနတော။သူ့ညီမ ကြ တော့ တိုသား။ကိုကိုမှာဘာဆေးရှိလဲတော့မသိ။စျောလိုကျပွီဆို ခဏပဲ။စနျးပှငျ့တယျ။သှားတကျလေးအပွငျပါးခြိုငျ့လေးပါ ပါတဲ့ကိုကိုကခြောတာတော့ အမှနျပဲ။ဟိုမိနျးကလေးတှကေလညျး ကိုကိုနဲ့ပကျြလညျးအေးဆေးပဲနောကျတဈယောကျနဲ့တှဲနတော တှရေ့တယျ။သူတို့ကရညျးစားထားတာကိုအပြျော ထားပွီး အလိုးခံဖို့ပဲထားကွလားတော့မသိပါဘူးရှငျ။အထနျမတှပေေါ့။ အမှနျတော့ကိုယျ့ကိုကိုယျလညျးအထနျမဆိုတာကိုကိုနဲ့လိုးပွီးတော့မှ သိရခဲ့ရ တာပါ။ကိုကိုနဲ့လိုးပွီးတော့ ကမြလတေဈနတေ့ဈခါလောကျ အလိုးမခံရရငျကို နမေထိထိုငျမသာကိုဖွဈနတေော့တာပါပဲရှငျ။မောငျနှမခွငျးမလုပျသငျ့မှနျးမ ကောငျးမှနျးသိပမေယျ့အတှအေ့ထိကိုမလှနျဆနျနိုငျပါဘူး။အထူးသဖွငျ့ ကိုကိုဟာကွီးလေ သူ့လီးကွီးနဲ့ကမြကိုနောကျကထောကျတာနဲ့တငျကမြမှာဒူး ခြောငျ သလိုလိုဖွဈပွီးအဖုတျကအရညျတှစေို့လာတော့တာပါပဲ။ကိုကို့ ဟာကွီးကစှဲဆောငျနိုငျလှနျးပါတယျ။ဒဈအောကျနားမှာမှဲ့ပါသလို ညာဘကျဂှေးဥ မှာလညျးမှဲ့တဈလုံးပါသေးတယျ။တကယျလို့အိမျမှာ မလှတျလပျလို့အလိုးမခံရတဲ့အခါ အနညျးဆုံး ကိုကို့ဟာကွီးကို စုပျပေးတတျသလို ကိုကိုကလညျးကမြဟာလေးကိုယကျပေးပါတယျ။
မမေတေို့မသိအောငျခိုးလုပျရတာလညျး တဈမြိုးတော့ကောငျးသား။ နှဈထပျတိုကျကွီးမှာမမေနေဲ့ဖဖေကေအောကျထပျမှာနပွေီးအပျေါမှာ ကမြတို့မောငျနှ နကွေပါတယျ။ကိုကိုနဲ့ကမြ ငယျငယျကတညျးက ရနျဖွဈတယျဆိုတာမရှိ။တဈခါတဈလေ ကိုကိုကကမြကိုစနောကျတာ လောကျပဲရှိပါတယျ။အဲ့အခါကြ မကနပနျးဖကျလုံးပွီးကုနျးကိုကျပဈ တာ။မမေပွေောတာပဲ ကမြငယျငယျက ကိုကိုစလို့ဆိုပွီး မှီရာလှမျး ကိုကျတာ ဂှေးတံထိပျအရညျပွားလေးပေါကျပွဲဖူး တယျတဲ့။ကမြက အနအေေးတယျ။လာစရငျငွိမျနတေတျပမေယျ့ စိတျတိုလာတဲ့အခြိနျ တို့ အသဲယားတဲ့အခြိနျဆိုကုနျးကိုကျတတျတယျ။ခုထိလညျး ကိုကို စရငျကုနျးကိုကျနကွေပါ။ကိုကိုကတော့ခဈြရှာပါတယျ။ခု မောငျနှမကနေ လငျမယားအသှငျဖွဈနတေော့ပိုဆိုးပါတယျ။ သူ့ဟာကွီးကိုငယျငယျက လိုတော့မကိုကျရဲဘူး။ကိုကျရငျပိုမာတောငျ လာပွီးကမြကိုအသလေိုးလှနျးလို့။အဲ့လိုအခြိနျဆိုလမျးတောငျ မလြှောကျနိုငျဖွဈရတယျ။ကမြဘဲနဲ့ပွတျပွီးအ သဲကှဲနစေဉျ သူပဲအနီးကပျကိုနှဈသိပျပေးတာ။မမေနေဲ့ဖဖေကေအမွဲအလုပျမြား နကွေလို့ကိုကိုကကမြရဲ့အနီးကပျအဖျောပါပဲ။အဲ့လိုနီးကပျနလေို့ လညျး ခုလိုမြိုးမောငျနှမခွငျးလိုးဖွဈတဲ့အဆငျ့အထိရောကျလာတာ။ကမြဘဲကမြကိုဖွတျသှားတာ ကမြကမပေးလို့ပကျြတာကအဓိကပါ။ သူကမြကိုတနျဖိုးမထား စိတျမရှညျလို့လညျးဖွဈနိုငျတာပေါ့။ ကမြကအဲ့လိုကိစ်စတှနေားမလညျတာလညျးပါတယျ။နောကျပွီး မမေပွေောထားတဲ့အညှာမလှယျရဘူးဆိုတဲ့စကားကို နားထောငျ ခဲ့သလို အတှအေ့ကွုံမရှိတော့ကွောကျတာလညျးပါတယျ။
လိုငျးသုံးပမေယျ့ Fbပှတျ ပုံတငျ ဗဟုသုတ သတငျးဖတျဒီလောကျ ပဲသုံးဖွဈတာ။ကမြကစာကိုပိုပွီးအာရုံစိုကျဖွဈတော့ဒီဘကျမှာ ဘာမှအတှအေ့ကွုံ ဗဟုသုတမရှိဘူး။ကြောငျးကမဟာတနျးထိတကျ ခဲ့ပွီး ဘဲလညျးထပျမထားတော့ပါဘူး။ကိုကိုကတော့ ရတှေကျလို့မရ အောငျတှဲနတေော့တာပါပဲ။ဘဲနဲ့ ပွတျပွီးတော့မှကိုကိုနဲ့ စကားပွောတော့ လိငျအကွောငျးပါလာတယျ။အစပိုငျးကတော့ ကိုကို့ကို မေးရမှာရှကျနပေမေယျ့ မမေးရဲပမေယျ့ ကိုကိုက ဆှေးနှေး ပွီးမသိတာတှပွေောပွတော့ ရဲလာပွီး အပွာစာတှေ အပွာကားတှေ လညျးကွညျ့တတျလာတယျ။ကိုကိုက သူ့ဆီကကားတှေ ကူးပေး တယျ။ လိုငျးပျေါက စာပဂေရုတှကေိုလညျးဝငျခိုငျးတယျ။ တဈနတေ့ော့ ကိုကိုနဲ့ကမြ လိုးဖွဈသှားတယျ။ခုဆိုကိုကိုနဲ့ ကမြလိုးလာတာ ၄လကြျောလာပွီ။အဲ့နကေ့ အိမျမှာမောငျနှမ နှဈယောကျပဲကနျြခဲ့တာ။ဖဖေနေဲ့မမေကေ နပွေညျတျောကပွပှဲ သှားတဲ့ညကပေါ့။ကိုကိုကသူ့သူငယျခငျြးတှနေဲ့သောကျလာတယျ။ ကမြ တဈယောကျတညျး ကိုကို့ကိုဧညျ့ခနျးထဲစောငျ့နရေငျး မောငျနှမအငျးစကျဇာတျလမျးတဈပုဒျဖတျနတော။ဖတျရငျးအရှိနျပါလာတော့ အဖုတျလေးကိုပှတျနေ တာပေါ့။ကိုကို့ဆိုငျကယျသံကွားလို့ ဖုနျးကိုခပြွီးခွံတံခါးဖှငျ့တော့ယိုငျထိုးထိုးနဲ့ဆိုငျကယျသှငျးတယျ။
”ကိုကို သောကျလာပွနျပွီလား” ”အေး နညျးနညျးပါညီမလေးရ” ”နညျးနညျးသာပွောတယျ လူကသိုငျးကှကျနငျးနပွေီ” ကိုကိုယိုငျထိုးထိုးနဲ့အိမျထဲဝငျသှား တယျ။ကမြလညျး ခွံတံခါးသော့ခတျအိမျတံခါးတှပေိတျပွီး အပေါ့အပါးသှားကာအိမျပျေါတကျ ခဲ့သညျ။ကိုကို့အခနျးကိုကွညျ့တော့ အဝတျအစားလဲ နသေညျ။ ”ကိုကို ခွလေကျဆေးပွီးမှအိပျနျော မညဈပတျနဲ့” ”အေးပါ ညီမလေးရ အဝတျလဲပွီးရငျ ဆေးမှာ” ကိုကိုကမူးနတေော့ ပုဆိုးလဲဝတျတော့ သူ့ ဟာကွီးပျေါလာတယျ။ ကိုကိုဟာ ငယျငယျကမွငျဖူးပမယျ့ ခုကတျောတျောကွီးသညျ။ ငယျငယျကသေးသေးလေး။ခုတော့ မတောငျဘဲငိုကျကနြတော တောငျ ပေါငျလညျလောကျရှညျပွီး ၁လကျမခှဲအလုံးလောကျရှိမညျ။ ရုတျတရကျကိုကိုဟာကွီးမွငျလိုကျရတော့ ဘယျလိုဖွဈသှားမှနျး မသိဘူး။ရငျထဲဒိတျ ကနဲဖွဈသှားသညျ။အောကားထဲမှာပဲမွငျဖူးတဲ့ လီးမြိုး နောကျပွီးအကွီးကွီး။ခုနစာဖတျနတေဲ့အရှိနျလေးကလညျး ပွနျတကျလာပွီးအဖုတျလေးအရညျစို့ လာသညျ။ ”ကိုကို လုံခညျြမနိုငျ ပုဝါမနိုငျနဲ့ဟာ အရှကျလညျးမရှိဘူး” ”ဘာဖွဈလဲညီမလေးရာ ကိုယျ့ညီမလေးကိုရှကျရမှာလား” ”ဟှနျ့အရှကျမရှိသရကျစိ ခွလေကျဆေးပွီးအိပျနျော ညီမလေးလညျး အိပျတော့မယျ” ”အေးအေး” ကိုကို့ကိုနှုတျဆကျပွီး ကမြအခနျးပွနျလာကာ ကုတငျပျေါတကျ ခုနက အော စာအုပျအဆကျကိုဆကျဖတျပွီးအဖုတျလေးကို ပှတျနမေိသညျ။ကိုကိုဟာကွီးကိုမှနျးပွီးပှတျတော့အရသာက တဈမြိုးပဲအောစာထဲကဇာတျကောငျနရော တှမှော ကိုကိုနဲ့ကမြ အစားထိုးပွီးဖတျနမေိသညျ။
”အငျ့အငျ့ အား ကိုကို ကိုကို့လီးကွီး အားးရှီးး” ကမြလညျးဖုနျးကိုခြ မကျြစိမှိတျပွီးပှတျနမေိသညျ။ကိုကိုအခနျးထဲဝငျ လာတာတောငျမသိ။ဘောငျးဘီကို တဈဖကျခြှတျပွီးပေါငျကားကာ အကွိုကျကိုပှတျနမေိသညျ။ပှတျနရေငျး ကမြအဖုတျပျေါကလကျ ဆှဲဖယျခံရကာပေါငျကိုလကျတှနေဲ့လာကိုငျပွီးဖွဲခံလိုကျ ရသညျ။ လနျ့ပွီးမကျြလုံးဖှငျ့ကွညျ့တော့ ကိုကိုလေ ကမြ ပေါငျကွားထဲမှာ မကျြနှာအပျတော့မညျ။ ”ဟငျ ကိုကို ဘာလုပျတာလဲ ဘာလာလုပျတာလဲ ” ”ညီမလေး လိုအပျနတောကို ကိုကိုဖွညျ့ဆညျးပေးမလို့ပါ” ”အငျ ဘာ ဘာလုပျမို့လဲဟငျ အ အ ကိုကို ရှီးးးးးအားးးကိုကို အငျးအငျးအငျးးး” ကိုကိုကမြကို မော့ကွညျ့ကာပွောပွီးကမြအဖုတျလေးမှ အရသာဖူး အစိလေးကိုတပွှတျပွှတျစုပျတော့သညျ။ ”အားးး ကိုကိုရေ အမေ့ အီးးးး ငရဲ ငရဲတှကွေီးကုနျတော့ မှာပဲ အားး ရှီးးးးး အူးးးး ကိုကိုရေ အငျးးးးဟငျးးးးးမယကျနဲ့ အ ကိုကိုရေ အဟငျ့ ဟငျ့ ယားတယျ” ကမြစိတျကူးနဆေဲခုလိုအဖုတျကိုယကျခံရတော့ရငျထဲ ဗလောငျဆူနေ သညျ။ဖငျလေးကော့ပေးပွီးကိုကိုမကျြနှာကိုအတငျးဆှဲထားမိသညျ။
နဂိုကတညျးက ကိုယျဘာသာပှတျရငျးပွီးခငျြနတောကို ကိုကိုက လာယကျပေးတော့ သိပျမကွာပါဘူးရှငျ။၅မိနဈလောကျမှာပဲကိုကို မကျြနှာကိုအဖုတျနဲ့ အတငျးကပျပွီးအရညျတှပေနျးထုတျလိုကျသညျ။ ဖငျကွီးအိပျယာပျေါဘုနျးဆိုပွနျကပြွီးမလှုပျမကိုငျခငျြလောကျအောငျ ဖွဈသှားရသညျ။အရမျးကောငျး ပွီး ရငျထဲလညျးတဈလှပျလှပျခုနျနတေုနျးရှိသေးသညျ။ကိုကိုကမြအပျေါခှတကျလာပွီးနှုတျခမျးလေးကို လာနမျးသညျ။ကမြပေါငျကို ကိုကို့ဟာ မာမာကွီး လာထိုးနသေညျ။ ”အငျးးးဟငျးးး ကိုကို ဘာလို့အဲလို့လုပျတာလဲ ညီမလေးကကိုကို့ ညီမလေ မိုးကွိုးတှပေဈကုနျမယျ” ”ပဈပဈကှာမသိဘူး ခဈြတာပဲသိ တယျ ကိုကို ညီမလေးကိုခဈြတယျ” ”အာ ကိုကိုကလညျး မောငျနှမခွငျးခဈြလို့မရဘူးလေ” ”ရတယျ ဒီနကေ့စပွီး ကိုကို ညီမလေးကိုပဲခဈြတော့မယျ ကနျြ တဲ့ စျောတှေ အကုနျဖကျြမယျ ညီမလေးလညျး ကိုကို့ကိုပဲခဈြရမယျ” ”ဟာ ကိုကို အုအုပွှတျပွှတျပွှတျ အငျးးးး ဟငျးးး ဟငျးးး ဟငျးးးး ဘာလုပျမလို့လဲ တျောပွီလေ တျောတော့” ကိုကို ကမြနှုတျခမျးလေးကိုအတငျးစုပျနမျးပွီးနို့ကိုအတငျးညှဈခနြေေ တော့သညျ။အောကျက သူ့ဟာ မာမာကွီးကလညျး ကမြ အဖုတျလေးကွားမှာ လြောထိုးပွီးဒဈကွီးနဲ့အစိလေးကိုထိုးနသေညျ။ကမြ ကိုကို ကိုအတငျးတှနျးနပေမေယျ့ ကမြထကျ လူကောငျကွီးတဲ့ကိုကို့ကို မတှနျး နိုငျ။ပါးစပျနဲ့သာပွောနရေသညျ။ကိုကို့ဒဈကွီးနဲ့အစိလေးကို ထိုးလိုကျတိုငျး ကမြမကျြလုံးတှပွောဝပွေီးဘာမှကိုကို့ကို မတုနျ့ပွနျနိုငျတော့။ကမြဘဝ ကိုကို လကျခုပျထဲကရဖွေဈနပေါပွီ။
”ကိုကိုမရတော့ဘူးကှာ တငျးနပွေီ ညီမလေးကိုလိုးမယျ” ”ဟငျ ကိုကိုမလုပျပါနဲ့ ငရဲကွီးမယျ ဟငျ့ဟငျ့ မမေနေဲ့တိုငျမှာနျော” ”တိုငျကှာ တိုငျရငျ ညီမလေး ကိုခိုးပွေးမှာ” ”ဟာ ကိုကို မလုပျပါနဲ့ ညီမလေးတောငျးပနျပါတယျနျော မောငျနှမခွငျးလေ မလုပျပါနဲ့ အငျ့ အားးးရှီးးးး အငျးးးဟငျးးဟငျးးး” ”ဗွဈဗွဈ တဈတဈတဈ ဗလဈ ဘဈ ” ကမြတားနတေဲ့ကွားကနကေိုကိုကကမြအဖုတျဝလေးကိုသူ့လီးကွီး တပွေီ့းလိုးခလြိုကျသညျ။လကျညိုးတောငျသိပျမဝငျဖူးတဲ့ ကမြအဖုတျ လေးထဲ ကိုကို့လီးကွီးမဆနျ့မပွဲနဲ့တိုးဝငျလာသညျ။ခုနက ကိုကို ယကျထားလို့တဈခြီပွီးထားတာကွောငျ့ကမြအဖုတျထဲ လီးကွီးက ကွပျ တညျးပမေယျ့ ဝငျလာသညျ။ ”အားးးး အ အအ ကိုကို အားးး သပေီ အမလေးးး အားးးး သပေါပီ အားးး ကိုကိုမလုပပွါနဲ့ အားးး ကိုကို နာတယွ အားးးးးအ ငွးးးးးးး” ကိုကိုမူးနတေော့ သူ့ကိုကမြရိုကျတာလညျးမသိတော့ဘူး။ ကမြပွောနတောကိုနားမဝငျတော့ဘူးလားမသိပါဘူးရှငျ။ သူ့ဟာကွီးကမြအဖုတျထဲ ထိုးထညျ့ဖို့ပဲအာရုံစိုကျနသေညျ။ကမြငိုပွီး နာလို့တားနပေမေယျ့ သူ့ဟာကွီးကအဖုတျကဉျြးကဉျြးလေးထဲ တဗွဈဗွဈနဲ့သာတိုးဝငျနသေညျ။မဝငျအောငျ ကွှကျသားတှနေဲ့ ကိုကိုလီးကွီးကိုညှဈတော့ ကိုကိုဟာကွီးကပိုတောငျမာလာသညျ။ အဲ့တော့မညှဈရဲပအေသာလေးသာလြော့လိုကျရသညျ။ အောကား ထဲမှာကွညျ့ဖူးပွီး စိတျကူးယဉျခဲ့ဖူးတဲ့အရာမြိုးကွီးက ခု ကမြအဖုတျထဲမညှာမတာတိုးဝငျနသေညျ။ ကိုကို့လီးထိုးထညျ့တာ ဒဈခေါငျးကွီးအပွငျ၁လကျမ ကြျောလောကျဝငျလာတော့ ဒဈထိပျကွီး ကအထဲမှာ ဆကျမဝငျလာဘဲ တဈခုခုကိုထိုးမိပွီးရပျသှားသညျ။
ဟငျ အာ့က အာ့ကအပြိုစငျအမှေးပါး။အာ့လေးပေါကျရငျတော့ ငါအပြိုရညျပကျြပါပွီလို့တှေးနတေုနျးကိုကိုက သူ့ဟာကွီးကို ဝငျသလောကျအသှငျးအ ထုတျလုပျပွီး ကမြနို့လေးတှကေိုညှဈကာ နှုတျခမျးလေးကိုလာစုပျသညျ။ကမြခေါငျးရမျးပွီးအနမျးမခံ။ ”ခဏလေးပါ ညီမလေးရယျ ပွီးရငျကောငျးလာ တော့မှာပါကှာ” ”အဟငျ့အဟငျ့ ဟီးးးးကိုကို ညီမလေးကိုအနိုငျကငျြ့တယျ အီးဟီးးးး ကိုကို့ကိုမမေနေဲ့တိုငျပွောမယျ ဟငျ့ဟငျ့ အ” ”ခဈြလို့ပါညီမလေးရာ ကိုကိုမနနေိုငျတော့လို့ပါ ကိုကို ညီမလေးကို လိုးခငျြနတောကွာပွီ အထဲကမညှဈထားနဲ့ ငွိမျငွိမျပဲနလေေ ညီမလေးပိုနာလိမျ့မယျ” ” အီးးဟီးးးဟီးးးခဈြ ရငျ ကိုယျ့ညီမလေးကိုဒီလိုလုပျစရာလား ခုတော့ ကိုကိုနဲ့ညီမလေးက ခှေးဖွဈပွီ ကိုကိုခှေးကွီး အငျးဟငျးးး နာတယျ” ကမြလညျးပွောမရမယျ့တူတူ လုပျ ပါစဆေိုပွီး ကိုကို့ကိုမရိုကျဘဲ သူ့လကျမောငျးကိုကိုငျထားလိုကျသညျ။ကိုကိုကဖငျကွီးကွှကာ ကမြအဖုတျလေးကိုအထုတျအသှငျးလုပျကာ အဝနားထိသူ့ လီးကွီး ထုတျပွီး တဈခကျြတညျးတဈဆုံးဆောငျ့ထိုးထညျ့တော့သညျ။ ”ဗွဈဗွဈ ဘှတျဘှတျ ဘလှတျ ဖောကျ ဘုတျ ” ”အားးးး သပွေီ သပွေီ နာလိုကျတာ ကှဲပွီ နာတယျ ကိုကို ကိုကိုအားးးး နာတယှ အီးးးဟီးးး ဟီးးးးးးဟီးးးးးး” ကိုကိုခဏငွိမျပွီး လီးကွီးကို ကမြဟာလေးထဲသှငျးလိုကျထုတျလိုကျ
”အားး ဟီးးးးးး ကိုကို နာတယှ အငှးးးဟငှးးးး ကိုကို ကိုကို အီးးးရှီးးး အဟငျ့အဟငျ့ အားး ကိုကို နာတယျ အီးးဟီးးးး” ကိုကို့လီးရှညျကွီးကိုကမြအဖုတျထဲ အဆုံးမသှငျးဘဲလိုးသညျ။အဆုံး သှငျးတော့ အထဲမှာ တဒုတျဒုတျနဲ့ကဉျြတကျလာသညျ။ “ကိုကို ကဉျြတယျ အားးး အငျးးးး” ”ကောငျးလာပွီလား ညီမ လေး” ”သိဘူး နာတယျ ကဉျြလညျးကဉျြတယျ အားးးရှီးးးး” ”ကိုကိုတော့လိုးလို့ကောငျးလိုကျတာကှာ ကောငျးလိုကျတဲ့ညီမလေးစောကျဖုတျ ညှဈတယျကှာ အိုးးးညှဈညှဈ” ”ကိုယျ့ညီမလေးကို အတငျးလိုးတဲ့ကိုကို ဒီလောကျတောငျလိုးခငျြ နတော လိုးလိုး လိုးပေး မွနျမွနျလေး အငျးးးး အားးး” “ကောငျး လိုကျတာကှာ ကိုယျ့ညီမကို ကိုယျပွနျလိုးရတာ အီစိမျ့နရေောအိုးးး ညှဈတယျ ကောငျးလိုကျတာ ညှဈညှဈညီမလေး” “ဗွှတျ ဘှတျဘှတျ ဗွဈဗွဈ” အရသာ ကနာတာရောကဉျြတာရောအပွငျအမြိုးအမညျမသိကောငျးတဲ့အရသာတဈခုကိုခံစားလာရသညျ။ကိုကိုဟာကွီးကိုကမြအဖုတျထဲ မွနျမွနျသှငျးစခေငျြလာ သညျ။အိပျပြျောနတေဲ့ကမြရဲ့ကာမစိတျတှေ နိုးထလာသညျ။ကမြ မငိုတော့ပါ။ဖငျကိုကော့ကော့ပေးပွီးကိုကိုခါးကို ခွနှေဈဖကျနဲ့ခှထားသညျ။ကိုကိုလီးကို လညျးအဖုတျကွှကျသားတှနေဲ့ ညှဈပေးတော့ ကိုကို ပိုပွီးဆောငျ့လိုးလာသညျ။
”ကောငျးလား ကိုကိုလိုးတာ” ”အငျးး ကောငျးတယျကိုကို လိုးလိုး ” ”စိတျခြ လိုးမှာ ကိုကို ညီမလေးကိုပဲတဈသကျလုံးလိုးတော့မှာ” ”တကယျနျော အခွား ကောငျမတှသှေားမလိုးရဘူးနျော” ”အငျးမလိုးဘူး” ”လိုးရငျ ကိုကို့ဟာကိုဖွတျပဈမှာကိုကို့လီးကွီးကညီမလေးအပိုငျနျော” ”အငျး ညီမလေးအပိုငျပဲ” ကိုကိုကလိုးတာခဏရပျပွီးကမြအကျြီကိုခြှတျပဈလိုကျသညျ။ကော့ ခြှနျနတေဲ့နို့လေးတှကေိုစို့ပေးလာသညျ။ကိုကိုခေါငျးကိုကမြဖကျထား ရတာပေါ့ရှငျ။ “အငျးးးဟငျးးးကိုကို ယားတယျ အီးးယားတယျလို့ ” ကိုကိုကနို့ကိုတဈလုံးပွီးတဈလုံးစို့ကဆကျလိုးပေးသညျ။ “အားးးရှီးးးကောငျးတယျ မွနျမွနျလေး မွနျ မွနျ ဆောငျ့ ဆောငျ့” “ကောငျးလိုကျတဲ့ညီမလေးစပျပတျ အိစကျနတောပဲ လီးမခြှတျတမျး လိုးပဈမယျ တဈညလုံးလိုးမယျ” “လိုးပေါ့ ညီမလေး စပျပတျထဲ ကိုကိုလီးကွီးတဈညလုံးသှငျးထား” “စိတျခြ လိုးမှာ ကောငျးလိုကျတဲ့စပျပတျလေး ဟားးး ရှီးးး အူးးး” “ဗွဈ ဒုတျဒုတျ အ ကိုကို ကဉျြတယျ အားးး ရှီးးးးးး အားးးးးလိုးလိုးး” ခဏကပွီးသလိုမြိုးတကယျလုံးတုနျတကျလာကာ ကမြဖငျကိုအတငျး ကော့ပေးမိပွီး အဖုတျထဲမှအရညျတှတေဗွနျးဗွနျးပနျး ထုတျသညျ။
ကိုကို့ဂှေးဥတှနေဲ့စညျးခုံကိုပါပကြေံကုနျသညျ။ကိုကိုကတော့ မပွီးသေး။ကမြနို့လေးတှကေိုညှဈနှုတျခမျးကိုစုပျနမျးကာဖငျကွီး မွှောကျပွီးဆောငျ့ဆောငျ့ လိုးသညျ။ကိုကို့လီးမှာကမြအရညျဖွူဖွူ တှနေဲ့စီးပိုငျပွီးအသံတှမြေိုးစုံထှကျနတေော့သညျ။ “ဗွဈဗွဈ ဘလပျဘလပျဘလပျ ဘှတျဘှတျဘှတျဘုဘုဘုဗွ ဈ ဘှတျ” “ဟငျ့ ကိုကို အသံတှထှေကျကုနျပွီကှာ ချချချ ” “ထှကျပါစကှော အာ့မှလိုးလို့ပိုကောငျးတာ” “ဘှတျဘလှတျ ဘှတျ” ကိုကိုလီးကွီးဆှဲထုတျတော့ကြ မစပျပတျလေး လီးလုံးပတျအတိုငျး ခပျဟဟလေးကနျြခဲ့သလိုကမြရငျထဲဟာကနဲဖွဈသှားသညျ။ ကိုကိုကကမြအပျေါမှဆငျးကာ ပေါငျလေးကိုဆှဲမွှောကျ ကာကားပွီး ဘေးတဈခကျြစီမှာ ဖိခထြားသညျ။ကမြဘယျလိုပုံဖွဈနမေလဲမွငျ ကွညျ့ကွပေါ့ရှငျ။ပေါငျကားပွီးစပျပတျဖွဲခံထားတဲ့ကမြကိုကိုက အဖုတျ ကိုကုနျးယကျပွနျသညျ။ဟတတအဖုတျဝလေးကိုလြှာသှငျးပွီး ယကျပေးသညျ။ယကျနရေငျးလြှာကကမဖငျဝလေးကိုတဈခကျြ တဈခကျြလာလာထိသညျ။ ယားကြိကြိနဲ့ ကမြတှနျ့ခနဲတှနျ့ခနဲဖွဈသှား သညျ။ “ညီမလေး ပေါငျကိုထိမျးကိုငျထား ကိုကိုလိုးတော့မယျ” “အငျး လိုးးးကိုကို” “ဘုဘုဘု ဘှတျဘလှတျ ဘှတျ” အရညျတှရှေဲနတေော့ အသံမြိုးစုံထှကျပွီးကိုကို့လီးကွီးကမြစပျပတျ ထဲတိုးဝငျလာသညျ။တဈခကျြခွငျးထုတျလိုကျသှငျးလိုကျလုပျပေးပွီး တဈ ခကျြတဈခကျြ ကမြအစိလေးကိုဒဈကွီးနဲ့လာလာထိုးသညျ။
“ကိုကို အအ လိုးလေ လိုးပေးး မဆှနဲ့ အားးးမွနျမွနျလိုးးး လိုးး” ကိုကိုကကမြအဖုတျထဲလီးအဆုံးမွုပျပီးဆောငျ့လိုးတော့သညျ။ “ဘှတျဘှတျ ဘု ဘူးးးး ဖောငျးဖောငျးဖောငျးဖောငျး ဘှတျ ဘှတျ” “ကိုကို အားးးးကောငျးလိုကျတာ လိုးပေး လိုးပေး အားးးလိုးလိုးး” “အိုးးး ညှဈတာကှာ ကောငျးလိုကျတဲ့စပျပတျ ရှီးးး ပွဲအောငျလိုးမယျ” “လိုး ပွဲအောငျလိုးးးအားး ဆောငျ့ပါကိုကို ပွီးတော့မယျ အားးး ပွီး ပွီးပွီ ပွီးပွီ အားးးးအီးးးးရှီးးးး” ကမြတဈခြီထပျပွီးတော့ကိုကို ကကမြပေါငျလေးကိုဖိကာအတငျး ဆော့လိုးတော့သညျ။မကွာပါဘူးအခကျြ၁၀၀နီးပါးလောကျပဈပဈ ဆောငျ့လိုးပွီး ကမြအဖုတျထဲလီးကွီးဆိုကျပွီးလ ရညျတှပေူခနဲ တဈဗွနျးဗွနျးနဲ့ပနျးထညျ့တော့သညျ။လရညျပနျးထညျ့ပွီးပမေယျ့ မရပျသေးဘဲဆကျလိုးနသေေးသညျ။ “အားး အားး ကိုကိုလညျးပွီးပွီကှာ ရှီးးးကောငျးလိုကျတာကှာ”“အငျးးးးဟငျးးးကိုကို ညီမလေးလညျးထပျပွီးပွနျပွီ အားးးထိုညကကိုကိုကိုနဲ့ကမြမိုးလငျးပေါကျကိုလီးနဲ့စပျပတျမခြှတျဘဲ လိုး လိုကျ နားလိုကျနဲ့မနကျမိုးလငျးကာနီးမှ ရပျကွတော့သညျ။ မနကျ၉နာရီထိုးမှကမြနိုးလာသညျ။ကိုကိုကတော့တဈရူးရူးနဲ့အိပျတုနျး ရှိသေးသညျ။ကိုကို ရငျခှငျထဲအိပျနတောမို့ကိုကိုအသကျရှူတိုငျး နှာခေါငျးက လလေေးတှကေမြနှဖူးကိုလာထိနသေညျ။ကိုကိုကလူသာ အိပျနတော သူ့လီးကွီးကမအိပျ ကမြ ပေါငျကွားထဲဝငျကာ အဖုတျလေးကိုဒဈကွီးကထိုးမိနသေညျ။ကမြငုံ့ကွညျ့တော့ ကိုကိုလီးကနညျးတာခညျြးမဟုတျ။အောကားထဲကလူမဲတှရေဲ့လီးလို ကွီးပွီးရှညျလညျးရှညျသေးသညျ။ဒီလောကျကွီးတဲ့လီးကွီးကမြ အဖုတျလေးထဲဝငျတာအံသွမိသညျ။မောငျနှမနှဈယောကျစလုံး ကိုယျလုံးတီးနှငျ့အိပျနေ တာမို့အသားခငျြးထိနသေညျ။ကိုကိုဗိုကျနဲ့ ကမြနို့လေးတှထေိနသေညျ။ကိုကိုကကမြကိုဖကျပွီးခှထားတော့ ကမြထခငျြပမေယျ့ ထမရ။သူ့လကျကွီးနဲ့ ခွထေောကျကိုဖယျတော့ကိုကိုနိုးလာသညျ။
“အငျ ဝှါးးးး ညီမလေးနိုးပွီလား” “အငျး နိုးပွီကိုကို ဖယျအုနျး ညီမလေးရှူးပေါကျခငျြလို့” “အငျး သှားလေ ” ကမြအဝတျတှရှောတော့မတှေ့။ညက ကိုကို ဘယျကိုပဈလိုကျလဲမသိ။ သေးပေါကျခငျြလာတာနဲ့မထူးတော့ဘူးလို့တှေးကာရခြေိူးခနျးကို ကိုယျလုံးတီးနဲ့ပဲပွေးသညျ။ကမြရှူးပေါကျပွီးမကျြနှာသဈ တော့ ကိုကို ရခြေိုးခနျးထဲဝငျလာသညျ။ကမြကိုနောကျကနဖေကျပွီး လညျပငျးကို စုပျနမျးကာပါးလေးကိုလာနမျးသညျ။ “ကိုကို ညှဈပတျ မကျြနှာသဈအုနျး လေ”“မသဈတော့ဘူးကှာ” “အ ကိုကို ရှီးးးး” နောကျကနသေူ့လီးကွီးနဲ့ကမြဖငျကွားထဲထိုးကာအဖုတျလေးကို လိုးပွနျသညျ။ “အားး ကိုကို သပွေီ နာ တယျ ဟငျ့ဟငျ့ ကိုကို” သှားကိုဆကျမတိုကျနိုငျဘဲ သှားပှတျတံကို ဘစေငျပျေါတငျပလုတျ အမွနျကငျြးရသညျ။ကိုကိုကနောကျကနဆေောငျ့လိုးလာတော့ ကမြ အဖုတျထဲကြိနျးခနဲကြိနျးခနဲဖွဈလာသညျ။ “အ ကိုကိုရေ ကဉျြတယျ အ အ အဟငျ့အဟငျ့ ညကလညျး တဈညလုံးလိုးထားတာကို အားးးနာတယျလို့ ကိုကို ဟငျ့ဟငျ့ ကိုကို ညီမလေးကိုသနားပါအုနျး အားးးရှီးးး” “ညီမလေးကိုဖငျပွောငျလေးနဲ့ကွညျ့ပွီး မနနေိုငျတော့လို့ပါကှာ အားးး ကောငျးလိုကျတာကှာ ညှဈ ညှဈ ညှဈစမျး ညီမလေး အူးးး” ကိုကိုကကမြကိုရခြေိုးခနျးနံရံကွှပွေားမှာ မကျြနှာအပျကာနောကျက နခေါးလေးကိုညှဈကိုငျကာ တဖနျးဖနျးလိုး တော့သညျ။တဈညလုံး ကိုကို့ဧရာမလီးကွီးနဲ့အလိုးခံထားရလို့ အဖုတျလေးကြိနျးစပျနာကငျြ နပေမေယျ့ ခု ကိုကိုလိုးတော့လညျးပါးစပျကသာငွငျးနတော အဖုတျက ဝငျလာတဲ့လီးကွီးကိုဖမျးညှဈကာဖငျလုံးလေးကိုလညျးနောကျကိုပွနျ ပဈဆောငျ့နမေိသညျ။တဈညလုံးကိုကိုပနျးထညျ့ထားတဲ့လရညျတှေ ပွနျ ထှကျလာကာ အမွုပျပါထနတေော့သညျ။ကိုကိုကတော့တဈရှီးရှီးနဲ့ငွီးကာကမြဖငျလေးကိုပဈပဈဆောငျ့နတေော့သညျ။
ထိုနကေ့ပှဲရုံပိတျရကျနဲ့ကွုံလို့အလုပျမသှားရတော့ကိုကို့အကွိုကျပငျ။ မမေနေဲ့ဖဖေကေလညျးနောကျနကေ့မြှပွနျလာမှာဆိုတော့ပိုဆိုးသညျ။ တဈနကေုနျ ကမြကိုလိုးနတေော့သညျ။ကိုယျပျေါမှာအဝတျကိုမကပျရ။ အိမျနရေငျးဒူးဖုံးဂါဝနျလေးသာဝတျခိုငျးပွီးအတှငျးခံတှမေဝတျရ။ အဆာပွလေေးစားလိုကျနား လိုကျ လီးတောငျရငျလိုးလိုကျနဲ့လိုးသညျ။ကမြအဖုတျလေးအထိမခံနိုငျအောငျကြိနျးစပျနတေယျဆိုမှမလိုးတော့ ဘဲရပျသညျ။ကမြဆကျခံမယျဆို ကိုကိုက လိုးအုနျးမယျ့ပုံကွီး။ တျောတျောဏှာကွီးတဲ့ကိုကို။ကမြမှာအပြိုစဈစဈပါကငျလေးကို တဈနနေဲ့တဈညကိုကိုလိုးတာခံရပွီးနောကျနကြေ့ မထနိုငျတော့။ ပ မျးဖြား ဖြားတော့သညျ။ကိုကိုကတော့ မကျြတှငျးကဒြူးခြောငျရုံပဲ ဖွဈသညျ။အငျးပေါ့လေ သူက ဆျောထညျလဲတှဲပွီးဆျောတှဖွေုတျနေ ကွဆိုတော့ အတှအေ့ကွုံရှိနပွေီ။ကမြမှာတော့ အဖုတျလေးကှဲပွီးကြိနျးစပျလို့၂ရကျလောကျကိုဖြားသှားသညျ။မမေမေသိအောငျ ကိုကိုကကိုယျဝနျတားဆေးဆိုတာ ကွီးလာတိုကျသေးသညျ။ကိုကိုနဲ့ ကမြ မောငျနှမခွငျးမလုပျသငျ့ပမေယျ့မှားမိကွသညျ။အတှနေ့ောကျ ကိုကောကျကောကျပါအောငျလိုကျခဲ့ကွသညျ။ အထူးသဖွငျ့ ကမြလေ ကိုကိုလီးတုတျတုတျရှညျရှညျကွီးကိုစှဲနမေိသညျ။ကမြလညျး လိငျအတှအေ့ကွုံကိုအကိုအရငျးနဲ့နဖူးတှဒေူ့းတှတှေ့ရေ့ပွီး အရူး အမဲကြှေးမိသလိုပါပဲရှငျ။ကိုကိုလိုးတိုငျးကိုခံနတေော့သညျ။ သူ့လီးကွီးကခံရတာမသကျသာလှပါ။တဈခကျြဆောငျ့လိုကျတိုငျး နငျ့ကနဲ ဖွဈဖွဈသှားပွီး အဖုတျအတှငျးထဲကအောငျ့ပမေယျ့တဈနကေို့တဈခါအလိုးမခံရရငျမနနေိုငျတော့တဲ့အထိဖွဈလာသညျ။ အိမျမှာ မမေတေို့ရှိလို့အလိုးမခံရရငျကိုကိုက အခနျးထဲခိုးဝငျလာကာ အဖုတျကိုယကျပေးတတျသညျ။ခုဆိုကိုကိုနဲ့ကမြ မောငျနှမခငျြး လိုးလာတာလေးလကြျောလာပွီ။။ခုလညျးပှဲရုံကနေ အိမျပွနျာကျ ရောကျခွငျး ကိုကိုကကမြအခနျးထဲမမေမေသိအောငျဝငျလာကာ အဖုတျယကျပေးနခွေငျးဖွဈသညျ။အဝတျလဲဖို့ဘီရိုဖှငျ့နတေုနျးကမြ ရှဒေူ့း ထောကျကာထဘီထဲဝငျပွီးအဖုတျကိုပငျ့ယကျနသေညျ။
တဈနကေုနျပှဲရုံမှာခြှေးအောငျးထားလို့အနံ့ထှကျတာကိုမယကျနဲ့တား ပမေယျ့မရ။အဖုတျတဈခုလုံးပါးစပျကွီးထဲအပွညျ့စုပျထားစဉျ တံခါးခေါကျသံကွားလို့ တကိုယျလုံးတုနျသှားသညျ။တံခါးခေါကျသံနှငျ့ အတူတံခါးလေးပှငျ့လာကာမမေခေ့ေါငျးလေးဝငျလာသညျ။ဘီရိုတံခါး ဖှငျ့ထားတော့တျောသေးသညျ။ မမေကေလညျးတံခါးဟရုံဟပွီးကမြ ကိုစကားလှမျးပွောနလေို့တျောသေးသညျ။အထဲဝငျလာလြှငျ မမေေ ကိုကိုနဲ့ကမြဖွဈနပေုံကိုမိမှာအသအေခြာပငျ။ အလငျြလိုနဟေနျနဲ့ကိုကို့မေးပွီးကမြကိုစကားပွောကာအစညျးအဝေးတကျဖို့ထှကျသှား တော့မှ ကမြသကျပွငျးခနြိုငျသညျ။ကိုကိုကလညျး မမေရှေိတယျ နအေုနျးဆိုတာမရဘူးလေ။အတငျးကိုအဖုတျယကျနတော။ မမေသှေားတော့မှကိုကို့ကိုထဘီအပွငျထှကျခိုငျးကာတံခါးတှပေိတျ ခိုငျးရသညျ။ကိုကိုထနျနေ သလို ကမြလညျးထနျနသေညျ။ ပှဲရုံမှာလညျးခုရကျပိုငျးညဘကျပါကုနျတှဝေငျနလေို့တဈမိသားစုစလုံးမအားကွ။ညနကျမှအိမျပွနျရောကျတော့ပငျပနျးပွီး တနျးအိပျ ဖွဈနကွေသညျ။ကိုကိုနဲ့ကမြလညျးမလိုးရတာ၃ရကျလောကျရှိပွီလေ။မမေနေဲ့ဖဖေကေဒီညအစညျးအဝေးတကျရမှာဆိုတော့ ညမိုးခြုပျမှ ပွနျ ရောကျမှာ။ကမြနဲ့ကိုကိုလိုးဖို့အခြိနျကောငျးကောငျးရသေးသညျ။ကမြလညျးကိုကိုခွံတံခါးအိမျတံခါးပိတျနတေုနျးရခြေိုးခနျးဝငျကာရခြေိုးခလြိုကျသညျ။ရေ အေးအေးလေးတှကေမြခေါငျးပျေါကလြာတော့ ကမြလနျးဆနျးသှားသညျ။ပငျပနျးနတေုနျးရအေေးအေးလေးနဲ့ရခြေိုး ရတာကိုကမြကွိုကျသညျ။
ခေါငျးကို မော့ကာမကျြလုံးမှိတျပွီးဇိမျခံ နလေိုကျသညျ။ကမြပေါငျကွားထဲအသားခြောငျးမာမာကွီးဝငျလာ တော့ကိုကိုရောကျလာမှနျးသိလိုကျသညျ။သူ့လီးကွီးက ကမြဖငျကွားမှ အဖုတျကိုလြောထိုးဝငျလာကဒဈကွီးကအစိလေးကိုခလုတျတိုကျသှား သညျ။ကမြနို့လေးတှကေိုလညျးအလှတျမပေး။ကိုကို့လကျကွီး တှကေ ဆုတျနယျပေးနလေသေညျ။ခုနကကိုကို အခနျးထဲမှာ အဖုတျယကျပေး ကတညျးကရှနတေဲ့ကမြ နို့ညှဈခံလိုကျရတဲ့အခြိနျမှာအရညျတှေ တောကျတောကျကလြာတော့သညျ။ကမြဂုတျကိုမုတျဆိတျမှေး စူးစူးတှလောထိပွီးလညျဂုတျကိုစုပျနမျးသညျ။ကိုကို့မုတျဆိတျမှေးတှေ ကမြကိုပို ပွီးfeelတကျစသေညျ။ပေါငျကွားထဲမှာလညျးလီးကွီးက အဖုတျကိုလြောထိုးနသေလို လကျကလညျးအငွိမျမနေ။ပါးစပျက လညျးဂုတျကိုစုပျနမျးနပွေီး မုတျဆိတျမှေးတှနေဲ့ပါအပှတျခံရတော့ ကမြမှာ ယှပွီးရငျးကိုယှလာတော့သညျ။ကိုကို့နှုတျခမျးထူထူနဲ့ စုပျအားပွငျးပွငျးအစုပျခံရတာကွိုကျပမေယျ့စုပျရာ တှထေငျကုနျမှာစိုးရသညျ။လူမမွငျနိုငျတဲ့နရောဆိုပွသနာမရှိ။ဂုတျတို့လညျပငျးတို့ဆို အကှကျတှထေငျးနရေော။တဈခါကကိုကိုစုပျလို့နီရဲနတေဲ့အကှကျကွီး ကိုသနပျခါးထူထူလိမျးပွီးဖုံးထားခဲ့ရဖူးသညျ။မမေမေေးတော့ အကြိတျပေါကျခငျြလို့ သနပျခါးအုံထားတယျပွောရတာပေါ့ရှငျ။
ခုလညျးကိုကိုကဂုတျ ကိုစုပျနပွေနျလို့တားရသညျ။ “ဟငျ့ ကိုကို မစုပျနဲ့လေ မာကငျတှဖွေဈကုနျမယျ အားးတျောပွီလို့” “အငျးပါ ညီမလေးရာမစုပျတော့ဘူး” ကမြတားမှ ကိုကို ဂုတျကိုဆကျမစုပျဘဲ အောကျကိုဆကျဆငျးသညျ။ ကြောတဈလြှောကျဖှဖှလေးစုပျနမျးသှားတာ ကမြဖငျတုံးတှဆေီ ရောကျတဲ့အထိပဲ။လရညျနဲ့တညျ့လို့ လားမသိ ကမြဝလာကာဖငျတှေ လညျးကိတျလာသညျ။သူမြားတှပွေောတာကွားဖူးတာပဲ။မိနျးမက လငျနဲ့တညျ့ရငျ ဝလာတယျဆိုလားပဲ။ကိုကိုကဖငျတုံး တှကေိုညှဈပွီး သှားနဲ့မနာအောငျကိုကျပေးသညျ။ကိုကျလိုကျယကျလိုကျနဲ့ဖငျတုံး ၂တုံးကိုဖွဲကာဖငျဝစူစူလေးကိုလြှာဖြားခြှနျလေးနဲ့ထိုးကလိလသေညျ။ဖငျ အယကျခံရတာယားပမေယျ့ ခံလို့ကောငျးပွီးအဖုတျကအရညျ တစိမျ့စိမျ့ကရြသညျ။ခုတလော ကိုကို ကမြကိုအဖုတျယကျရငျ အဖုတျမယကျပဲဖငျကိုပဲ သကျသကျယကျပေးသညျ။အဖုတျက အယကျမခံရဘဲကလိကလိဖွဈကာ ဖငျကိုယကျခံရတာနဲ့တငျ ကမြပွီးသှားတတျသညျ။ခုလညျးကိုကိုကမြဖငျကိုဖွဲ ကာယကျပေး တော့ဖငျကိုကော့ပေးပွီးဇိမျခံနမေိသညျ။ကိုကို့လြှာက ကမြဖငျထဲဝငျလာသညျ။ယှစိယှစိနဲ့မတရားကိုယားလာသညျ။
“ကိုကိုရေ အူးးးးယားတယျ ဟငျ့ အားး ယားတယျဆို အ အဟငျ့ ” ယားပါတယျဆိုမှပိုလို့တောငျတိုးယကျသေးသညျ။ “ပွှတျပွှတျ ပလပျပလပျပလပျပွှတျ အ ကိုကို ဖငျကိုမယကျပါနဲ့တော့” ဖငျအရမျးယားလာပွီးဖငျဝလေးစူပှသှားတာတော့ဖငျထဲလကျညိုး ထိုးထညျ့ကာကလိသညျ။ကိုကိုအဲ့လိုဖငျကိုကလိတာ ခုနောကျပိုငျး တျောတျောစိပျလာသညျ။ခဏခဏဖငျကိုနှိုကျလာသညျ။ခုဆို လကျညိုးလကျခလယျ ၂ခြောငျး ဝငျထှကျနိုငျနပွေီ။ဧကနျန ကမြကို ဖငျလိုးဖို့မြား ခုလိုကလိနသေလားမသိ။ကမြကိုတော့ခုထိဖငျလိုးဖို့ မပွောဖူး မတောငျးဖူးသေးပါ။အောကားထဲကကောငျမတှေ ဖငျခံတာတော့ကွညျ့ဖူးသညျ။သူတို့ဖငျ ခံနတောကွညျ့ပွီးကမြလညျး စမျးသပျကွညျ့ခငျြလာသညျ။ကိုကိုကလိုးမယျလို့ ပွောလာရငျတော့ မငွငျးမိမှာသခြောသညျ။ကိုကိုလီးတုတျတုတျရှညျရှညျ ကွီးနဲ့ဆိုဖငျပါ ပွဲနိုငျသညျ။လောလောဆယျတော့အဖုတျကအရမျးယှပွီးခံခငျြနပွေီ။ “အငျးးးးကိုကို လိုးပေးပါတော့ အီးးးးရှီးးးဟငျ့ ကိုကို လိုးပေးးးးး လိုး ပေးးးလို့” ကိုကိုကဘာမှပွနျမပွော။ကမြဖငျကိုသာအတငျးထိုးယကျနသေညျ။ အရညျတှလေညျးရှဲလာပွီး ပွီးခငျြလာသညျ။မနနေိုငျတော့ပါ။ ကိုကို့ဘကျ ကိုဖငျလေးအတငျးကော့ပေးကာစောကျရညျတှပေနျးထုတျ ပလိုကျတော့သညျ။ကမြပွီးတာကို ကိုကိုကအလှတျမပေး။ခကျြခွငျး အဖုတျလေးကိုသူ့ပါးစပျ ကွီးနဲ့ဖမျးငုံကာထှကျသမြှစောကျရညျတှေ အကုနျမြိုခနြတေော့သညျ။ပွီးသှားတော့ကမြခွမေခိုငျတော့။ အောကျကိုတဈဖွညျးဖွညျးလြောကကြာ ဖငျပူး တောငျးထောငျတဲ့ အသှငျပွောငျးသှားအောငျကိုကိုကထိနျးကိုငျပေးလသေညျ။ကမြ ဖငျလေးကိုအစှမျးကုနျပဈပွီးရခြေိုးခနျးကွမျးပွငျမှာပါးအပျကာ ငွိမျ နလေိုကျသညျ။အဲ့လိုအခြိနျဆိုကိုကို့အကွိုကျပေါ့ရှငျ။ကမြကို အရညျတောကျတောကျကအြောငျဆှ ပွီးအောငျမှုတျ ယကျ ကလိပွီးမှ အဖုတျကို သူ့လီးကွီး နဲ့မညှာမတာပဈပဈလိုးတတျတာသူ့အကငျြ့။
သူ့ဟာကွီးနဲ့က အဲ့လိုထကွှနမှေခံသာတာရှငျ့။နို့မို့ဆို မသကျသာဘူး။ ကမြအဖုတျလေးကိုထိုးဖွဲနသေလိုခံစားရအောငျလိုးတာရှငျ့။ကမြက အဖုတျကွီးပွီး ယှတာလညျးပါတာရှငျ ချချချ။လေးလအတှငျးကိုကို လိုးလှနျးလို့ အဖုတျလညျးနညျးနညျးတော့ကယျြခငျြနပွေီ။ဒါပမေယျ့ လိုးတိုငျးအဖုတျကွီးထဲသူ့လီးကွီး ကအပွညျ့အသိပျပါပဲရှငျ့။ခုလညျး သူ့လီးကွီးကိုအဖုတျအလယျမှာလြောထိုးပွီးကလိနပွေနျသညျ။ခုမှ မုနျတိုငျးထနျပွီးငွိမျကာစကမြထပျယှလာ ပွနျသညျ။ကိုကို့လီးကွီးနဲ့ အဖုတျကိုထိလိုကျတိုငျးကမြအမွဲလိုလိုကိုထနျလာရပါသညျ။ဒဈကွီးနဲ့ ဖငျဝကိုပါလာလာတနေ့သေညျ။တဈခကျြတဈခကျြဖငျဝ ကိုလိုးမလိုနဲ့ ဖိထညျ့သညျ။ဆှပေးနတေော့ကမြလညျးမနနေိုငျတော့။ “ကိုကို လိုးလေ ဘာလို့ကလိနတောလဲ ဟငျ့ ” “အလိုးခံခငျြနပွေီလား ခဈြလေး” “အှ နျးးးးး ခံခငျြနပွေီ လိုးပေးးး ဟငျ့ လိုးပေးးးးကိုကိုလီးကွီးနဲ့ ညီမလေးအဖုတျကိုလိုးပေး အားကွီးနဲ့ဆောငျ့ဆောငျ့လိုးပေးးး” “ဘုဘှတျဘှတျပလှတျပေါကျဗွှ တျဗွဈ” ကမြစကားလညျးဆုံးရောကိုကို့ကကမြအဖုတျထဲလအေနျသံမြိုးစုံ ထှကျအောငျ သူ့လီးကွီးလိုးသှငျးတော့သညျ။တဈခါတညျးအဆုံးကို ထိုးထညျ့ တာ။ကိုကိုလိုးလှနျးလို့ကယျြခငျြတဲ့အဖုတျထဲပွညျ့ကွပျနေ တော့သညျ။အဆုံးသှငျးပွီးတော့ တဈခကျြခငျြးနှဲ့နှဲ့ပွီးလိုးပေးသညျ။ ဖီးလေးနဲ့အေးဆေးအလိုးခံ ရတာကိုကွိုကျပမေယျ့သူအကငျြ့လုပျထား လို့ခပျကွမျးကွမျးလိုးပေးမှပိုပွီးထိမိသလိုဖွဈနပေါပွီ။
“ကိုကို ဆောငျ့ပေး မနှဲ့နဲ့တော့ အငျးးး အားးးးလိုးပေး ဆောငျ့ဆောငျ့ ကွမျးကွမျးလေးလိုးပေး ကိုကို လိုးလိုး” ကမြအတငျးလိုးခိုငျးတော့မှ ဆှလိုး လိုးနတေဲ့ ကိုကို ခပျကွမျးကွမျး ဆောငျ့တော့သညျ။ကမြလညျးဖငျကိုနောကျကော့ပဈပေးထားသညျ။ ကမြခါးကိုကိုငျကာတဖနျးဖနျးနဲ့လိုးပွီးမကွာဘူး ယှနတေဲ့ကမြ စောကျရညျတှပေနျးထုတျတော့သညျ။ကိုကိုကတော့ တလစပျကို တဖနျးဖနျးဆောငျ့နတေော့တာပါပဲ။ကမြမှာ၂ခြီဆကျတိုငျပွီးရသညျ။ ၂ခြီပွီးတော့ ရှကေို့ မှောကျကသြှားတဲ့ကမြအပျေါအသာခှကာဖွညျးဖွညျးလေးလိုးပေးရငျး ကြောတှကေိုစုပျနမျး ဂုတျတှပေါးတှေ နားရှကျတှအေပွငျ နှုတျခမျးလေးကိုလညျး စုပျနမျးပေးသညျ။ “အားးးကိုကို မီးပွီးပွနျပွီ အားးရှီးးးးးးး” “ကောငျးလိုကျတဲ့စပျပတျလေးကှာ တဈသကျလုံးလိုးပဈမယျ” “လိုး တဈသကျလုံးလိုးပေး မီး လကေိုကို့လီးကွီးကိုစှဲနပွေီ” “ဖငျကိုလညျးလိုးမယျနျော ခဈြလေး” “အငျး လိုးးးး မီးတဈကိုယျလုံး ကိုကို့အတှကျပဲ ကိုကိုကမီးရဲ့လငျပဲ” “အငျးပါ မယား လေးရယျ ထအုနျး ကိုကို့အပျေါတကျဆောငျ့အုနျး” “အငျး ဆောငျ့မယျ” ကိုကိုကသူ့လီးကိုကမြအဖုတျထဲကမထုတျဘဲ ကတျသီးကတျသတျနဲ့ ကမြကိုသူ့ အပျေါရောကျအောငျတငျသညျ။ကသီပမေယျ့ကမြလညျး ခုခြိနျမှာကိုကို့လီးကွီးကိုအဖုတျထဲကမထုတျလိုပါ။ကမြအပျေါရောကျ တော့ ကိုကိုကလကျ နောကျပဈပွီး ထိုငျနတော။ကမြကကိုကိုလညျပငျး ကိုဖကျပွီး တဈခကျြခွငျးဖိကြိတျကာပှတျရငျးအရသာခံနတော။ ပွီးမှ ဖငျကွီးမွှောကျမွှောကျပွီး ဆောငျ့ခမြှာလေ။ကမြအပျေါရောကျ တော့ကမြကွိုကျသလိုလုပျတာပေါ့ရှငျ။ကိုကို့ကိုနှုတျခမျးစုပျနမျးပွီး ဖကျထားတာ။ကိုကို့လီးကွီးအဖုတျထဲထညျ့ပွီး ထိုငျနရေတာ တုတျကွီး ထညျ့ခံထားရသလိုပါပဲရှငျ။ရငျခေါငျးအထိကိုရောကျနသေလိုပါပဲ။ ကိုကို ကမြနို့လေးတှကေိုစို့ပေးတော့ကိုကိုခေါငျးကိုအတငျး ဖကျထားမိသညျ။ကမြထပျရှလာပွီးကိုကို့ကိုဆောငျ့တော့သညျ။
“ဖတျဖတျဖတျဖတျဖတျဖတျ ကိုကို အီးးးးးရှီးးးးးကောငျးလိုကျတာ” ဒီတဈခါတော့ကိုကို့ကကော့ပေးပွီးကမြကပဲဆောငျ့သညျ။ကိုကိုက ဇိမျခံနတောပေါ့ ရှငျ။ကမြခပျကွမျးကွမျးပဲဆောငျ့ပဈရငျးကိုကိုနဲ့တူတူပွီးသှားသညျ။ “ခဈြလေးဆောငျ့ဆောငျ့ ကိုကိုပွီးတော့မယျ ကောငျးလိုကျတာကှာ ” “ဘှတျဘှတျ ဘတျဖှတျ ဖတျဖတျဖတျဖတျဖတျဖတျ ”“အား ပွီးပွီကိုကိုရေ အားးးကောငျးလိုကျတာ” “ကိုကိုလညျးပွီးပွီကှာ ကောငျးလိုကျတဲ့စပျပတျလေး” “အမွဲတမျး လိုးပေးနျောကိုကို” “အငျး လိုးပေးမယျ” ကိုကိုနဲ့ကမြဖကျပွီးအခဈြတှပွေညျ့ဝစှာနဲ့နှုတျခမျးခွငျးစုပျနမျး ကွသညျ။ခဏနားပွီးရခြေိုးခနျးထဲရောကျတာ ကွာနပွေီမို့ ထကွကာရခြေိုးကွသညျ။ရခြေိုးပွီးတော့ ဗိုကျကဆာလာတာသတိရသညျ။ ကိုကို့နဲ့ကမြ လမျးထိပျကကွေးအိုးဆိုငျမှာကွေးအိုးသှားသောကျ ကွ သညျ။ကမြတို့ကိုသိတဲ့လူတှအေမွငျမှာတော့သိပျခဈြကွတဲ့ မောငျနှမပေါ့ရှငျ။ကိုကိုကခှံ့ကြှေးလိုကျကမြကခှံ့ကြှေးလိုကျနဲ့ပေါ့။ကမြနဲ့ကိုကိုခဈြကွတာ တရပျကှကျလုံးကသိကွတယျလေ။မသိတဲ့သူတှကေတော့သမီးရညျးစားလို့ထငျကွမှာပါ။ကမြတို့ကတော့ ခဈြသူစုံတှဲလို့ပဲကိုယျ့ဘာသာသတျမှတျ ထားကွတာ။စားသောကျပွီး ပနျးခွံဘကျလမျးလြှောကျတယျ။ကိုကို့လကျကိုတှဲလှဲခိုမှီတှယျပွီး လြှောကျရတာကွညျ့နူးစရာပါ။ကိုကိုနဲ့ကမြ တဈသကျလုံး အိမျထောငျ မပွုဘဲ လူပြိုအပြိုအနနေဲ့ပဲနသှေားကွဖို့စိတျကူးထားတယျ။မလိုဘူး လေ။ကိုကိုကခုကမြယောကျြားဖွဈနပွေီပဲဟာ။မမေနေဲ့ဖဖေကေတော့ ကမြတို့ကိုအိမျထောငျပွုဖို့ပွောဖူးပမေယျ့ နှဈယောကျစလုံးဟိုဟိုဒီဒီ လြှောကျပွောထားပွီး ပတျရှောငျနကွေတယျလေ။ကိုကိုနဲ့ကမြက လူမသိသူမသိ လငျမယားဖွဈနတောမမေတေို့မှမသိဘဲကိုးးး။
“ညီမလေး ” “ရှငျ ကိုကို” “ကိုကိုဒီလိုလမျးလြှောကျရတာပြျောရဲ့လား” “ပြျောတာပေါ့ကိုကိုရဲ့ ကိုကိုကရော” “ကိုယျ့ခဈြသူလေးနဲ့တူတူမခှဲတမျးနရေတာမ ပြျောဘဲရှိမလား” “အိုးးးကိုကို လူတှနေဲ့လေ အိမျရောကျမှလေ နျော” “အငျး ဟုတျသားပဲ ကိုကိုသတိလှတျသှားလို့ ဟဲဟဲ ” “ဟှနျ့ ကိုကိုနျော မသိတာကွနေ တာပဲ ” ကိုကိုကလမျးလြှောကျစကားပွောနရေငျးကမြကိုနမျးဖို့လုပျလို့အတငျး တားလိုကျရသညျ။ပတျဝနျးကငျြမှာ လူတှနေဲ့လေ။မသိတဲ့သူတှဆေို ပွသ နာမရှိ။သိတဲ့သူ တှသှေ့ားရငျ ရှုပျကုနျမှာစိုးတယျလေ။အိမျ ရောကျရငျတော့ ကိုကိုစိတျကွိုကျပေါ့ရှငျ။ “အာ့ဆို အိမျပွနျစို့ လာ ကိုကိုမရတော့ဘူး” “ဟုတျ ပွနျမယျကိုကို” ကမြနဲ့ကိုကို ပနျးခွံကထှကျတော့ ကိုကို့ဘျောဒါတဈယောကျ နဲ့တှသေ့ညျ။ “ဟာ သားရီး ကိုကိုမောငျ ဘယျတှပြေောကျနတောလဲဟ ငါတို့ ဘကျတောငျမလာတော့ဘူး” “အေးကှာ ငါမအားလို့ကှ ပှဲရုံမှာခုရကျပိုငျးကုနျတှအေဝငျမြားနလေို့. အလုပျတှရှေုပျနတောအောငျကွီး” “အေးပါကှာ နောကျနလေ့ာခဲ့အုနျး ဒါမငျးကောငျမလေးလား ငါ့မိတျဆကျပေးအုနျးလကှော” “ဒါ ငါ့ညီမလေးပါကှ ခြိုခြိုအောငျလကှော မငျးကလညျး” “ဟာ အေးဟုတျ သားကှ ခြိုခြိုအောငျက တျောတျောထှားလာတာပဲ လှလညျးလှလာတယျ ငါမှတျတောငျမမှတျမိဘူး ” “အေး ခုမငျးအလုပျပွနျလာတာလား ” “အေးကှ အလုပျကဒီနနေ့ောကျကတြယျ” “ငါတို့မောငျနှမလညျး လမျးထိပျမှာမုနျ့ထှကျစားရငျး ဒီဘကျကို လမျးလြှောကျထှကျလာတာ” “အေးအေး နောကျရကျ ငါတို့ ဘကျလာအုနျးလကှော ခု ငါလညျး နောကျကနြလေို့ လဈပွီကှာ” ဟိ ကိုကို့ဘျောဒါက ကမြကိုမမှတျမိဘူး။မငျးရညျးစားလားတဲ့ ချချ။
အဲ့လိုတကယျဖွဈခငျြလိုကျတာ။လူမသိသူမသိခဈြသူပါကိုကွီးရဲ့လို့ ပွောခငျြလိုကျတာ။တကယျပွောထှကျလာတာကတော့ တဈမြိုးပါ။ “ကိုကို မီးတို့ အနအေထိုငျဆငျခွငျမှရမယျနျော” “ဘာလို့လဲခဈြလေးရဲ့” “ခုနကပဲကိုကို့ဘျောဒါ ညီမလေးကို ကိုကိုစျောလို့ထငျသှားတာလေ” “ထငျပါလဘောဖွဈလဲခဈြ လေးရ” “အို ကိုကိုကလညျး မကောငျးဘူးလေ သိရဲ့သားနဲ့ ” “အငျးပါ ကိုကိုသိပါတယျ နှဈယောကျထဲရှိရငျရော” “အဲ့ကတြော့ ကိုကို့သဘောပေါ့ ” “ဟငျးးး မလှတျလပျလိုကျတာကှာ နှဈယောကျတညျးခရီးထှကျပွီး အေးဆေးလှတျလှတျလပျလပျနလေိုကျခငျြတယျ လာမယျ့ဒီဇငျဘာ ကရြငျ ခရီးသှားမယျကှာ လိုကျမှာလား ခဈြလေး”“အငျးလိုကျမယျလေ ဘယျကိုသှားမလဲကိုကို” “အာ့တော့ တဈဖွညျးဖွညျးစဉျးစားကွတာပေါ့ ခုတော့ အိမျအမွနျပွနျစို့ ကိုကိုမရ တော့ဘူး” “လမျးမလြှောကျခငျြတော့ဘူးကိုကိုရယျ ခွထေောကျညောငျးလာပွီ” “အာ့ဆိုကိုကိုကြောပိုးမယျလာ” “လူတှနေဲ့လေ ကိုကိုကလညျး” “လာပါ ခဈြလေးရ မသိတဲ့သူတှကေခဈြသူတှလေိုမွငျပွီး သိတဲ့သူတှကေတြော့ သိပျခဈြကွတဲ့မောငျနှမလို့ မွငျလိမျ့မယျ ဂရုစိုကျမနနေဲ့တကျ ” “အာ့ဆိုတကျမယျ”
ကိုကိုကမြကိုကြောပိုးပွီးအိမျကိုပွနျလာသညျ။ကမြဝလာတယျ ဆိုပမေယျ့ သနျမာတဲ့ကိုကိုအတှကျအေးဆေးပါ။ကမြကကိုကို့ကို ခဏခဏကြောပိုးစီး နကေလြေ။ပါးခငျြးကပျပွီးကိုကို့ပါးကိုနမျးသလို ကိုကိုကလညျးနမျးတယျ။စကပျအောကျကစှငျ့ကားနတေဲ့ကမြဖငျတှေ ကိုလညျးထိနျးကိုငျရငျးညှဈပေးလာ သညျ။ကမြနို့တှကေလညျးကိုကို့ ကြောနဲ့ဖိပွီးပိပွားနပွေီ။လူလဈတာနဲ့ဖငျကိုညှဈကိုငျလာတော့ကမြ ယှလာပွီးအဖုတျကအရညျစို့လာသညျ။လမျးမှာ မသိ တဲ့လူတှကေ ကိုကိုပွောသလိုပဲ ဟိုမှာကွညျ့စမျးသူတို့အတှဲခဈြနလေိုကျကွတာတဲ့။
သိတဲ့သူတှတှေတေ့ော့ ဒီမောငျနှမတျောတျောခဈြတာပဲ ဟိုမှာကွညျ့ စမျး မငျးတို့တှနေဲ့ကှာပါ့တဲ့။အဲ့လိုပွောသံလေးတှကွေားရ တော့စိတျထဲကွညျနူးမိတာ အမှနျပဲ။ခွံရှရေ့ောကျတော့ တံခါးတှဖှေငျ့ဝငျပွီးပွနျပိတျကာအိမျထဲဝငျလာခဲ့သညျ။ ကိုကိုက ကမြအခနျးကိုတနျးသှားပွီး ကမြကိုမှယောပျေါခပြေးကာ စ ကပျဆှဲခြှတျပွီး အဖုတျလေးကိုတနျးယကျတော့သညျ။ကမြလညျး ကိုကိုခြှတျရလှယျအောငျဖငျလေးကော့ပေးလိုကျသညျ။ ကိုကိုယကျရလှယျအောငျပေါငျ လေးကိုဆှဲကားပွီးဖကျထားကာအသငျ့ အနအေထားပွငျပေးထားလိုကျသညျ။ကိုကိုကအဖုတျမှာမကျြနှာအပျ ပွီး ရှလူးရှလူးနဲ့အသံတှမွေညျအောငျကို ယကျသညျ။တဘောကျဘောကျမွညျအောငျလညျး အဖုတျကိုလအေားနဲ့စုပျသညျ။ ကိုကိုကအမှေးရှငျးနတောကွိုကျလို့ ကမြအမှေးတှပေုံမှနျရိတျပေးရ သညျ။ကမြအဖုတျလေးကခုလိုခြိနျဆိုမှာဖူးတငျပွောငျကားပွီး အရညျရှဲနတေော့လိုးခငျြစရာလေးဖွဈနတောပေါ့ရှငျ။ကမြအဖုတျကို ပါးစပျနဲ့တစေု့ပျပွီး စိမျပွနေပွကေိုယကျနတေော့သညျ။ဖငျဝလေးကို လညျးဖငျကိုဖွဲပွီးယကျပေးသညျ။ကိုကိုဖငျလိုးမယျဆိုလညျးအလိုးခံ ဖို့အသငျ့ပါပဲရှငျ။တဈခါမှဖငျမခံဖူး တော့ကွောကျတာတော့ကွောကျ တယျရှငျ။ကိုကိုလီးကွီးနဲ့ဆို သူလိုးပုံနဲ့ဖငျကှဲမှာလေ။ “အီးးးကိုကို အငျးးးဟငျးးးး မနနေိုငျတော့ဘူး လိုးပေးတော့” “ဖငျ လိုးမယျနျောခဈြလေး” “အငျးး ခုဖငျလိုးနဲ့အုနျး အဖုတျကိုအရငျလိုးပေးအုနျး” ကိုကိုကအဖုတျယကျနရေငျး သူ့ဘောငျးဘီကိုခြှတျနသေညျ။
မတျတပျရပျလိုကျတော့ လီးကွီးကတရမျးရမျးနဲ့ထှကျလာသညျ။ ကိုကိုဂှငျးထုပွီးမှယေ့ာပျေါတကျလာကာကမြပျေါတကျခှသညျ။ ကမြခေါငျးတဈဖကျစီမှာ ဒူးထောကျလိုကျတော့ သူ့လီးကွီးကကမြ မကျြနှာပျေါဝဲနသေညျ။ကမြလညျးလီးစုပျကတော့မှာသိလို့ပါးစပျကို အသာဟကာ ကိုကို့ခရမျးသီးကွီးကိုဖမျးငုံ ပလိုကျသညျ။ငုံရုံငုံပေးထား တော့အလိုကျသိစှာပဲကိုကိုကကမြပါးစပျလေးကိုလိုးသညျ။သူ့လီးကွီး ကိုအဆုံးထိမစုပျနိုငျပါ။ကွီးပွီးရှညျတော့ ပါးစပျဟရ တာအာညောငျး သလို အာခေါငျကိုလညျးထိထိနသေညျ။အာ့တောငျကိုကိုစိတျတငျးပွီ ဆို သူ့ဟာကွီးကလညျခြောငျးထဲအထိဝငျလာတတျသညျ။ကမြမှာ မကျြရညျဝဲပွီးအသကျရှုရပျမတတျကိုခံရတတျသညျ။ခုတော့လီးကို တဈဝကျလောကျပဲသှငျးပွီးစုပျပေးနသေညျ။ကိုကိုကလညျးကမြစုပျ ပေးသလောကျနဲ့ ပဲငွိမျခံနသေညျ။စုပျပေးနရေငျးကိုကို့လီးကွီးက တဖွညျးဖွညျး ကွီးလာပွီးကမြပါးစပျထဲပွညျ့လာသညျ။ “အုအုဝု အှနျးး အုအု ဝူးးး” “ရပွီခဈြလေး လိုးစို့” “အုအုပွှတျ အီးးးကိုကိုဟာကွီးစုပျရတာလညျးမေးညောငျးလိုကျတာ” “အာ့ကွီးပဲကွိုကျနတောမှတျလား” “ဟီး ဟုတျတယျ ညောငျးသာညောငျးတာ စုပျမ ဝဘူး ခုလိုးမှာလား” “အငျး လိုးမှာပေါ့ အဖုတျလေးရော ဖငျစူစူလေးကိုရောလိုးမယျ” “အငျးးလိုးးး ကိုကို ဖငျလိုးရငျနာမှာ ဖွညျးဖွညျးတော့လိုးနျော” “အငျး ပါခဈြလေးရဲ့ ဖွညျးဖွညျးခငျြးလိုးမှာ” “ဗွဈတဈတဈ ပွှတျဘလှတျ ဘလှတျ ဘုဘု” အရညျတှအေိုကျထှနျးပွီးရှဲနတေဲ့ကမြစပျပတျလေးထဲကိုကို့လီးကွီး တငျးကွပျကွပျနဲ့ဝငျလာသညျ။အဆုံးထိမထညျ့ဘဲတဈဝကျထိပဲထညျ့ ပွီးတဇှပျဇှပျနဲ့လိုးတော့သညျ။ကမြလညျးဖငျလေးကော့ကော့တငျပေး ရငျး ကိုကို အလိုးကိုခံနမေိသညျ။အဆုံးထိမဝငျတော့အားမရ။ ဝငျတော့လညျး သူ့ဒဈကွီးကသားအိမျဝထောကျလို့ နာသညျ။နာလညျး ကိုကို့ကိုအဆုံးထိထညျ့စေ တော့သညျ။ “ကိုကို အဆုံးထိလိုးလေ အီးးးးးရှီးးအားမရဘူးး အားးးးလိုးလိုး ကွမျးကွမျးလေးလိုးပေး ” “ဖောငျးဖောငျးဖောငျးဖောငျး ဒုတျဒုတျ ဗွှတျဗွဈဗွိ ဗွိ ဘလှတျ” ကိုကိုနဲ့ကမြ မမေတေို့ပွနျလာတဲ့အထိလိုးဖွဈကွသညျ။ဖငျကိုတော့ ဒဈပဲအသှငျးခံပွီးဆကျမလိုးခိုငျး။ကိုကိုလီးကွီးကကွီးလှနျးသညျ။
ကမြဖငျလေးထဲတုတျကွီးနဲ့ထိုးနသေလိုပဲ။အရမျးလညျးနာတာ။ အာ့နဲ့ဖငျကှဲမှာစိုးလို့ဆကျမလိုးခိုငျးဘူး။ကိုကိုကလညျးနောကျနေ့ အခြိနျရမှ ဖငျကိုသခြော ကလိုငျးပွီးလိုးမယျတဲ့လေ။ခုကအခြိနျလညျး သိပျမရဘူး။မမေတေို့ပွနျလာတော့ ကမြဖငျပူးတောငျးထောငျပွီး ကုနျးပေးနတော။ကိုကိုကသူ့ဝိတျနဲ့တကျဖိ ပွီး အသားကုနျလိုးနတော။ ကမြပွီးသှားလို့ ရှကေို့ဟတျထိုးကတြုနျး ကိုကိုကခါးလေးကိုဆှဲပွီး လိုးနတော။အဲ့အခြိနျ ခွံရှကေ့ ကားဟှနျးသံကွားတာနဲ့ တနျးလနျးဖွဈ ပွီး တံခါးသှားဖှငျ့ပေးရရှာတယျ။ကိုကိုသနားစရာ။စှပျကယျြနဲ့ ဘောငျးဘီကောကျဝတျပွီးပွေးတာ။ကမြလညျး ဖငျဘူးတောငျး ထောငျ လကျြလေးဇိမျခံနပေမေယျ့အားယူကုနျးထပွီး။အဝတျတှဝေတျ အခနျးထဲသိမျးဆညျးနလေိုကျသညျ။ “ဟဲ့ သမီး ညကွီးမိုးခြုပျမှဘာတှလေုပျနလေဲ” “အခနျး ရှငျးနတောအမေ အလုပျရှုပျနတေော့မရှငျးဖွဈလို့” “အေးအေး သမီးအဖမေူးလာတယျ သားကွီးအခနျးထဲပို့နတေယျ” “အမရေောသောကျသေးလား ” “အ မကေဝိုငျပဲနညျးနညျးသောကျလာတာပါ နညျးနညျးတော့မူးတယျ မသေ့မီးလေးကိုလာကွညျ့တာ လာပါအုနျးအမဆေီ့” အမကေအခနျးထဲဝငျလာပွီး ကြ မကိုဖကျနမျးသညျ။ “သမီးကလညျးခြှေးတှနေဲ့ပါလား သိပျမရှငျးနဲ့တော့လေ ခြှေးတိတျအောငျလုပျပွီးရခြေိုးအုနျး” “ဟုတျ ပွီးပါပွီ အမေ ” ကမြလညျးအ မကေို့ပွနျဖကျနမျးကာ အောကျထပျလိုကျပို့သညျ။ အမကေအသကျ၄၅ကြျော၅၀နားကပျနပေမေယျ့လှပစိုပွနေဆေဲ။ ကမြကိတျတယျဆိုတာအမကေို့ဘယျ မှီမလဲ။အမတေို့အခနျးရောကျ တော့ ကိုကိုကအဖကေို့စောငျခွုံပေးနသေညျ။အမကေို့လညျး အဖနေ့ား သိပျကာစောငျခွုံပေးပွီး ကမြနဲ့ကိုကိုပွနျထှကျလာ သညျ။
ကိုကိုကကမြကိုဖကျပွီးဖငျလေးကိုလာညှဈနသေညျ။သူမဝသေးတာ သိတယျလေ။ကမြလညျး ကိုကို့လီးကိုကိုငျကာညှဈပေးပွီးအပျေါထပျ ချေါလာခဲ့ သညျ။အမနေဲ့အဖေ မူးပွီးအိပျနပွေီမို့ ကမြနဲ့ကိုကို ဒီည အေးဆေးလိုးလို့ရပွီ။အခနျးထဲရောကျတာနဲ့ လော့ခပြွီး ကိုကိုရှေ့ ဒူးထောကျကာ ဘောငျးဘီဆှဲ ခြှတျသညျ။ မာယောငျယောငျဖွဈနတေဲ့ လီးကိုငုံစုပျပွီးဂှငျးထုပေးတော့ခဏအတှငျးမာတောငျလာသညျ။ ကမြကိုနရောမှာတငျဖငျထောငျခိုငျးကာစကပျ လှနျပွီးကြုံးလိုးတော့ သညျ။အတှငျးခံကခုနကတညျးကမခြှတျထားတော့ ကှတျတိပါပဲ။ ကမြအဖုတျလေးထဲလီးကွီးခပျကွမျးကွမျးဝငျလာပွီးတော့ ဆောငျ့ဆောငျ့လိုးတာ။အောငျ့တောငျအောငျ့သှားသညျ။ခုနကပွီး ထားတဲ့အရညျတှရှေိနလေို့ခံသာတာ။အခကျြ၅၀လောကျ ဆကျတိုကျခပျကွမျးကွမျးလိုး ပွီးအဖုတျထဲလရညျ ပနျးထညျ့ကာ ကိုကိုပွီးသှား တော့သညျ။ကမြလညျးကိုကိုလရညျပနျးတော့အခြိနျမှီလေးပဲ ပွီးသှားသညျ။ ကိုကိုကကမြကြောပျေါမှေး နကောဇိမျယူနသေညျ။ “အငျးးးကိုကို လေးလာပွီ ထတော့” “မဝသေးဘူးကှာ လိုးခငျြသေးတယျ” “ကိုကိုကလညျး ညီမလေးအဖုတျကြိနျးနပွေီ နောကျနေ့ မှလေ နျော” “မရဘူး လိုးအုနျးမှာ” “ဟှနျ့ နာနပွေီကိုကိုရဲ့ ကိုကိုမဝသေးရငျ လီးစုပျပေးမယျလေ” “အငျးစုပျပေးလေ မီးလေးကိုသနားလို့နျော နို့မို့ဆိုတဈည လုံးလိုးမှာ” “တကယျနာနလေို့ပါကိုကိုရယျ နျော နျော” “အငျးပါ ကဲ ထ စုပျပေး” “ဟုတျ” ကိုကို ကမြကိုယျပျေါကနထေပွီး ကမြပါးလေးကိုနမျးသှားကာ ကုတငျပျေါမှာထိုငျလိုကျသညျ။ကမြလညျးမတျတပျမရပျတော့ဘဲ ကိုကို့ရှကေို့လေးဘကျထောကျပဲသှားလိုကျသညျ။မိုးပျေါထောငျနတေဲ့ ကိုကို့လီးကွီးကို နှုတျခမျးလေးနဲ့ပွှတျကနဲ စုပျနမျးလိုကျသညျ။
ကမြအရညျတှရှေဲနတေဲ့လီးကွီးကပွောငျလကျပွီးမာနျဖီနသေညျ။ ကမြလညျးပါးစပျနဲ့ဝငျသလောကျစုပျပေးကာလီးတဈခြောငျးလုံး လြှာနဲ့ယကျ ဂှေးဥတှေ ကိုပါငုံစုပျပေးသညျ။အစကမစုပျတတျဘူး။ ကိုကိုပဲဘယျလိုလုပျဘယျလိုကိုငျဆိုပွီးသငျပေးထားတာ။ကိုကိုလိုးမဝ သေးပမေယျ့ ကမြအဖုတျကအောငျ့နေ တော့ဆကျမခံနိုငျ။ကိုကို့ကို သနားတာနဲ့သသေခြောခြာပဲ စုပျပေးနမေိသညျ။ကိုကိုကကမြကိုငုံ့ ကွညျ့ပွီး ကမြနို့လေးတှကေိုဖှဖှလေးဆုပျကိုငျပေး နသေညျ။စုပျရငျးစိတျပါလာတော့ လီးကွီးကို လညျခြောငျးထိရောကျအောငျသှငျးမိ သညျ။ကိုကိုကလညျးကမြခေါငျးလေးကိုငျကာဖိဖိခပြေးသညျ။ “အု အှ တျ ဝု အဟှတျ အုအုပွှတျ ဝူးးး ပွှတျ ပွှတျပွှတျ ပွှတျ ” ၅မိနဈလောကျစုပျပေးလိုကျတော့ ကိုကို ကမြခေါငျးလေးကိုမလှတျဘဲ ဖိထားပွီးလရညျတှတေဈဗွ ဈဗွဈနဲ့ပနျးထညျ့တော့သညျ။ကိုကိုပွနျ လှတျပေးပွီး သူ့လီးကွီးပါးစပျထဲကထုတျမှပဲကမြလညျးအသကျရှူရ တော့သညျ။အသကျကိုမနညျးရှူနတေဲ့ကြ မကိုအပျေါဆှဲတငျပွီး နှုတျခမျးလေးကိုစုပျနမျးကာသူ့ရငျခှငျထဲဖကျထားသညျ။ “ခဈြတယျညီမလေးရယျ ကိုကိုတို့ဘယျတော့မှမခှဲဘူးနျော” “ညီမလေး လညျးတူတူပါပဲ ဘယျတော့မှကိုကိုနဲ့မခှဲဘူး ကိုကို့ကိုပဲခဈြမယျ ကိုကိုကညီမလေးရဲ့ခဈြသူ လငျယောကျြားပဲ” “ညီမလေးကလညျးကိုကို့မိနျးမပါပဲကှာ အရမျးခဈြတယျနျော” “အငျးအရမျးခဈြတယျကိုကို” ကိုကိုနဲ့ကမြ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျဝေးသှားမှာစိုးသညျ့အလား တငျးကွပျစှာဖကျထားမိကာမှေ ယာပျေါလှဲခကြွတော့သညျ။
ကမြလေ တားဆေးတှသေောကျလို့လားသိဘူး ဝလာတယျ။ကိုကိုက နတေို့ငျးလိုလို အခြိနျရတာနဲ့လူလဈရငျတကျလိုးနကွေလေ။အဲ့တော့ သန်ဓတေားဆေး ကဒျလေးကိုကို့ကိုဝယျခိုငျးပွီးသောကျရတယျ။ မဟုတျရငျကိုကိုလိုးပုံနဲ့ဗိုကျထှကျလာမှာအသအေခြာပဲ။မမေတေို့ သိရငျပွသနာအကွီးအကယျြတကျမှာ တော့ကြိနျးသတေယျ။ဒါပမေယျ့ အဆူအဆဲခံရရုံသာ။မိသားစုထဲမှာကကိစ်စမရှိ။တဈကယျလို့အမတေို့ သိရငျတောငျ အပွငျကိုထုတျပွောမှာမဟုတျဘူး လေ။အမတေို့သိပွီးကမြနဲ့ကိုကို့ကိုတားလညျး ဆကျပွီးလြှောကျမှာပဲ။ပတျဝနျးကငျြသိ ကုနျရငျတော့အရှကျတဈကှဲဖွဈပွီးမိသားစုသိက်ခာကရြမယျ့ကိစ်စ လေ။အဲ့တော့မနကျတိုငျးနိုးတာနဲ့ဆေးကိုသတိတရနဲ့ကိုသောကျရတယျ။ ကိုကိုကလညျးအမွဲသတိပေးသညျ။ကမြနဲ့ကိုကိုလိုးတာအမတေို့မသိ အောငျ မ ရိပျမိအောငျလညျးနကွေတယျ။ဆေးခနျးသှားပွီး ဆေးထိုးဖို့ကလညျးကမြ မရဲတငျး။ပွီးခဲ့တဲ့လက ရာသီသှေး လာတာနောကျကလြို့ နှဈယောကျစလုံး ထိတျလနျ့ပွီး ကိုယျဝနျရှိမရှိစဈကွညျ့ရသေးသညျ။ကိုယျဝနျမရှိမှနျးသိမှဘဲ စိတျပူနတောတှလြေောကရြသညျ။ကိုယျဝနျမရှိသေးပမေယျ့ ဘေးထှကျဆိုး ကြိုးအနနေဲ့ကမြဝလာတယျ။အရငျကဗိုကျခေါကျမရှိ ခပျြကပျနတေဲ့ကမြ ခုဆိုဗိုကျခေါကျ၂ခေါကျနဲ့။ခုနောကျပိုငျး အစားတှအေရငျကထကျစားလာတာ ကွောငျ့လညျးပါတာပေါ့။ ဆံပငျအုံကောငျးတဲ့ကမြဆံပငျတှကြှေတျလာတယျ။ဟိုတဈပတျကဆို ဆံပငျတှကြှေတျလို့ ကြောလညျလောကျဆံပငျကို ဂုတျဝဲ လေးညှပျ ပလိုကျတယျ။မမေတေို့ကိုတော့အိုကျလို့ပေါ့။ကိုကိုကတော့သိတယျ။ ဆံပငျဂုတျဝဲလေးနဲ့ဆိုတော့ကမြပိုတောငျငယျသှားသေးတယျလို့ တောငျ ပွောသေးတယျ။ကိုကိုကလိုငျးပျေါမှာ sexy accဖှငျ့ပွီး အငျးစကျအကွောငျး အကိုတဈယောကျနဲ့ဆှေးနှေးရငျးကမြနဲ့ကိုကို့ အကွောငျးကိုတိုငျပငျဖွဈတယျ လို့ပွောတယျ။ကမြလညျး ကိုကို့ကိုဘာလို့ ကိုယျ့အကွောငျးသူမြားကိုသှားပွောရလဲလို့စိတျဆိုး မိသေးတယျ။အဲ့အကိုက ကိုကို့ကိုအကွံတှပေေးတယျ။ ဆောငျရနျ ရှောငျရနျတှလေညျးပွောပွတယျ။သန်ဓတေားဆေးနဲ့ပတျသတျပွီးတော့ လညျးဆှေးနှေးဖွဈတယျလို့ပွောတယျ။ဟိုနကေ့လညျး ဆေးသောကျ ရ မယျ့အလုပျ ဆေးကဒျကိုအမတှေနေို့ငျမယျ့ရနျကနဝေေးအောငျ လကျမောငျးထဲထညျ့ပွီးသုံးရတဲ့ Implant ဆိုတဲ့ပစ်စညျးလေး အကွောငျးပွောပွတယျ။ Implantဆိုတာ မီးခွဈဆံလောကျရှိတဲ့ ဟျောမုနျး၂မြိုးပါတဲ့ ပလကျစတဈသားဆကျခွားဆေးတဈမြိုးလို့ ပွောတယျ။တဈခါထညျ့ထားရငျ ၄နှဈလောကျခံ တယျလို့ပွောတယျ။ကမြနဲ့ကိုကိုလညျးစိတျဝငျစားပွီး အဲ့နညျးကိုသုံးဖို့လလေ့ာခဲ့ကွတယျ။
အဲ့နညျးကလူသိနညျးသေးတယျလို့ပွောတယျ။တကယျ့ကို အကြိုးရှိစမေယျ့နညျးလေးပါပဲ။အဲ့အကိုရှာဖှပွေီး ပေးပို့သမြှကိုပွနျလညျမြှဝလေိုကျပါတယျ။ “လကျမောငျးတှငျးထညျ့ သားဆကျခွားပစ်စညျးအကွောငျး” (Implant) လကျမောငျးအရပွေားအောကျမှာ ထညျ့ထားရတဲ့ သားဆကျခွားပစ်စညျးတဈမြိုးပါ။ ဟျောမုနျးနှဈမြိုးပါဝငျပွီး မီးခွဈဆံအရှယျအစားလောကျ ရှိတဲ့ ပလဈစတဈအပြော့ခြောငျးလေး ဖွဈပါတယျ။ ၃နှဈခံ၊ ၄နှဈခံ၊ ၅နှဈခံရယျလို့ ရှိပွီး ၃နှဈခံက တဈခြောငျးတညျး ထညျ့ရပါတယျ၊ ၄နှဈခံနဲ့ ၅နှဈခံကတော့ နှဈခြောငျး ဖွဈပါတယျ။ကိုယျဝနျရတယျဆိုတာ အမြိုးသမီးခန်ဓာကိုယျထဲက မမြိုးဥနဲ့ အမြိုးသား ဆီက သုကျပိုးနဲ့ ပေါငျးစပျမိတဲ့အခါ ဖွဈလာတာပါ။ ဒီပစ်စညျးလေးကတော့ အမြိုးသမီးရဲ့ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ မမြိုးဥမကွှအေောငျ တားဆီပေးပါတယျ။ ဒီတော့ အမြိုးသားဆီက သုကျပိုးတှေ ဝငျလာပမေယျ့ ကိုယျဝနျမရတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပါ။ အဲဒီအပွငျ သားအိမျခေါငျးကိုခြှဲပဈြစခွေငျးအားဖွငျ့လညျး သားအိမျ ခေါငျးကို ဖွတျပွီးမှ မမြိုးဥနဲ့သှားပေါငျးရမယျ့ သုကျပိုးတှကေို မဝငျနိုငျအောငျ တားဆီးပေးပါတယျ။ ဘယျလိုထညျ့ပေးတာလဲ? အသေးစားခှဲစိတျမှုလေး တော့ လုပျရပါတယျ။ ခှဲခနျးတှဘောတှတေော့ ဝငျစရာမလိုပါဘူး။ မထညျ့ခငျမှာ လကျမောငျးကို နရောမှတျပါတယျ။ အဲဒီနရောအတိုငျးလေး ထုံဆေးထိုး မယျ။ ထုံသှားပွီ၊ ဘာမှမသိတော့ဘူးဆိုတော့မှ ထညျ့ပေးတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကွောကျစရာ မလိုပါဘူး။ ဓါးကလညျး လကျသညျးခှံတဈဝကျ လောကျ အရှယျပဲရှိပါတယျ။ ပွီးသှားရငျလညျး ခြုပျရိုးတှနေဲ့ ပွနျခြုပျတာ မဟုတျပါဘူး။ ဒီအတိုငျး အနာကပျခှါလေးနဲ့ပဲ ကပျပေးလိုကျတာပါ။
ထညျ့ပွီးသှားရငျတော့ (၅)ရကျတိတိ အဲဒီနရောကို ရမေစိုအောငျ ထားရပါမယျ။ အညှျောရှောငျရတာ၊ အနားယူရတာတှေ လုပျစရာ မလိုပါဘူး။ ထညျ့ပွီးစ ရကျပိုငျးလောကျ ပွငျးပွငျးထနျထနျ မလှုပျရှားရငျ ရပါပွီ(မီးဖိုခြောငျမှာဓားရှတဲ့ဓားရာကမှ ကွီးဦးမယျဒါကဒဏျရာလို့တောငျမဆိုပါဘူး) ထိရောကျမှုအရှိ ဆုံး သားဆကျခွားနညျးတဈခုပါ အသုံးပွုပွီး ပထမတဈနှဈအတှငျးမှာ ကိုယျဝနျရနှုနျးက အမြိုးသမီးအယောကျတဈသောငျးမှာ (၅)ယောကျသာ ရှိပါ တယျ။အားသာခကျြတှကေ ဘာတှလေဲ လကျမောငျးတှငျးထညျ့ထားရတာ ဖွဈတဲ့အတှကျ ပြောကျသှားမလား၊ ထှကျကသြှားမလား စိတျပူနစေရာ မလို ဘူး။ စမျးကွညျ့လို့လညျးရတယျ၊ မွငျလညျးမွငျနရေတယျ။ ဒီပစ်စညျးက (၃)လခံထိုးဆေးနဲ့ ပါဝငျတဲ့ဟျောမုနျးခငျြး အတူတူပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ (၃)လခံဆေး ထကျစာရငျ ဒီပစ်စညျးမှာ အားသာခကျြ(၄)ခကျြ ရှိပါတယျ။ ထိရောကျမှု ပိုကောငျးတယျ။ နှဈရှညျခံတယျ။ ဒီတော့ အလုပျရှုပျသကျသာတယျ။ (၃)လတဈခါ ဆေးထိုးနစေရာ မလိုတော့ဘူး။ (၃)လခံထိုးဆေးက သှေးပေါငျခြိနျ(၁၆၀)အထကျ ထိုးဖို့မသငျ့တျောပမေယျ့ ဒီပစ်စညျးကတော့ ထညျ့လို့ရတယျ။ သူ့ထကျစာ ရငျ သားအိမျတှငျးထညျ့ပစ်စညျးကတော့ ပိုသငျ့တျောတာပေါ့။ (၃)လခံဆေးက ဆေးထိုးရပျလိုကျပမေယျ့ အရှိနျကနျြတတျတယျ။ လုံးဝကို မရနိုငျတော့တာ မဟုတျပမေယျ့ ကိုယျဝနျပွနျရဖို့ လအနညျးငယျစောငျ့ရတတျတယျ။ ဒီပစ်စညျးကတော့ စောငျ့စရာမလိုဘူး။ ဒါကွောငျ့ ခုမှအိမျထောငျကစြ၊ ကလေးတဈခါမှ မမှေးဖူးသေးတဲ့သူတှေ စိတျခလြကျခြ အသုံးပွုလို့ရပါတယျ။
အားနညျးခကျြတှဆေိုးကြိုးက ဘာတှလေဲ ထညျ့ပေးမယျ့ ဆရာဝနျ၊ ဆရာမ၊ သို့မဟုတျ ကြှမျးကငျြသူရဲ့ အကူအညီလိုတယျ။ ရာသီသှေး မပျေါတတျဘူး။ သူ့အာနိသငျတဈခုက သားအိမျနံရံ ထူထဲမှုကို တားဆီးပေးတယျ။ မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ တဈလတဈခါ သားအိမျနံရံက ထူထဲလာ တယျ၊ ဘာလို့ဆိုတော့ မမြိုးဥနဲ့ သုကျပိုးနဲ့ပေါငျးပွီး သန်ဓမြေားအောငျသှားခဲ့ရငျ သားအိမျမှာ သန်ဓတေညျနိုငျအောငျလို့။ အဲဒီလို သန်ဓအေောငျမသှားတဲ့အခါ ခုနက ထူထဲထားတဲ့ သားအိမျနံရံက ကှာကတြယျ။ အဲဒါကို ရာသီလာတယျလို့ ချေါတယျ။ အခု သူက အဲဒီသားအိမျနံရံကို ထူမလာအောငျ လုပျပေးလိုကျ တော့ အောကျကို ဘာမှကှာကလြာစရာ မရှိတော့ဘူး။ ဒီတော့ ရာသီသှေးလညျး မဆငျးတော့ဘူးပေါ့။ ဆိုလိုတာက သှေးမပျေါတာဟာ အထဲမှာ အပုပျတှေ အောငျး၊ အလုံးတှတေညျ၊ ကငျဆာဖွဈမှာမဟုတျဘူး၊ သှေးအနနေဲ့ ဆငျးလာစရာမရှိလို့သာ ဖွဈတယျ ဆိုတာလေး သိစခေငျြပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သှေးမပျေါ တာ စိတျပူစရာ မလိုဘူး။ စိတျအေးလကျအေး နလေို့ရတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျမက သှေးပျေါမှကွိုကျတာ ဆိုရငျတော့ ဒီနညျးလမျးကို ရှေးခယျြဖို့ စဉျးစားစေ ခငျြပါတယျ။ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးတှကေဘယျလိုရှိလဲ ဟျောမုနျးပါတဲ့အတှကျ ဟျောမုနျးကွောငျ့ဖွဈတဲ့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးတှေ ခံစားရနိုငျပါတယျ။ ခေါငျး မူးတာ၊ ဇကျကွောတကျတာ၊ ပြို့အနျတာ၊ ကိုယျအလေးခြိနျ အပွောငျးအလဲဖွဈတာ၊ ရငျသားတှတေငျးပွီး နာတာ၊ ဒါတှဖွေဈနိုငျပါတယျ။ မသုံးစှဲသငျ့သော အခွအေနမြေား ရငျသားကငျဆာ (Breast cancer) ၊ ခွထေောကျတို့ အဆုတျတို့မှာ သှေးကွောပိတျတာ (Deep vein thrombosis) ၊ အသညျးရောဂါ (Liver diseases) နဲ့ ပုံမမှနျသှေးဆငျးနတေဲ့သူတှေ (Irregular bleeding) ဆို အသုံးပွုလို့ မသငျ့တျောပါဘူး။
ဝနတေဲ့သူတှလေညျး အသုံးပွုလို့ရပါတယျ။ တဈခုပါပဲ၊ ကိုယျအလေးခြိနျ (၁၇၆)ပေါငျအထကျ ဖွဈနခေဲ့မယျဆိုရငျတော့ သကျတမျးတဈနှဈလြော့ပါမယျ။ (၅)နှဈခံထညျ့ပမေယျ့ (၄)နှဈပဲ ခံမယျ။ (၄)နှဈခံထညျ့ပမေယျ့ (၃)နှဈပဲ ခံမယျ။ ခွှငျးခကျြအနနေဲ့ (၃)နှဈခံပစ်စညျးကတော့ တဈနှဈမလြော့ပါဘူး။ ဘယျလောကျဝတဲ့သူ ထညျ့ပါစေ၊ (၃)နှဈအပွညျ့ ခံပါတယျ။ တီဘီဆေး၊ အတကျကဆြေးတှကေတော့ ဟျောမုနျးတှရေဲ့ အာနိသငျကို လြော့ကစြတောမို့ ဒီ ဆေးတှေ သောကျနရေတဲ့အခြိနျဆို မထညျ့ထားသငျ့သေးပါဘူး။ ထညျ့ပွီးမှ ရောဂါဖွဈလို့ ဒီဆေးတှေ သောကျရတော့မယျဆိုရငျတော့ ဒီပစ်စညျးအပွငျ ဟျောမုနျးမပါတဲ့ နောကျထပျသားဆကျခွားနညျးတဈခုကို ထပျအသုံးပွုဖို့ လိုပါမယျ။ (ဥပမာ ကှနျဒုံး၊ သားအိမျတှငျးထညျ့ပစ်စညျး)။ ရောဂါကိုပိုဆိုးစလေို့ မဟုတျပါဘူး၊ ပစ်စညျးရဲ့ အာနိသငျကို ကစြတေဲ့အတှကျ ကိုယျဝနျရသှားနိုငျလို့ ဖွဈပါတယျ။ လှဲမှားတဲ့ အယူအဆမြား ဒီပစ်စညျးကို အပျ၊ ပိုကျ စသဖွငျ့ ထငျ တတျကွတယျ။ အပျတို့ ပိုကျတို့သာဆိုရငျ လကျမောငျးထဲထညျ့ထားတဲ့အခါ စူးနေ၊ ထောကျနကွေမှာပေါ့။(ကမြတို့fieldဆငျးတဲ့အခါအိမျထောငျသညျ အမြိုးသမီးတှကေမေးလေ့/ပွောလရှေိ့တယျ)ခုဟာက ပြော့ပြောငျးတဲ့ ပလပျစတဈခြောငျးလေးသာ ဖွဈပါတယျ။ ကှလေို့ကောကျလို့လညျး ရပါတယျ။ ဒါ ကွောငျ့ လကျမောငျးထဲထညျ့ထားပွီးလညျး စူးမှာစိတျပူနစေရာ မလိုပါဘူး။ ခှဲစိတျမှုလုပျရမယျ ထငျတတျကွတယျ။ ဒါလညျး မဟုတျပါဘူး။ ထညျ့ပေးသူ ဆရာ/ဆရာမရဲ့ ကြှမျးကငျြမှုအပျေါ မူတညျပွီး မိနဈအနညျးငယျသာ ကွာမွငျ့ပါတယျ။ ဒီပစ်စညျးလေးကတော့ အိမျထောငျသညျအမြိုးသမီးတျောတျောမြား မြား သိခငျြနကွေတဲ့ အကွောငျးအရာတဈခု ဖွဈပါတယျ။ သားဆကျခွားနညျးလမျးတှအေားလုံးမှာ အားသာခကျြ၊ အားနညျးခကျြကိုယျစီ ရှိကွပါတယျ။ အဓိကကတော့ ဘယျသူပွောလို့၊ ဘယျဝါတိုကျတှနျးလို့ ဆိုတာထကျ ကိုယျနဲ့သငျ့တျောတဲ့ သားဆကျခွားနညျးတဈခုကို ကြှမျးကငျြသူနဲ့ တိုငျပငျပွီး ရှေးခယျြ အသုံးပွုနိုငျကွဖို့ပါပဲ။
“မမေရေေ မောငျလေးလေ သမီးကိုလိုကျစနတေယျ” “သားငယျ မမကိုမစနဲ့လေ မမေဘောမှာထားလဲ” “မမကိုသားကခဈြလို့စတာပါမမေရေ” “သား သားဖကွေီးကိုထတော့လို့ မမေကေို့ရှောပငျလိုကျပို့လို့” “ဟုတျကဲ့မမေေ” ခုဆို ကမြ အမရေိကနျမှာကိုကိုနဲ့တူတူနလောတာနှဈ၂၀ကြျောလာပွီ။ ကမြနဲ့ ကိုကိုဒီမှာတရားဝငျယူလိုကျကွပွီလေ။ဒီမှာကမြတို့ကို မောငျနှမလို့သိတဲ့သူတဈယောကျမှမရှိကွဘူးလေ။နာမညျလညျး ပွောငျးထားတယျ။ကမြက ဆူဇီ။ ကိုကိုက ပကျထရဈ။ လှနျခဲ့တဲ့၁၅နှဈလောကျက ကမြနဲ့ကိုကိုလိုးနတောကိုအမေ ပကျပငျးကွီးမိသှားတယျ။ဆူလိုကျဆဲလိုကျတာရစရာကိုမရှိဘူး။ ကမြနဲ့ ကိုကိုကဖွဈလာခဲ့တဲ့အရာအပျေါကွံကွံခံရငျဆိုငျကွတာပေါ့။ ကိုကို့ကိုတဈခါမှလကျဖြားနဲ့တောငျမထိဖူးတဲ့အဖတေောငျ ကိုကို့ကို ထိုးတယျ။ကမြကို လညျးပါးရိုကျတယျ။တဈမိသားစုလုံး တဈပတျ လောကျမစားမသောကျနိုငျဖွဈကွတယျ။ကမြတို့ကိုခှဲထားဖို့ လုပျပမေယျ့ကမြနဲ့ကိုကိုကအဆိပျသောကျ သတျသမေယျပွောလို့ ခဈြခွငျးကိုမခှဲတော့ဘူးမငျးတို့ဘဝနဲ့မငျးတို့ရှိစတေော့တဲ့။မွနျမာပွညျ မှာဆကျနရေငျ လူတှသေိသှားနိုငျလို့အမရေိကနျကိုအတငျးပဲ ပို့လိုကျတယျ။အဖဆေုံးတုနျးကတောငျပွနျမလာရဘူး။အားလုံးနဲ့ အဆကျအသှယျကိုဖကျြခိုငျးခဲ့ပွီးအမနေဲ့ပဲအဆကျအသှယျရတယျ။အမကေခုတရားစခနျး မှာပဲနနေတေယျ။သူ့မွေးလေးတှနေဲ့တော့ ဖုနျးမှာပဲမွငျဖူး စကားပွောဖူးခဲ့တယျ။မွနျမာပွညျမှာ ဘာတှေ ဖွဈကုနျမှနျးမသိပမေယျ့ ကိုကိုနဲ့ကမြဒီမှာ ဘဝ အသဈလေးနဲ့ ပြျောနပေါပွီ။သမီးကလညျး၁၃နှဈထဲမှာ။သားငယျကတော့၉နှဈ။၂ယောကျစလုံး သှကျသှကျလကျလကျနဲ့ကိုယျလကျအဂျါ အပွညျ့အစုံနဲ့ပါပဲ။ လူတှကေပွောကွတယျ။သှေးသားရငျးနီးစပျပွီး ရလာတဲ့မြိုးစပျကလူစငျမမှီဖွဈတတျကွတယျတဲ့။ကမြ သားနဲ့သမီး ကတော့အားလုံးနဲ့ဆနျ့ကငျြဘတျပါပဲ တဈခါတဈလတေော့တှေး မိတယျ။ငါ ကိုကိုနဲ့မောငျနှမခငျြးလိုးခဲ့မိယူခဲ့မိတာမှားသလားပေါ့။ ဒါပမေယျ့မမှားပါဘူးရှငျ။ကိုကိုကကမြကိုခဈြသလိုကမြက လညျး ကိုကို့ကိုခဈြနဆေဲ ခဈြနမွေဲမို့လို့ပါပဲရှငျ။
ဘူးခါးသီးရေးသည်။ (မောင်နှမအင်းစက်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်။ဖြစ်ရပ်မှန်ပေါ်အခြေခံထားပါသည်။) ” ဒေါက် ဒေါက် သမီး ချိုချိုအောင်ရေ ” ”ရှင်အမေ” ”သမီး နင့်အကိုရော” ”သိဘူးလေအမေ သူ့အခန်းထဲရှိမှာပေါ့ ” ”မရှိဘူးမေမေကြည့်ပြီးပြီ ခုပဲပြန်ရောက်တယ် ဘယ်လစ်ပြန်ပြီလဲ မသိဘူး” ”ခုန လမ်းမှာတော့ သူ့သူငယ်ချင်းဖုန်းလာလို့ပြောတယ်အမေ ကိုကျော်ကြီးတို့နဲ့ချိန်းနေတာကြားတယ်” ”အင်း ဒီကောင်လေးကတော့ ခဏနေ ဖုန်းဆက် ပြီး အိမ်မှာပြန်လာ နေခိုင်းစမ်းသမီး ဘယ်မှလျှောက်မသွားနဲ့လို့ ဒီည မေမေနဲ့ဖေဖေ ပွဲရုံလုပ်ငန်းရှင်တွေအစည်းအဝေးရှိတယ် အဲ့မှာပဲညစာစားဖြစ်မယ် သမီးတို့မောင်နှမ တစ်ခုခုသာဝယ်စားကြတော့ အိမ်မှာဘာမှမရှိဘူး” ”ဟုတ်ကဲ့အမေ သမီးဖုန်းဆက်ပြီးပြန်ခေါ်လိုက်မယ်” ”အေးအေး အာ့ဆိုမေမေသွား ပြီ သမီးဖေဖေကသွားနှင့်နေပြီ ကိုကိုမောင်ပြန်မလာခင် တံခါးတွေလိုက်ပိတ်အုန်းသမီး ခေတ်ကာလ ကကောင်းတာမဟုတ်ဘူး ဂရုစိုက်နော်သမီး” ”ဟုတ်ကဲ့အမေ” မေမေအခန်းဝမှထွက်သွားတော့မှကိုကို့ကိုခေါ်ထုတ်ရသည်။ ”ကိုကိုထွက်လာတော့ မေမေသွားပြီ တံခါးတွေသွားပိတ်အုန်း” ”အေးပါ ဟ ဟူးးးးးတော်သေးတယ် မေမေမတွေ့သွားတော့မလို့” ”အင်းလေ တော်သေးတယ် အာ့ကြောင့်ပြောတာပေါ့ကိုကို့ကို အတင့်မရဲပါနဲ့လို့ မတော်လို့မေမေ တွေ့သွားရင် သေပြီ”
”ကဲကဲ အဝတ်လဲ ရေတွေဘာတွေပြောင်အောင်ဆေးထား ပြီးရင်ပွဲတော်တယ်မယ်” ”ဟွန့် ဒါပဲ ကိုကိုက” ”ချစ်တာကိုးကွ” ”ဟွန့် ကိုကိုချစ်တာကြီးကလည်းတော်ပါ နေ့ရောညရောမနားရဘူး ညီမလေးအဖုတ်တွေလည်းကျိန်းလှပြီ” ”အာ့ညီမလေးအဖုတ်လေးကလိုးလို့ကောင်းတာ ကိုးကွ” ”ကိုကိုနော် ညစ်စုတ် သွား တံခါးတွေသွားပိတ် မေမေပြောသွားတာ ကြားတယ်နော် တော်ကြာ တံခါးတွေမပိတ်ဘဲ လုပ်နေတုန်းအနုကြမ်း ဝင်စီး သွားမှ ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်မယ်” ”ကိုကိုသိပါတယ် ချစ်လေးရာ စိတ်မပူနဲ့” ”အာ့ဆို ခုသွားပိတ်တော့လေ” ”အာဘွားပေး” ”ပြန်လာမှပေးမယ်လေ” ”မ ရဘူးခုပေး ” ”ဟွန့် တော်တော်လက်ပေါက်ကတ်တဲ့ကိုကို” ”အုအု ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ်” ”ရပြီ ပြန်လာမှဆက်လုပ်ပေး” ကျမကချိုချိုအောင်ပါ။ဖေဖေဦးချို မောင် မေမေဒေါ်ခိုင်ခိုင်အောင် ကိုကို ကိုကိုမောင်နဲ့ ကျမရယ် မိသားစုလေးယောက်ပဲရှိတာပါ။ ပွဲရုံလုပ်ငန်းကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ပြီး မိသားစုအားလုံး ပွဲရုံမှာ အလုပ်လုပ် ကြပါတယ်။ဖေဖေနဲ့မေမေကပွဲရုံလုပ်ငန်းရှင်များဥက္ကဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်ဆို တော့အလုပ်များတယ်။ကျမနဲ့ကိုကိုက ကျောင်းမပြီးခင်ကတည်းက ပွဲရုံ မှာဖေဖေနဲ့မေမေကိုဝိုင်းကူနေလာတာခုထိပဲ။အီကိုနဲ့ကျောင်းပြီး ထားတဲ့ကျမတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်အတွက်အခြားအလုပ်လည်း သွားလုပ်စရာမလိုပါ ဘူး။မိသားစုအလုပ်ကိုပဲလုပ်ရုံပါပဲ။နောင်လည်း ဒီပွဲရုံကြီးကိုဦးစီးရမှာပဲလေ။ကိုကိုနဲ့ကျမ ခုလို မောင်နှမခြင်း လိင်ဆက်ဆံမိတာကတော့ sexအကြောင်း တွေပြောရင်းဆက်ဆံမိ သွားတာပါ။ပြောရရင် နည်းနည်းတော့ရှည်တယ်။ကျမတက္ကသိုလ် နောက်ဆုံးနှစ်ကပေါ့ရှင်။ရည်းစားထားတယ်ပေါ့။မေမေနဲ့ ဖေဖေက ကျမတို့မောင်နှမကိုလွတ်လပ်ခွင့်အပြည့်ပေးထားပါတယ်။
လွတ်တာလွတ် လပ်တော့မလပ်စေနဲ့ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းနဲ့ပဲ ထိန်းထားတယ်။ကိုကိုကတော့ ရည်းစားတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ထားတယ်။ပွေတယ်။ ဆော်ရရင်ဖြုတ်ပြီး ပြတ်တာများတယ်။ခုလည်း စော်၂ယောက်နဲ့ရှုပ်နေတုန်း။ကျမကိုတော့မေမေက သမီးကိုယ့်ကိုကိုယ်တန်ဖိုးထားရမယ် အညှာမလွယ်ရ ဘူးလို့ပြော တယ်။ကျမရည်းစားကိုကျမကမပေးဘူး။နှုတ်ခမ်းပဲပေးနမ်းတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ နို့ပေးကိုင်တယ်။ဒီလောက်ပဲ။ဒါပေမယ့်သူက ဒီလောက်နဲ့ မရောင့်ရဲဘူး။အဆင့်တက်ချင်တာ။ကျမကမပေးဘူး။ သူဘယ်လောက်စောင့်နိုင်မလဲစမ်းသပ်ချင်တာနဲ့ညှင်းထားလိုက် တယ်။အဲ့မှာသူက မစောင့်နိုင်ဘဲ ကျမကိုပစ်ပြီး နောက်တစ်ယောက် နဲ့တွဲသွားတယ်။သစ်စိမ်းချိုးတုံးတိဖြတ်တာခံလိုက်ရလို့ကျမ အသဲကွဲခဲ့ရတာပေါ့။ကိုကိုက အဲ့ကောင်ကို ပေးလိုက် လားမေးတော့ မပေးလို့ခုလိုဖြတ်သွားတာပြောတော့ ကောင်းတယ်တဲ့လေ။သူက သူသာ သူများသားသမီးတွေလိုက်လုပ်ပြီးဖျက်ပစ်နေတာ။သူ့ညီမ ကျ တော့ တိုသား။ကိုကိုမှာဘာဆေးရှိလဲတော့မသိ။စော်လိုက်ပြီဆို ခဏပဲ။စန်းပွင့်တယ်။သွားတက်လေးအပြင်ပါးချိုင့်လေးပါ ပါတဲ့ကိုကိုကချောတာတော့ အမှန်ပဲ။ဟိုမိန်းကလေးတွေကလည်း ကိုကိုနဲ့ပျက်လည်းအေးဆေးပဲနောက်တစ်ယောက်နဲ့တွဲနေတာ တွေ့ရတယ်။သူတို့ကရည်းစားထားတာကိုအပျော် ထားပြီး အလိုးခံဖို့ပဲထားကြလားတော့မသိပါဘူးရှင်။အထန်မတွေပေါ့။ အမှန်တော့ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်းအထန်မဆိုတာကိုကိုနဲ့လိုးပြီးတော့မှ သိရခဲ့ရ တာပါ။ကိုကိုနဲ့လိုးပြီးတော့ ကျမလေတစ်နေ့တစ်ခါလောက် အလိုးမခံရရင်ကို နေမထိထိုင်မသာကိုဖြစ်နေတော့တာပါပဲရှင်။မောင်နှမခြင်းမလုပ်သင့်မှန်းမ ကောင်းမှန်းသိပေမယ့်အတွေ့အထိကိုမလွန်ဆန်နိုင်ပါဘူး။အထူးသဖြင့် ကိုကိုဟာကြီးလေ သူ့လီးကြီးနဲ့ကျမကိုနောက်ကထောက်တာနဲ့တင်ကျမမှာဒူး ချောင် သလိုလိုဖြစ်ပြီးအဖုတ်ကအရည်တွေစို့လာတော့တာပါပဲ။ကိုကို့ ဟာကြီးကစွဲဆောင်နိုင်လွန်းပါတယ်။ဒစ်အောက်နားမှာမှဲ့ပါသလို ညာဘက်ဂွေးဥ မှာလည်းမှဲ့တစ်လုံးပါသေးတယ်။တကယ်လို့အိမ်မှာ မလွတ်လပ်လို့အလိုးမခံရတဲ့အခါ အနည်းဆုံး ကိုကို့ဟာကြီးကို စုပ်ပေးတတ်သလို ကိုကိုကလည်းကျမဟာလေးကိုယက်ပေးပါတယ်။
မေမေတို့မသိအောင်ခိုးလုပ်ရတာလည်း တစ်မျိုးတော့ကောင်းသား။ နှစ်ထပ်တိုက်ကြီးမှာမေမေနဲ့ဖေဖေကအောက်ထပ်မှာနေပြီးအပေါ်မှာ ကျမတို့မောင်နှ နေကြပါတယ်။ကိုကိုနဲ့ကျမ ငယ်ငယ်ကတည်းက ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိ။တစ်ခါတစ်လေ ကိုကိုကကျမကိုစနောက်တာ လောက်ပဲရှိပါတယ်။အဲ့အခါကျ မကနပန်းဖက်လုံးပြီးကုန်းကိုက်ပစ် တာ။မေမေပြောတာပဲ ကျမငယ်ငယ်က ကိုကိုစလို့ဆိုပြီး မှီရာလှမ်း ကိုက်တာ ဂွေးတံထိပ်အရည်ပြားလေးပေါက်ပြဲဖူး တယ်တဲ့။ကျမက အနေအေးတယ်။လာစရင်ငြိမ်နေတတ်ပေမယ့် စိတ်တိုလာတဲ့အချိန် တို့ အသဲယားတဲ့အချိန်ဆိုကုန်းကိုက်တတ်တယ်။ခုထိလည်း ကိုကို စရင်ကုန်းကိုက်နေကြပါ။ကိုကိုကတော့ချစ်ရှာပါတယ်။ခု မောင်နှမကနေ လင်မယားအသွင်ဖြစ်နေတော့ပိုဆိုးပါတယ်။ သူ့ဟာကြီးကိုငယ်ငယ်က လိုတော့မကိုက်ရဲဘူး။ကိုက်ရင်ပိုမာတောင် လာပြီးကျမကိုအသေလိုးလွန်းလို့။အဲ့လိုအချိန်ဆိုလမ်းတောင် မလျှောက်နိုင်ဖြစ်ရတယ်။ကျမဘဲနဲ့ပြတ်ပြီးအ သဲကွဲနေစဉ် သူပဲအနီးကပ်ကိုနှစ်သိပ်ပေးတာ။မေမေနဲ့ဖေဖေကအမြဲအလုပ်များ နေကြလို့ကိုကိုကကျမရဲ့အနီးကပ်အဖော်ပါပဲ။အဲ့လိုနီးကပ်နေလို့ လည်း ခုလိုမျိုးမောင်နှမခြင်းလိုးဖြစ်တဲ့အဆင့်အထိရောက်လာတာ။ကျမဘဲကျမကိုဖြတ်သွားတာ ကျမကမပေးလို့ပျက်တာကအဓိကပါ။ သူကျမကိုတန်ဖိုးမထား စိတ်မရှည်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ ကျမကအဲ့လိုကိစ္စတွေနားမလည်တာလည်းပါတယ်။နောက်ပြီး မေမေပြောထားတဲ့အညှာမလွယ်ရဘူးဆိုတဲ့စကားကို နားထောင် ခဲ့သလို အတွေ့အကြုံမရှိတော့ကြောက်တာလည်းပါတယ်။
လိုင်းသုံးပေမယ့် Fbပွတ် ပုံတင် ဗဟုသုတ သတင်းဖတ်ဒီလောက် ပဲသုံးဖြစ်တာ။ကျမကစာကိုပိုပြီးအာရုံစိုက်ဖြစ်တော့ဒီဘက်မှာ ဘာမှအတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတမရှိဘူး။ကျောင်းကမဟာတန်းထိတက် ခဲ့ပြီး ဘဲလည်းထပ်မထားတော့ပါဘူး။ကိုကိုကတော့ ရေတွက်လို့မရ အောင်တွဲနေတော့တာပါပဲ။ဘဲနဲ့ ပြတ်ပြီးတော့မှကိုကိုနဲ့ စကားပြောတော့ လိင်အကြောင်းပါလာတယ်။အစပိုင်းကတော့ ကိုကို့ကို မေးရမှာရှက်နေပေမယ့် မမေးရဲပေမယ့် ကိုကိုက ဆွေးနွေး ပြီးမသိတာတွေပြောပြတော့ ရဲလာပြီး အပြာစာတွေ အပြာကားတွေ လည်းကြည့်တတ်လာတယ်။ကိုကိုက သူ့ဆီကကားတွေ ကူးပေး တယ်။ လိုင်းပေါ်က စာပေဂရုတွေကိုလည်းဝင်ခိုင်းတယ်။ တစ်နေ့တော့ ကိုကိုနဲ့ကျမ လိုးဖြစ်သွားတယ်။ခုဆိုကိုကိုနဲ့ ကျမလိုးလာတာ ၄လကျော်လာပြီ။အဲ့နေ့က အိမ်မှာမောင်နှမ နှစ်ယောက်ပဲကျန်ခဲ့တာ။ဖေဖေနဲ့မေမေက နေပြည်တော်ကပြပွဲ သွားတဲ့ညကပေါ့။ကိုကိုကသူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့သောက်လာတယ်။ ကျမ တစ်ယောက်တည်း ကိုကို့ကိုဧည့်ခန်းထဲစောင့်နေရင်း မောင်နှမအင်းစက်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖတ်နေတာ။ဖတ်ရင်းအရှိန်ပါလာတော့ အဖုတ်လေးကိုပွတ်နေ တာပေါ့။ကိုကို့ဆိုင်ကယ်သံကြားလို့ ဖုန်းကိုချပြီးခြံတံခါးဖွင့်တော့ယိုင်ထိုးထိုးနဲ့ဆိုင်ကယ်သွင်းတယ်။
”ကိုကို သောက်လာပြန်ပြီလား” ”အေး နည်းနည်းပါညီမလေးရ” ”နည်းနည်းသာပြောတယ် လူကသိုင်းကွက်နင်းနေပြီ” ကိုကိုယိုင်ထိုးထိုးနဲ့အိမ်ထဲဝင်သွား တယ်။ကျမလည်း ခြံတံခါးသော့ခတ်အိမ်တံခါးတွေပိတ်ပြီး အပေါ့အပါးသွားကာအိမ်ပေါ်တက် ခဲ့သည်။ကိုကို့အခန်းကိုကြည့်တော့ အဝတ်အစားလဲ နေသည်။ ”ကိုကို ခြေလက်ဆေးပြီးမှအိပ်နော် မညစ်ပတ်နဲ့” ”အေးပါ ညီမလေးရ အဝတ်လဲပြီးရင် ဆေးမှာ” ကိုကိုကမူးနေတော့ ပုဆိုးလဲဝတ်တော့ သူ့ ဟာကြီးပေါ်လာတယ်။ ကိုကိုဟာ ငယ်ငယ်ကမြင်ဖူးပမယ့် ခုကတော်တော်ကြီးသည်။ ငယ်ငယ်ကသေးသေးလေး။ခုတော့ မတောင်ဘဲငိုက်ကျနေတာ တောင် ပေါင်လည်လောက်ရှည်ပြီး ၁လက်မခွဲအလုံးလောက်ရှိမည်။ ရုတ်တရက်ကိုကိုဟာကြီးမြင်လိုက်ရတော့ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်း မသိဘူး။ရင်ထဲဒိတ် ကနဲဖြစ်သွားသည်။အောကားထဲမှာပဲမြင်ဖူးတဲ့ လီးမျိုး နောက်ပြီးအကြီးကြီး။ခုနစာဖတ်နေတဲ့အရှိန်လေးကလည်း ပြန်တက်လာပြီးအဖုတ်လေးအရည်စို့ လာသည်။ ”ကိုကို လုံချည်မနိုင် ပုဝါမနိုင်နဲ့ဟာ အရှက်လည်းမရှိဘူး” ”ဘာဖြစ်လဲညီမလေးရာ ကိုယ့်ညီမလေးကိုရှက်ရမှာလား” ”ဟွန့်အရှက်မရှိသရက်စိ ခြေလက်ဆေးပြီးအိပ်နော် ညီမလေးလည်း အိပ်တော့မယ်” ”အေးအေး” ကိုကို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီး ကျမအခန်းပြန်လာကာ ကုတင်ပေါ်တက် ခုနက အော စာအုပ်အဆက်ကိုဆက်ဖတ်ပြီးအဖုတ်လေးကို ပွတ်နေမိသည်။ကိုကိုဟာကြီးကိုမှန်းပြီးပွတ်တော့အရသာက တစ်မျိုးပဲအောစာထဲကဇာတ်ကောင်နေရာ တွေမှာ ကိုကိုနဲ့ကျမ အစားထိုးပြီးဖတ်နေမိသည်။
”အင့်အင့် အား ကိုကို ကိုကို့လီးကြီး အားးရှီးး” ကျမလည်းဖုန်းကိုချ မျက်စိမှိတ်ပြီးပွတ်နေမိသည်။ကိုကိုအခန်းထဲဝင် လာတာတောင်မသိ။ဘောင်းဘီကို တစ်ဖက်ချွတ်ပြီးပေါင်ကားကာ အကြိုက်ကိုပွတ်နေမိသည်။ပွတ်နေရင်း ကျမအဖုတ်ပေါ်ကလက် ဆွဲဖယ်ခံရကာပေါင်ကိုလက်တွေနဲ့လာကိုင်ပြီးဖြဲခံလိုက် ရသည်။ လန့်ပြီးမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့ ကိုကိုလေ ကျမ ပေါင်ကြားထဲမှာ မျက်နှာအပ်တော့မည်။ ”ဟင် ကိုကို ဘာလုပ်တာလဲ ဘာလာလုပ်တာလဲ ” ”ညီမလေး လိုအပ်နေတာကို ကိုကိုဖြည့်ဆည်းပေးမလို့ပါ” ”အင် ဘာ ဘာလုပ်မို့လဲဟင် အ အ ကိုကို ရှီးးးးးအားးးကိုကို အင်းအင်းအင်းးး” ကိုကိုကျမကို မော့ကြည့်ကာပြောပြီးကျမအဖုတ်လေးမှ အရသာဖူး အစိလေးကိုတပြွတ်ပြွတ်စုပ်တော့သည်။ ”အားးး ကိုကိုရေ အမေ့ အီးးးး ငရဲ ငရဲတွေကြီးကုန်တော့ မှာပဲ အားး ရှီးးးးး အူးးးး ကိုကိုရေ အင်းးးးဟင်းးးးးမယက်နဲ့ အ ကိုကိုရေ အဟင့် ဟင့် ယားတယ်” ကျမစိတ်ကူးနေဆဲခုလိုအဖုတ်ကိုယက်ခံရတော့ရင်ထဲ ဗလောင်ဆူနေ သည်။ဖင်လေးကော့ပေးပြီးကိုကိုမျက်နှာကိုအတင်းဆွဲထားမိသည်။
နဂိုကတည်းက ကိုယ်ဘာသာပွတ်ရင်းပြီးချင်နေတာကို ကိုကိုက လာယက်ပေးတော့ သိပ်မကြာပါဘူးရှင်။၅မိနစ်လောက်မှာပဲကိုကို မျက်နှာကိုအဖုတ်နဲ့ အတင်းကပ်ပြီးအရည်တွေပန်းထုတ်လိုက်သည်။ ဖင်ကြီးအိပ်ယာပေါ်ဘုန်းဆိုပြန်ကျပြီးမလှုပ်မကိုင်ချင်လောက်အောင် ဖြစ်သွားရသည်။အရမ်းကောင်း ပြီး ရင်ထဲလည်းတစ်လှပ်လှပ်ခုန်နေတုန်းရှိသေးသည်။ကိုကိုကျမအပေါ်ခွတက်လာပြီးနှုတ်ခမ်းလေးကို လာနမ်းသည်။ကျမပေါင်ကို ကိုကို့ဟာ မာမာကြီး လာထိုးနေသည်။ ”အင်းးးဟင်းးး ကိုကို ဘာလို့အဲလို့လုပ်တာလဲ ညီမလေးကကိုကို့ ညီမလေ မိုးကြိုးတွေပစ်ကုန်မယ်” ”ပစ်ပစ်ကွာမသိဘူး ချစ်တာပဲသိ တယ် ကိုကို ညီမလေးကိုချစ်တယ်” ”အာ ကိုကိုကလည်း မောင်နှမခြင်းချစ်လို့မရဘူးလေ” ”ရတယ် ဒီနေ့ကစပြီး ကိုကို ညီမလေးကိုပဲချစ်တော့မယ် ကျန် တဲ့ စော်တွေ အကုန်ဖျက်မယ် ညီမလေးလည်း ကိုကို့ကိုပဲချစ်ရမယ်” ”ဟာ ကိုကို အုအုပြွတ်ပြွတ်ပြွတ် အင်းးးး ဟင်းးး ဟင်းးး ဟင်းးးး ဘာလုပ်မလို့လဲ တော်ပြီလေ တော်တော့” ကိုကို ကျမနှုတ်ခမ်းလေးကိုအတင်းစုပ်နမ်းပြီးနို့ကိုအတင်းညှစ်ချေနေ တော့သည်။အောက်က သူ့ဟာ မာမာကြီးကလည်း ကျမ အဖုတ်လေးကြားမှာ လျောထိုးပြီးဒစ်ကြီးနဲ့အစိလေးကိုထိုးနေသည်။ကျမ ကိုကို ကိုအတင်းတွန်းနေပေမယ့် ကျမထက် လူကောင်ကြီးတဲ့ကိုကို့ကို မတွန်း နိုင်။ပါးစပ်နဲ့သာပြောနေရသည်။ကိုကို့ဒစ်ကြီးနဲ့အစိလေးကို ထိုးလိုက်တိုင်း ကျမမျက်လုံးတွေပြာဝေပြီးဘာမှကိုကို့ကို မတုန့်ပြန်နိုင်တော့။ကျမဘဝ ကိုကို လက်ခုပ်ထဲကရေဖြစ်နေပါပြီ။
”ကိုကိုမရတော့ဘူးကွာ တင်းနေပြီ ညီမလေးကိုလိုးမယ်” ”ဟင် ကိုကိုမလုပ်ပါနဲ့ ငရဲကြီးမယ် ဟင့်ဟင့် မေမေနဲ့တိုင်မှာနော်” ”တိုင်ကွာ တိုင်ရင် ညီမလေး ကိုခိုးပြေးမှာ” ”ဟာ ကိုကို မလုပ်ပါနဲ့ ညီမလေးတောင်းပန်ပါတယ်နော် မောင်နှမခြင်းလေ မလုပ်ပါနဲ့ အင့် အားးးရှီးးးး အင်းးးဟင်းးဟင်းးး” ”ဗြစ်ဗြစ် တစ်တစ်တစ် ဗလစ် ဘစ် ” ကျမတားနေတဲ့ကြားကနေကိုကိုကကျမအဖုတ်ဝလေးကိုသူ့လီးကြီး တေ့ပြီးလိုးချလိုက်သည်။လက်ညိုးတောင်သိပ်မဝင်ဖူးတဲ့ ကျမအဖုတ် လေးထဲ ကိုကို့လီးကြီးမဆန့်မပြဲနဲ့တိုးဝင်လာသည်။ခုနက ကိုကို ယက်ထားလို့တစ်ချီပြီးထားတာကြောင့်ကျမအဖုတ်ထဲ လီးကြီးက ကြပ် တည်းပေမယ့် ဝင်လာသည်။ ”အားးးး အ အအ ကိုကို အားးး သပေီ အမလေးးး အားးးး သပေါပီ အားးး ကိုကိုမလုပပြါနဲ့ အားးး ကိုကို နာတယြ အားးးးးအ ငြးးးးးးး” ကိုကိုမူးနေတော့ သူ့ကိုကျမရိုက်တာလည်းမသိတော့ဘူး။ ကျမပြောနေတာကိုနားမဝင်တော့ဘူးလားမသိပါဘူးရှင်။ သူ့ဟာကြီးကျမအဖုတ်ထဲ ထိုးထည့်ဖို့ပဲအာရုံစိုက်နေသည်။ကျမငိုပြီး နာလို့တားနေပေမယ့် သူ့ဟာကြီးကအဖုတ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲ တဗြစ်ဗြစ်နဲ့သာတိုးဝင်နေသည်။မဝင်အောင် ကြွက်သားတွေနဲ့ ကိုကိုလီးကြီးကိုညှစ်တော့ ကိုကိုဟာကြီးကပိုတောင်မာလာသည်။ အဲ့တော့မညှစ်ရဲပေအသာလေးသာလျော့လိုက်ရသည်။ အောကား ထဲမှာကြည့်ဖူးပြီး စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဖူးတဲ့အရာမျိုးကြီးက ခု ကျမအဖုတ်ထဲမညှာမတာတိုးဝင်နေသည်။ ကိုကို့လီးထိုးထည့်တာ ဒစ်ခေါင်းကြီးအပြင်၁လက်မ ကျော်လောက်ဝင်လာတော့ ဒစ်ထိပ်ကြီး ကအထဲမှာ ဆက်မဝင်လာဘဲ တစ်ခုခုကိုထိုးမိပြီးရပ်သွားသည်။
ဟင် အာ့က အာ့ကအပျိုစင်အမှေးပါး။အာ့လေးပေါက်ရင်တော့ ငါအပျိုရည်ပျက်ပါပြီလို့တွေးနေတုန်းကိုကိုက သူ့ဟာကြီးကို ဝင်သလောက်အသွင်းအ ထုတ်လုပ်ပြီး ကျမနို့လေးတွေကိုညှစ်ကာ နှုတ်ခမ်းလေးကိုလာစုပ်သည်။ကျမခေါင်းရမ်းပြီးအနမ်းမခံ။ ”ခဏလေးပါ ညီမလေးရယ် ပြီးရင်ကောင်းလာ တော့မှာပါကွာ” ”အဟင့်အဟင့် ဟီးးးးကိုကို ညီမလေးကိုအနိုင်ကျင့်တယ် အီးဟီးးးး ကိုကို့ကိုမေမေနဲ့တိုင်ပြောမယ် ဟင့်ဟင့် အ” ”ချစ်လို့ပါညီမလေးရာ ကိုကိုမနေနိုင်တော့လို့ပါ ကိုကို ညီမလေးကို လိုးချင်နေတာကြာပြီ အထဲကမညှစ်ထားနဲ့ ငြိမ်ငြိမ်ပဲနေလေ ညီမလေးပိုနာလိမ့်မယ်” ” အီးးဟီးးးဟီးးးချစ် ရင် ကိုယ့်ညီမလေးကိုဒီလိုလုပ်စရာလား ခုတော့ ကိုကိုနဲ့ညီမလေးက ခွေးဖြစ်ပြီ ကိုကိုခွေးကြီး အင်းဟင်းးး နာတယ်” ကျမလည်းပြောမရမယ့်တူတူ လုပ် ပါစေဆိုပြီး ကိုကို့ကိုမရိုက်ဘဲ သူ့လက်မောင်းကိုကိုင်ထားလိုက်သည်။ကိုကိုကဖင်ကြီးကြွကာ ကျမအဖုတ်လေးကိုအထုတ်အသွင်းလုပ်ကာ အဝနားထိသူ့ လီးကြီး ထုတ်ပြီး တစ်ချက်တည်းတစ်ဆုံးဆောင့်ထိုးထည့်တော့သည်။ ”ဗြစ်ဗြစ် ဘွတ်ဘွတ် ဘလွတ် ဖောက် ဘုတ် ” ”အားးးး သေပြီ သေပြီ နာလိုက်တာ ကွဲပြီ နာတယ် ကိုကို ကိုကိုအားးးး နာတယှ အီးးးဟီးးး ဟီးးးးးးဟီးးးးးး” ကိုကိုခဏငြိမ်ပြီး လီးကြီးကို ကျမဟာလေးထဲသွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်
”အားး ဟီးးးးးး ကိုကို နာတယှ အငှးးးဟငှးးးး ကိုကို ကိုကို အီးးးရှီးးး အဟင့်အဟင့် အားး ကိုကို နာတယ် အီးးဟီးးးး” ကိုကို့လီးရှည်ကြီးကိုကျမအဖုတ်ထဲ အဆုံးမသွင်းဘဲလိုးသည်။အဆုံး သွင်းတော့ အထဲမှာ တဒုတ်ဒုတ်နဲ့ကျဉ်တက်လာသည်။ “ကိုကို ကျဉ်တယ် အားးး အင်းးးး” ”ကောင်းလာပြီလား ညီမ လေး” ”သိဘူး နာတယ် ကျဉ်လည်းကျဉ်တယ် အားးးရှီးးးး” ”ကိုကိုတော့လိုးလို့ကောင်းလိုက်တာကွာ ကောင်းလိုက်တဲ့ညီမလေးစောက်ဖုတ် ညှစ်တယ်ကွာ အိုးးးညှစ်ညှစ်” ”ကိုယ့်ညီမလေးကို အတင်းလိုးတဲ့ကိုကို ဒီလောက်တောင်လိုးချင် နေတာ လိုးလိုး လိုးပေး မြန်မြန်လေး အင်းးးး အားးး” “ကောင်း လိုက်တာကွာ ကိုယ့်ညီမကို ကိုယ်ပြန်လိုးရတာ အီစိမ့်နေရောအိုးးး ညှစ်တယ် ကောင်းလိုက်တာ ညှစ်ညှစ်ညီမလေး” “ဗြွတ် ဘွတ်ဘွတ် ဗြစ်ဗြစ်” အရသာ ကနာတာရောကျဉ်တာရောအပြင်အမျိုးအမည်မသိကောင်းတဲ့အရသာတစ်ခုကိုခံစားလာရသည်။ကိုကိုဟာကြီးကိုကျမအဖုတ်ထဲ မြန်မြန်သွင်းစေချင်လာ သည်။အိပ်ပျော်နေတဲ့ကျမရဲ့ကာမစိတ်တွေ နိုးထလာသည်။ကျမ မငိုတော့ပါ။ဖင်ကိုကော့ကော့ပေးပြီးကိုကိုခါးကို ခြေနှစ်ဖက်နဲ့ခွထားသည်။ကိုကိုလီးကို လည်းအဖုတ်ကြွက်သားတွေနဲ့ ညှစ်ပေးတော့ ကိုကို ပိုပြီးဆောင့်လိုးလာသည်။
”ကောင်းလား ကိုကိုလိုးတာ” ”အင်းး ကောင်းတယ်ကိုကို လိုးလိုး ” ”စိတ်ချ လိုးမှာ ကိုကို ညီမလေးကိုပဲတစ်သက်လုံးလိုးတော့မှာ” ”တကယ်နော် အခြား ကောင်မတွေသွားမလိုးရဘူးနော်” ”အင်းမလိုးဘူး” ”လိုးရင် ကိုကို့ဟာကိုဖြတ်ပစ်မှာကိုကို့လီးကြီးကညီမလေးအပိုင်နော်” ”အင်း ညီမလေးအပိုင်ပဲ” ကိုကိုကလိုးတာခဏရပ်ပြီးကျမအက်ျီကိုချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ကော့ ချွန်နေတဲ့နို့လေးတွေကိုစို့ပေးလာသည်။ကိုကိုခေါင်းကိုကျမဖက်ထား ရတာပေါ့ရှင်။ “အင်းးးဟင်းးးကိုကို ယားတယ် အီးးယားတယ်လို့ ” ကိုကိုကနို့ကိုတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးစို့ကဆက်လိုးပေးသည်။ “အားးးရှီးးးကောင်းတယ် မြန်မြန်လေး မြန် မြန် ဆောင့် ဆောင့်” “ကောင်းလိုက်တဲ့ညီမလေးစပ်ပတ် အိစက်နေတာပဲ လီးမချွတ်တမ်း လိုးပစ်မယ် တစ်ညလုံးလိုးမယ်” “လိုးပေါ့ ညီမလေး စပ်ပတ်ထဲ ကိုကိုလီးကြီးတစ်ညလုံးသွင်းထား” “စိတ်ချ လိုးမှာ ကောင်းလိုက်တဲ့စပ်ပတ်လေး ဟားးး ရှီးးး အူးးး” “ဗြစ် ဒုတ်ဒုတ် အ ကိုကို ကျဉ်တယ် အားးး ရှီးးးးးး အားးးးးလိုးလိုးး” ခဏကပြီးသလိုမျိုးတကယ်လုံးတုန်တက်လာကာ ကျမဖင်ကိုအတင်း ကော့ပေးမိပြီး အဖုတ်ထဲမှအရည်တွေတဗြန်းဗြန်းပန်း ထုတ်သည်။
ကိုကို့ဂွေးဥတွေနဲ့စည်းခုံကိုပါပေကျံကုန်သည်။ကိုကိုကတော့ မပြီးသေး။ကျမနို့လေးတွေကိုညှစ်နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်နမ်းကာဖင်ကြီး မြှောက်ပြီးဆောင့်ဆောင့် လိုးသည်။ကိုကို့လီးမှာကျမအရည်ဖြူဖြူ တွေနဲ့စီးပိုင်ပြီးအသံတွေမျိုးစုံထွက်နေတော့သည်။ “ဗြစ်ဗြစ် ဘလပ်ဘလပ်ဘလပ် ဘွတ်ဘွတ်ဘွတ်ဘုဘုဘုဗြ စ် ဘွတ်” “ဟင့် ကိုကို အသံတွေထွက်ကုန်ပြီကွာ ခ်ခ်ခ် ” “ထွက်ပါစေကွာ အာ့မှလိုးလို့ပိုကောင်းတာ” “ဘွတ်ဘလွတ် ဘွတ်” ကိုကိုလီးကြီးဆွဲထုတ်တော့ကျ မစပ်ပတ်လေး လီးလုံးပတ်အတိုင်း ခပ်ဟဟလေးကျန်ခဲ့သလိုကျမရင်ထဲဟာကနဲဖြစ်သွားသည်။ ကိုကိုကကျမအပေါ်မှဆင်းကာ ပေါင်လေးကိုဆွဲမြှောက် ကာကားပြီး ဘေးတစ်ချက်စီမှာ ဖိချထားသည်။ကျမဘယ်လိုပုံဖြစ်နေမလဲမြင် ကြည့်ကြပေါ့ရှင်။ပေါင်ကားပြီးစပ်ပတ်ဖြဲခံထားတဲ့ကျမကိုကိုက အဖုတ် ကိုကုန်းယက်ပြန်သည်။ဟတတအဖုတ်ဝလေးကိုလျှာသွင်းပြီး ယက်ပေးသည်။ယက်နေရင်းလျှာကကမဖင်ဝလေးကိုတစ်ချက် တစ်ချက်လာလာထိသည်။ ယားကျိကျိနဲ့ ကျမတွန့်ခနဲတွန့်ခနဲဖြစ်သွား သည်။ “ညီမလေး ပေါင်ကိုထိမ်းကိုင်ထား ကိုကိုလိုးတော့မယ်” “အင်း လိုးးးကိုကို” “ဘုဘုဘု ဘွတ်ဘလွတ် ဘွတ်” အရည်တွေရွဲနေတော့ အသံမျိုးစုံထွက်ပြီးကိုကို့လီးကြီးကျမစပ်ပတ် ထဲတိုးဝင်လာသည်။တစ်ချက်ခြင်းထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်လုပ်ပေးပြီး တစ် ချက်တစ်ချက် ကျမအစိလေးကိုဒစ်ကြီးနဲ့လာလာထိုးသည်။
“ကိုကို အအ လိုးလေ လိုးပေးး မဆွနဲ့ အားးးမြန်မြန်လိုးးး လိုးး” ကိုကိုကကျမအဖုတ်ထဲလီးအဆုံးမြုပ်ပီးဆောင့်လိုးတော့သည်။ “ဘွတ်ဘွတ် ဘု ဘူးးးး ဖောင်းဖောင်းဖောင်းဖောင်း ဘွတ် ဘွတ်” “ကိုကို အားးးးကောင်းလိုက်တာ လိုးပေး လိုးပေး အားးးလိုးလိုးး” “အိုးးး ညှစ်တာကွာ ကောင်းလိုက်တဲ့စပ်ပတ် ရှီးးး ပြဲအောင်လိုးမယ်” “လိုး ပြဲအောင်လိုးးးအားး ဆောင့်ပါကိုကို ပြီးတော့မယ် အားးး ပြီး ပြီးပြီ ပြီးပြီ အားးးးအီးးးးရှီးးးး” ကျမတစ်ချီထပ်ပြီးတော့ကိုကို ကကျမပေါင်လေးကိုဖိကာအတင်း ဆော့လိုးတော့သည်။မကြာပါဘူးအချက်၁၀၀နီးပါးလောက်ပစ်ပစ် ဆောင့်လိုးပြီး ကျမအဖုတ်ထဲလီးကြီးဆိုက်ပြီးလ ရည်တွေပူခနဲ တစ်ဗြန်းဗြန်းနဲ့ပန်းထည့်တော့သည်။လရည်ပန်းထည့်ပြီးပေမယ့် မရပ်သေးဘဲဆက်လိုးနေသေးသည်။ “အားး အားး ကိုကိုလည်းပြီးပြီကွာ ရှီးးးကောင်းလိုက်တာကွာ”“အင်းးးးဟင်းးးကိုကို ညီမလေးလည်းထပ်ပြီးပြန်ပြီ အားးးထိုညကကိုကိုကိုနဲ့ကျမမိုးလင်းပေါက်ကိုလီးနဲ့စပ်ပတ်မချွတ်ဘဲ လိုး လိုက် နားလိုက်နဲ့မနက်မိုးလင်းကာနီးမှ ရပ်ကြတော့သည်။ မနက်၉နာရီထိုးမှကျမနိုးလာသည်။ကိုကိုကတော့တစ်ရူးရူးနဲ့အိပ်တုန်း ရှိသေးသည်။ကိုကို ရင်ခွင်ထဲအိပ်နေတာမို့ကိုကိုအသက်ရှူတိုင်း နှာခေါင်းက လေလေးတွေကျမနှဖူးကိုလာထိနေသည်။ကိုကိုကလူသာ အိပ်နေတာ သူ့လီးကြီးကမအိပ် ကျမ ပေါင်ကြားထဲဝင်ကာ အဖုတ်လေးကိုဒစ်ကြီးကထိုးမိနေသည်။ကျမငုံ့ကြည့်တော့ ကိုကိုလီးကနည်းတာချည်းမဟုတ်။အောကားထဲကလူမဲတွေရဲ့လီးလို ကြီးပြီးရှည်လည်းရှည်သေးသည်။ဒီလောက်ကြီးတဲ့လီးကြီးကျမ အဖုတ်လေးထဲဝင်တာအံသြမိသည်။မောင်နှမနှစ်ယောက်စလုံး ကိုယ်လုံးတီးနှင့်အိပ်နေ တာမို့အသားချင်းထိနေသည်။ကိုကိုဗိုက်နဲ့ ကျမနို့လေးတွေထိနေသည်။ကိုကိုကကျမကိုဖက်ပြီးခွထားတော့ ကျမထချင်ပေမယ့် ထမရ။သူ့လက်ကြီးနဲ့ ခြေထောက်ကိုဖယ်တော့ကိုကိုနိုးလာသည်။
“အင် ဝှါးးးး ညီမလေးနိုးပြီလား” “အင်း နိုးပြီကိုကို ဖယ်အုန်း ညီမလေးရှူးပေါက်ချင်လို့” “အင်း သွားလေ ” ကျမအဝတ်တွေရှာတော့မတွေ့။ညက ကိုကို ဘယ်ကိုပစ်လိုက်လဲမသိ။ သေးပေါက်ချင်လာတာနဲ့မထူးတော့ဘူးလို့တွေးကာရေချိူးခန်းကို ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ပဲပြေးသည်။ကျမရှူးပေါက်ပြီးမျက်နှာသစ် တော့ ကိုကို ရေချိုးခန်းထဲဝင်လာသည်။ကျမကိုနောက်ကနေဖက်ပြီး လည်ပင်းကို စုပ်နမ်းကာပါးလေးကိုလာနမ်းသည်။ “ကိုကို ညှစ်ပတ် မျက်နှာသစ်အုန်း လေ”“မသစ်တော့ဘူးကွာ” “အ ကိုကို ရှီးးးး” နောက်ကနေသူ့လီးကြီးနဲ့ကျမဖင်ကြားထဲထိုးကာအဖုတ်လေးကို လိုးပြန်သည်။ “အားး ကိုကို သေပြီ နာ တယ် ဟင့်ဟင့် ကိုကို” သွားကိုဆက်မတိုက်နိုင်ဘဲ သွားပွတ်တံကို ဘေစင်ပေါ်တင်ပလုတ် အမြန်ကျင်းရသည်။ကိုကိုကနောက်ကနေဆောင့်လိုးလာတော့ ကျမ အဖုတ်ထဲကျိန်းခနဲကျိန်းခနဲဖြစ်လာသည်။ “အ ကိုကိုရေ ကျဉ်တယ် အ အ အဟင့်အဟင့် ညကလည်း တစ်ညလုံးလိုးထားတာကို အားးးနာတယ်လို့ ကိုကို ဟင့်ဟင့် ကိုကို ညီမလေးကိုသနားပါအုန်း အားးးရှီးးး” “ညီမလေးကိုဖင်ပြောင်လေးနဲ့ကြည့်ပြီး မနေနိုင်တော့လို့ပါကွာ အားးး ကောင်းလိုက်တာကွာ ညှစ် ညှစ် ညှစ်စမ်း ညီမလေး အူးးး” ကိုကိုကကျမကိုရေချိုးခန်းနံရံကြွေပြားမှာ မျက်နှာအပ်ကာနောက်က နေခါးလေးကိုညှစ်ကိုင်ကာ တဖန်းဖန်းလိုး တော့သည်။တစ်ညလုံး ကိုကို့ဧရာမလီးကြီးနဲ့အလိုးခံထားရလို့ အဖုတ်လေးကျိန်းစပ်နာကျင် နေပေမယ့် ခု ကိုကိုလိုးတော့လည်းပါးစပ်ကသာငြင်းနေတာ အဖုတ်က ဝင်လာတဲ့လီးကြီးကိုဖမ်းညှစ်ကာဖင်လုံးလေးကိုလည်းနောက်ကိုပြန် ပစ်ဆောင့်နေမိသည်။တစ်ညလုံးကိုကိုပန်းထည့်ထားတဲ့လရည်တွေ ပြန် ထွက်လာကာ အမြုပ်ပါထနေတော့သည်။ကိုကိုကတော့တစ်ရှီးရှီးနဲ့ငြီးကာကျမဖင်လေးကိုပစ်ပစ်ဆောင့်နေတော့သည်။
ထိုနေ့ကပွဲရုံပိတ်ရက်နဲ့ကြုံလို့အလုပ်မသွားရတော့ကိုကို့အကြိုက်ပင်။ မေမေနဲ့ဖေဖေကလည်းနောက်နေ့ကျမှပြန်လာမှာဆိုတော့ပိုဆိုးသည်။ တစ်နေကုန် ကျမကိုလိုးနေတော့သည်။ကိုယ်ပေါ်မှာအဝတ်ကိုမကပ်ရ။ အိမ်နေရင်းဒူးဖုံးဂါဝန်လေးသာဝတ်ခိုင်းပြီးအတွင်းခံတွေမဝတ်ရ။ အဆာပြေလေးစားလိုက်နား လိုက် လီးတောင်ရင်လိုးလိုက်နဲ့လိုးသည်။ကျမအဖုတ်လေးအထိမခံနိုင်အောင်ကျိန်းစပ်နေတယ်ဆိုမှမလိုးတော့ ဘဲရပ်သည်။ကျမဆက်ခံမယ်ဆို ကိုကိုက လိုးအုန်းမယ့်ပုံကြီး။ တော်တော်ဏှာကြီးတဲ့ကိုကို။ကျမမှာအပျိုစစ်စစ်ပါကင်လေးကို တစ်နေ့နဲ့တစ်ညကိုကိုလိုးတာခံရပြီးနောက်နေ့ကျ မထနိုင်တော့။ ပ မ်းဖျား ဖျားတော့သည်။ကိုကိုကတော့ မျက်တွင်းကျဒူးချောင်ရုံပဲ ဖြစ်သည်။အင်းပေါ့လေ သူက ဆော်ထည်လဲတွဲပြီးဆော်တွေဖြုတ်နေ ကြဆိုတော့ အတွေ့အကြုံရှိနေပြီ။ကျမမှာတော့ အဖုတ်လေးကွဲပြီးကျိန်းစပ်လို့၂ရက်လောက်ကိုဖျားသွားသည်။မေမေမသိအောင် ကိုကိုကကိုယ်ဝန်တားဆေးဆိုတာ ကြီးလာတိုက်သေးသည်။ကိုကိုနဲ့ ကျမ မောင်နှမခြင်းမလုပ်သင့်ပေမယ့်မှားမိကြသည်။အတွေ့နောက် ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ခဲ့ကြသည်။ အထူးသဖြင့် ကျမလေ ကိုကိုလီးတုတ်တုတ်ရှည်ရှည်ကြီးကိုစွဲနေမိသည်။ကျမလည်း လိင်အတွေ့အကြုံကိုအကိုအရင်းနဲ့နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့ရပြီး အရူး အမဲကျွေးမိသလိုပါပဲရှင်။ကိုကိုလိုးတိုင်းကိုခံနေတော့သည်။ သူ့လီးကြီးကခံရတာမသက်သာလှပါ။တစ်ချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်း နင့်ကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားပြီး အဖုတ်အတွင်းထဲကအောင့်ပေမယ့်တစ်နေ့ကိုတစ်ခါအလိုးမခံရရင်မနေနိုင်တော့တဲ့အထိဖြစ်လာသည်။ အိမ်မှာ မေမေတို့ရှိလို့အလိုးမခံရရင်ကိုကိုက အခန်းထဲခိုးဝင်လာကာ အဖုတ်ကိုယက်ပေးတတ်သည်။ခုဆိုကိုကိုနဲ့ကျမ မောင်နှမချင်း လိုးလာတာလေးလကျော်လာပြီ။။ခုလည်းပွဲရုံကနေ အိမ်ပြန်ာက် ရောက်ခြင်း ကိုကိုကကျမအခန်းထဲမေမေမသိအောင်ဝင်လာကာ အဖုတ်ယက်ပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။အဝတ်လဲဖို့ဘီရိုဖွင့်နေတုန်းကျမ ရှေ့ဒူး ထောက်ကာထဘီထဲဝင်ပြီးအဖုတ်ကိုပင့်ယက်နေသည်။
တစ်နေကုန်ပွဲရုံမှာချွေးအောင်းထားလို့အနံ့ထွက်တာကိုမယက်နဲ့တား ပေမယ့်မရ။အဖုတ်တစ်ခုလုံးပါးစပ်ကြီးထဲအပြည့်စုပ်ထားစဉ် တံခါးခေါက်သံကြားလို့ တကိုယ်လုံးတုန်သွားသည်။တံခါးခေါက်သံနှင့် အတူတံခါးလေးပွင့်လာကာမေမေ့ခေါင်းလေးဝင်လာသည်။ဘီရိုတံခါး ဖွင့်ထားတော့တော်သေးသည်။ မေမေကလည်းတံခါးဟရုံဟပြီးကျမ ကိုစကားလှမ်းပြောနေလို့တော်သေးသည်။အထဲဝင်လာလျှင် မေမေ ကိုကိုနဲ့ကျမဖြစ်နေပုံကိုမိမှာအသေအချာပင်။ အလျင်လိုနေဟန်နဲ့ကိုကို့မေးပြီးကျမကိုစကားပြောကာအစည်းအဝေးတက်ဖို့ထွက်သွား တော့မှ ကျမသက်ပြင်းချနိုင်သည်။ကိုကိုကလည်း မေမေရှိတယ် နေအုန်းဆိုတာမရဘူးလေ။အတင်းကိုအဖုတ်ယက်နေတာ။ မေမေသွားတော့မှကိုကို့ကိုထဘီအပြင်ထွက်ခိုင်းကာတံခါးတွေပိတ် ခိုင်းရသည်။ကိုကိုထန်နေ သလို ကျမလည်းထန်နေသည်။ ပွဲရုံမှာလည်းခုရက်ပိုင်းညဘက်ပါကုန်တွေဝင်နေလို့တစ်မိသားစုစလုံးမအားကြ။ညနက်မှအိမ်ပြန်ရောက်တော့ပင်ပန်းပြီး တန်းအိပ် ဖြစ်နေကြသည်။ကိုကိုနဲ့ကျမလည်းမလိုးရတာ၃ရက်လောက်ရှိပြီလေ။မေမေနဲ့ဖေဖေကဒီညအစည်းအဝေးတက်ရမှာဆိုတော့ ညမိုးချုပ်မှ ပြန် ရောက်မှာ။ကျမနဲ့ကိုကိုလိုးဖို့အချိန်ကောင်းကောင်းရသေးသည်။ကျမလည်းကိုကိုခြံတံခါးအိမ်တံခါးပိတ်နေတုန်းရေချိုးခန်းဝင်ကာရေချိုးချလိုက်သည်။ရေ အေးအေးလေးတွေကျမခေါင်းပေါ်ကျလာတော့ ကျမလန်းဆန်းသွားသည်။ပင်ပန်းနေတုန်းရေအေးအေးလေးနဲ့ရေချိုး ရတာကိုကျမကြိုက်သည်။
ခေါင်းကို မော့ကာမျက်လုံးမှိတ်ပြီးဇိမ်ခံ နေလိုက်သည်။ကျမပေါင်ကြားထဲအသားချောင်းမာမာကြီးဝင်လာ တော့ကိုကိုရောက်လာမှန်းသိလိုက်သည်။သူ့လီးကြီးက ကျမဖင်ကြားမှ အဖုတ်ကိုလျောထိုးဝင်လာကဒစ်ကြီးကအစိလေးကိုခလုတ်တိုက်သွား သည်။ကျမနို့လေးတွေကိုလည်းအလွတ်မပေး။ကိုကို့လက်ကြီး တွေက ဆုတ်နယ်ပေးနေလေသည်။ခုနကကိုကို အခန်းထဲမှာ အဖုတ်ယက်ပေး ကတည်းကရွနေတဲ့ကျမ နို့ညှစ်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအရည်တွေ တောက်တောက်ကျလာတော့သည်။ကျမဂုတ်ကိုမုတ်ဆိတ်မွှေး စူးစူးတွေလာထိပြီးလည်ဂုတ်ကိုစုပ်နမ်းသည်။ကိုကို့မုတ်ဆိတ်မွှေးတွေ ကျမကိုပို ပြီးfeelတက်စေသည်။ပေါင်ကြားထဲမှာလည်းလီးကြီးက အဖုတ်ကိုလျောထိုးနေသလို လက်ကလည်းအငြိမ်မနေ။ပါးစပ်က လည်းဂုတ်ကိုစုပ်နမ်းနေပြီး မုတ်ဆိတ်မွှေးတွေနဲ့ပါအပွတ်ခံရတော့ ကျမမှာ ယွပြီးရင်းကိုယွလာတော့သည်။ကိုကို့နှုတ်ခမ်းထူထူနဲ့ စုပ်အားပြင်းပြင်းအစုပ်ခံရတာကြိုက်ပေမယ့်စုပ်ရာ တွေထင်ကုန်မှာစိုးရသည်။လူမမြင်နိုင်တဲ့နေရာဆိုပြသနာမရှိ။ဂုတ်တို့လည်ပင်းတို့ဆို အကွက်တွေထင်းနေရော။တစ်ခါကကိုကိုစုပ်လို့နီရဲနေတဲ့အကွက်ကြီး ကိုသနပ်ခါးထူထူလိမ်းပြီးဖုံးထားခဲ့ရဖူးသည်။မေမေမေးတော့ အကျိတ်ပေါက်ချင်လို့ သနပ်ခါးအုံထားတယ်ပြောရတာပေါ့ရှင်။
ခုလည်းကိုကိုကဂုတ် ကိုစုပ်နေပြန်လို့တားရသည်။ “ဟင့် ကိုကို မစုပ်နဲ့လေ မာကင်တွေဖြစ်ကုန်မယ် အားးတော်ပြီလို့” “အင်းပါ ညီမလေးရာမစုပ်တော့ဘူး” ကျမတားမှ ကိုကို ဂုတ်ကိုဆက်မစုပ်ဘဲ အောက်ကိုဆက်ဆင်းသည်။ ကျောတစ်လျှောက်ဖွဖွလေးစုပ်နမ်းသွားတာ ကျမဖင်တုံးတွေဆီ ရောက်တဲ့အထိပဲ။လရည်နဲ့တည့်လို့ လားမသိ ကျမဝလာကာဖင်တွေ လည်းကိတ်လာသည်။သူများတွေပြောတာကြားဖူးတာပဲ။မိန်းမက လင်နဲ့တည့်ရင် ဝလာတယ်ဆိုလားပဲ။ကိုကိုကဖင်တုံး တွေကိုညှစ်ပြီး သွားနဲ့မနာအောင်ကိုက်ပေးသည်။ကိုက်လိုက်ယက်လိုက်နဲ့ဖင်တုံး ၂တုံးကိုဖြဲကာဖင်ဝစူစူလေးကိုလျှာဖျားချွန်လေးနဲ့ထိုးကလိလေသည်။ဖင် အယက်ခံရတာယားပေမယ့် ခံလို့ကောင်းပြီးအဖုတ်ကအရည် တစိမ့်စိမ့်ကျရသည်။ခုတလော ကိုကို ကျမကိုအဖုတ်ယက်ရင် အဖုတ်မယက်ပဲဖင်ကိုပဲ သက်သက်ယက်ပေးသည်။အဖုတ်က အယက်မခံရဘဲကလိကလိဖြစ်ကာ ဖင်ကိုယက်ခံရတာနဲ့တင် ကျမပြီးသွားတတ်သည်။ခုလည်းကိုကိုကျမဖင်ကိုဖြဲ ကာယက်ပေး တော့ဖင်ကိုကော့ပေးပြီးဇိမ်ခံနေမိသည်။ကိုကို့လျှာက ကျမဖင်ထဲဝင်လာသည်။ယွစိယွစိနဲ့မတရားကိုယားလာသည်။
“ကိုကိုရေ အူးးးးယားတယ် ဟင့် အားး ယားတယ်ဆို အ အဟင့် ” ယားပါတယ်ဆိုမှပိုလို့တောင်တိုးယက်သေးသည်။ “ပြွတ်ပြွတ် ပလပ်ပလပ်ပလပ်ပြွတ် အ ကိုကို ဖင်ကိုမယက်ပါနဲ့တော့” ဖင်အရမ်းယားလာပြီးဖင်ဝလေးစူပွသွားတာတော့ဖင်ထဲလက်ညိုး ထိုးထည့်ကာကလိသည်။ကိုကိုအဲ့လိုဖင်ကိုကလိတာ ခုနောက်ပိုင်း တော်တော်စိပ်လာသည်။ခဏခဏဖင်ကိုနှိုက်လာသည်။ခုဆို လက်ညိုးလက်ခလယ် ၂ချောင်း ဝင်ထွက်နိုင်နေပြီ။ဧကန်န ကျမကို ဖင်လိုးဖို့များ ခုလိုကလိနေသလားမသိ။ကျမကိုတော့ခုထိဖင်လိုးဖို့ မပြောဖူး မတောင်းဖူးသေးပါ။အောကားထဲကကောင်မတွေ ဖင်ခံတာတော့ကြည့်ဖူးသည်။သူတို့ဖင် ခံနေတာကြည့်ပြီးကျမလည်း စမ်းသပ်ကြည့်ချင်လာသည်။ကိုကိုကလိုးမယ်လို့ ပြောလာရင်တော့ မငြင်းမိမှာသေချာသည်။ကိုကိုလီးတုတ်တုတ်ရှည်ရှည် ကြီးနဲ့ဆိုဖင်ပါ ပြဲနိုင်သည်။လောလောဆယ်တော့အဖုတ်ကအရမ်းယွပြီးခံချင်နေပြီ။ “အင်းးးးကိုကို လိုးပေးပါတော့ အီးးးးရှီးးးဟင့် ကိုကို လိုးပေးးးးး လိုး ပေးးးလို့” ကိုကိုကဘာမှပြန်မပြော။ကျမဖင်ကိုသာအတင်းထိုးယက်နေသည်။ အရည်တွေလည်းရွဲလာပြီး ပြီးချင်လာသည်။မနေနိုင်တော့ပါ။ ကိုကို့ဘက် ကိုဖင်လေးအတင်းကော့ပေးကာစောက်ရည်တွေပန်းထုတ် ပလိုက်တော့သည်။ကျမပြီးတာကို ကိုကိုကအလွတ်မပေး။ချက်ခြင်း အဖုတ်လေးကိုသူ့ပါးစပ် ကြီးနဲ့ဖမ်းငုံကာထွက်သမျှစောက်ရည်တွေ အကုန်မျိုချနေတော့သည်။ပြီးသွားတော့ကျမခြေမခိုင်တော့။ အောက်ကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းလျောကျကာ ဖင်ပူး တောင်းထောင်တဲ့ အသွင်ပြောင်းသွားအောင်ကိုကိုကထိန်းကိုင်ပေးလေသည်။ကျမ ဖင်လေးကိုအစွမ်းကုန်ပစ်ပြီးရေချိုးခန်းကြမ်းပြင်မှာပါးအပ်ကာ ငြိမ် နေလိုက်သည်။အဲ့လိုအချိန်ဆိုကိုကို့အကြိုက်ပေါ့ရှင်။ကျမကို အရည်တောက်တောက်ကျအောင်ဆွ ပြီးအောင်မှုတ် ယက် ကလိပြီးမှ အဖုတ်ကို သူ့လီးကြီး နဲ့မညှာမတာပစ်ပစ်လိုးတတ်တာသူ့အကျင့်။
သူ့ဟာကြီးနဲ့က အဲ့လိုထကြွနေမှခံသာတာရှင့်။နို့မို့ဆို မသက်သာဘူး။ ကျမအဖုတ်လေးကိုထိုးဖြဲနေသလိုခံစားရအောင်လိုးတာရှင့်။ကျမက အဖုတ်ကြီးပြီး ယွတာလည်းပါတာရှင် ခ်ခ်ခ်။လေးလအတွင်းကိုကို လိုးလွန်းလို့ အဖုတ်လည်းနည်းနည်းတော့ကျယ်ချင်နေပြီ။ဒါပေမယ့် လိုးတိုင်းအဖုတ်ကြီးထဲသူ့လီးကြီး ကအပြည့်အသိပ်ပါပဲရှင့်။ခုလည်း သူ့လီးကြီးကိုအဖုတ်အလယ်မှာလျောထိုးပြီးကလိနေပြန်သည်။ခုမှ မုန်တိုင်းထန်ပြီးငြိမ်ကာစကျမထပ်ယွလာ ပြန်သည်။ကိုကို့လီးကြီးနဲ့ အဖုတ်ကိုထိလိုက်တိုင်းကျမအမြဲလိုလိုကိုထန်လာရပါသည်။ဒစ်ကြီးနဲ့ ဖင်ဝကိုပါလာလာတေ့နေသည်။တစ်ချက်တစ်ချက်ဖင်ဝ ကိုလိုးမလိုနဲ့ ဖိထည့်သည်။ဆွပေးနေတော့ကျမလည်းမနေနိုင်တော့။ “ကိုကို လိုးလေ ဘာလို့ကလိနေတာလဲ ဟင့် ” “အလိုးခံချင်နေပြီလား ချစ်လေး” “အွ န်းးးးး ခံချင်နေပြီ လိုးပေးးး ဟင့် လိုးပေးးးးကိုကိုလီးကြီးနဲ့ ညီမလေးအဖုတ်ကိုလိုးပေး အားကြီးနဲ့ဆောင့်ဆောင့်လိုးပေးးး” “ဘုဘွတ်ဘွတ်ပလွတ်ပေါက်ဗြွ တ်ဗြစ်” ကျမစကားလည်းဆုံးရောကိုကို့ကကျမအဖုတ်ထဲလေအန်သံမျိုးစုံ ထွက်အောင် သူ့လီးကြီးလိုးသွင်းတော့သည်။တစ်ခါတည်းအဆုံးကို ထိုးထည့် တာ။ကိုကိုလိုးလွန်းလို့ကျယ်ချင်တဲ့အဖုတ်ထဲပြည့်ကြပ်နေ တော့သည်။အဆုံးသွင်းပြီးတော့ တစ်ချက်ချင်းနှဲ့နှဲ့ပြီးလိုးပေးသည်။ ဖီးလေးနဲ့အေးဆေးအလိုးခံ ရတာကိုကြိုက်ပေမယ့်သူအကျင့်လုပ်ထား လို့ခပ်ကြမ်းကြမ်းလိုးပေးမှပိုပြီးထိမိသလိုဖြစ်နေပါပြီ။
“ကိုကို ဆောင့်ပေး မနှဲ့နဲ့တော့ အင်းးး အားးးးလိုးပေး ဆောင့်ဆောင့် ကြမ်းကြမ်းလေးလိုးပေး ကိုကို လိုးလိုး” ကျမအတင်းလိုးခိုင်းတော့မှ ဆွလိုး လိုးနေတဲ့ ကိုကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆောင့်တော့သည်။ကျမလည်းဖင်ကိုနောက်ကော့ပစ်ပေးထားသည်။ ကျမခါးကိုကိုင်ကာတဖန်းဖန်းနဲ့လိုးပြီးမကြာဘူး ယွနေတဲ့ကျမ စောက်ရည်တွေပန်းထုတ်တော့သည်။ကိုကိုကတော့ တလစပ်ကို တဖန်းဖန်းဆောင့်နေတော့တာပါပဲ။ကျမမှာ၂ချီဆက်တိုင်ပြီးရသည်။ ၂ချီပြီးတော့ ရှေ့ကို မှောက်ကျသွားတဲ့ကျမအပေါ်အသာခွကာဖြည်းဖြည်းလေးလိုးပေးရင်း ကျောတွေကိုစုပ်နမ်း ဂုတ်တွေပါးတွေ နားရွက်တွေအပြင် နှုတ်ခမ်းလေးကိုလည်း စုပ်နမ်းပေးသည်။ “အားးးကိုကို မီးပြီးပြန်ပြီ အားးရှီးးးးးးး” “ကောင်းလိုက်တဲ့စပ်ပတ်လေးကွာ တစ်သက်လုံးလိုးပစ်မယ်” “လိုး တစ်သက်လုံးလိုးပေး မီး လေကိုကို့လီးကြီးကိုစွဲနေပြီ” “ဖင်ကိုလည်းလိုးမယ်နော် ချစ်လေး” “အင်း လိုးးးး မီးတစ်ကိုယ်လုံး ကိုကို့အတွက်ပဲ ကိုကိုကမီးရဲ့လင်ပဲ” “အင်းပါ မယား လေးရယ် ထအုန်း ကိုကို့အပေါ်တက်ဆောင့်အုန်း” “အင်း ဆောင့်မယ်” ကိုကိုကသူ့လီးကိုကျမအဖုတ်ထဲကမထုတ်ဘဲ ကတ်သီးကတ်သတ်နဲ့ ကျမကိုသူ့ အပေါ်ရောက်အောင်တင်သည်။ကသီပေမယ့်ကျမလည်း ခုချိန်မှာကိုကို့လီးကြီးကိုအဖုတ်ထဲကမထုတ်လိုပါ။ကျမအပေါ်ရောက် တော့ ကိုကိုကလက် နောက်ပစ်ပြီး ထိုင်နေတာ။ကျမကကိုကိုလည်ပင်း ကိုဖက်ပြီး တစ်ချက်ခြင်းဖိကျိတ်ကာပွတ်ရင်းအရသာခံနေတာ။ ပြီးမှ ဖင်ကြီးမြှောက်မြှောက်ပြီး ဆောင့်ချမှာလေ။ကျမအပေါ်ရောက် တော့ကျမကြိုက်သလိုလုပ်တာပေါ့ရှင်။ကိုကို့ကိုနှုတ်ခမ်းစုပ်နမ်းပြီး ဖက်ထားတာ။ကိုကို့လီးကြီးအဖုတ်ထဲထည့်ပြီး ထိုင်နေရတာ တုတ်ကြီး ထည့်ခံထားရသလိုပါပဲရှင်။ရင်ခေါင်းအထိကိုရောက်နေသလိုပါပဲ။ ကိုကို ကျမနို့လေးတွေကိုစို့ပေးတော့ကိုကိုခေါင်းကိုအတင်း ဖက်ထားမိသည်။ကျမထပ်ရွလာပြီးကိုကို့ကိုဆောင့်တော့သည်။
“ဖတ်ဖတ်ဖတ်ဖတ်ဖတ်ဖတ် ကိုကို အီးးးးးရှီးးးးးကောင်းလိုက်တာ” ဒီတစ်ခါတော့ကိုကို့ကကော့ပေးပြီးကျမကပဲဆောင့်သည်။ကိုကိုက ဇိမ်ခံနေတာပေါ့ ရှင်။ကျမခပ်ကြမ်းကြမ်းပဲဆောင့်ပစ်ရင်းကိုကိုနဲ့တူတူပြီးသွားသည်။ “ချစ်လေးဆောင့်ဆောင့် ကိုကိုပြီးတော့မယ် ကောင်းလိုက်တာကွာ ” “ဘွတ်ဘွတ် ဘတ်ဖွတ် ဖတ်ဖတ်ဖတ်ဖတ်ဖတ်ဖတ် ”“အား ပြီးပြီကိုကိုရေ အားးးကောင်းလိုက်တာ” “ကိုကိုလည်းပြီးပြီကွာ ကောင်းလိုက်တဲ့စပ်ပတ်လေး” “အမြဲတမ်း လိုးပေးနော်ကိုကို” “အင်း လိုးပေးမယ်” ကိုကိုနဲ့ကျမဖက်ပြီးအချစ်တွေပြည့်ဝစွာနဲ့နှုတ်ခမ်းခြင်းစုပ်နမ်း ကြသည်။ခဏနားပြီးရေချိုးခန်းထဲရောက်တာ ကြာနေပြီမို့ ထကြကာရေချိုးကြသည်။ရေချိုးပြီးတော့ ဗိုက်ကဆာလာတာသတိရသည်။ ကိုကို့နဲ့ကျမ လမ်းထိပ်ကကြေးအိုးဆိုင်မှာကြေးအိုးသွားသောက် ကြ သည်။ကျမတို့ကိုသိတဲ့လူတွေအမြင်မှာတော့သိပ်ချစ်ကြတဲ့ မောင်နှမပေါ့ရှင်။ကိုကိုကခွံ့ကျွေးလိုက်ကျမကခွံ့ကျွေးလိုက်နဲ့ပေါ့။ကျမနဲ့ကိုကိုချစ်ကြတာ တရပ်ကွက်လုံးကသိကြတယ်လေ။မသိတဲ့သူတွေကတော့သမီးရည်းစားလို့ထင်ကြမှာပါ။ကျမတို့ကတော့ ချစ်သူစုံတွဲလို့ပဲကိုယ့်ဘာသာသတ်မှတ် ထားကြတာ။စားသောက်ပြီး ပန်းခြံဘက်လမ်းလျှောက်တယ်။ကိုကို့လက်ကိုတွဲလွဲခိုမှီတွယ်ပြီး လျှောက်ရတာကြည့်နူးစရာပါ။ကိုကိုနဲ့ကျမ တစ်သက်လုံး အိမ်ထောင် မပြုဘဲ လူပျိုအပျိုအနေနဲ့ပဲနေသွားကြဖို့စိတ်ကူးထားတယ်။မလိုဘူး လေ။ကိုကိုကခုကျမယောက်ျားဖြစ်နေပြီပဲဟာ။မေမေနဲ့ဖေဖေကတော့ ကျမတို့ကိုအိမ်ထောင်ပြုဖို့ပြောဖူးပေမယ့် နှစ်ယောက်စလုံးဟိုဟိုဒီဒီ လျှောက်ပြောထားပြီး ပတ်ရှောင်နေကြတယ်လေ။ကိုကိုနဲ့ကျမက လူမသိသူမသိ လင်မယားဖြစ်နေတာမေမေတို့မှမသိဘဲကိုးးး။
“ညီမလေး ” “ရှင် ကိုကို” “ကိုကိုဒီလိုလမ်းလျှောက်ရတာပျော်ရဲ့လား” “ပျော်တာပေါ့ကိုကိုရဲ့ ကိုကိုကရော” “ကိုယ့်ချစ်သူလေးနဲ့တူတူမခွဲတမ်းနေရတာမ ပျော်ဘဲရှိမလား” “အိုးးးကိုကို လူတွေနဲ့လေ အိမ်ရောက်မှလေ နော်” “အင်း ဟုတ်သားပဲ ကိုကိုသတိလွတ်သွားလို့ ဟဲဟဲ ” “ဟွန့် ကိုကိုနော် မသိတာကြနေ တာပဲ ” ကိုကိုကလမ်းလျှောက်စကားပြောနေရင်းကျမကိုနမ်းဖို့လုပ်လို့အတင်း တားလိုက်ရသည်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူတွေနဲ့လေ။မသိတဲ့သူတွေဆို ပြသ နာမရှိ။သိတဲ့သူ တွေ့သွားရင် ရှုပ်ကုန်မှာစိုးတယ်လေ။အိမ် ရောက်ရင်တော့ ကိုကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့ရှင်။ “အာ့ဆို အိမ်ပြန်စို့ လာ ကိုကိုမရတော့ဘူး” “ဟုတ် ပြန်မယ်ကိုကို” ကျမနဲ့ကိုကို ပန်းခြံကထွက်တော့ ကိုကို့ဘော်ဒါတစ်ယောက် နဲ့တွေ့သည်။ “ဟာ သားရီး ကိုကိုမောင် ဘယ်တွေပျောက်နေတာလဲဟ ငါတို့ ဘက်တောင်မလာတော့ဘူး” “အေးကွာ ငါမအားလို့ကွ ပွဲရုံမှာခုရက်ပိုင်းကုန်တွေအဝင်များနေလို့. အလုပ်တွေရှုပ်နေတာအောင်ကြီး” “အေးပါကွာ နောက်နေ့လာခဲ့အုန်း ဒါမင်းကောင်မလေးလား ငါ့မိတ်ဆက်ပေးအုန်းလေကွာ” “ဒါ ငါ့ညီမလေးပါကွ ချိုချိုအောင်လေကွာ မင်းကလည်း” “ဟာ အေးဟုတ် သားကွ ချိုချိုအောင်က တော်တော်ထွားလာတာပဲ လှလည်းလှလာတယ် ငါမှတ်တောင်မမှတ်မိဘူး ” “အေး ခုမင်းအလုပ်ပြန်လာတာလား ” “အေးကွ အလုပ်ကဒီနေ့နောက်ကျတယ်” “ငါတို့မောင်နှမလည်း လမ်းထိပ်မှာမုန့်ထွက်စားရင်း ဒီဘက်ကို လမ်းလျှောက်ထွက်လာတာ” “အေးအေး နောက်ရက် ငါတို့ ဘက်လာအုန်းလေကွာ ခု ငါလည်း နောက်ကျနေလို့ လစ်ပြီကွာ” ဟိ ကိုကို့ဘော်ဒါက ကျမကိုမမှတ်မိဘူး။မင်းရည်းစားလားတဲ့ ခ်ခ်။
အဲ့လိုတကယ်ဖြစ်ချင်လိုက်တာ။လူမသိသူမသိချစ်သူပါကိုကြီးရဲ့လို့ ပြောချင်လိုက်တာ။တကယ်ပြောထွက်လာတာကတော့ တစ်မျိုးပါ။ “ကိုကို မီးတို့ အနေအထိုင်ဆင်ခြင်မှရမယ်နော်” “ဘာလို့လဲချစ်လေးရဲ့” “ခုနကပဲကိုကို့ဘော်ဒါ ညီမလေးကို ကိုကိုစော်လို့ထင်သွားတာလေ” “ထင်ပါလေဘာဖြစ်လဲချစ် လေးရ” “အို ကိုကိုကလည်း မကောင်းဘူးလေ သိရဲ့သားနဲ့ ” “အင်းပါ ကိုကိုသိပါတယ် နှစ်ယောက်ထဲရှိရင်ရော” “အဲ့ကျတော့ ကိုကို့သဘောပေါ့ ” “ဟင်းးး မလွတ်လပ်လိုက်တာကွာ နှစ်ယောက်တည်းခရီးထွက်ပြီး အေးဆေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလိုက်ချင်တယ် လာမယ့်ဒီဇင်ဘာ ကျရင် ခရီးသွားမယ်ကွာ လိုက်မှာလား ချစ်လေး”“အင်းလိုက်မယ်လေ ဘယ်ကိုသွားမလဲကိုကို” “အာ့တော့ တစ်ဖြည်းဖြည်းစဉ်းစားကြတာပေါ့ ခုတော့ အိမ်အမြန်ပြန်စို့ ကိုကိုမရ တော့ဘူး” “လမ်းမလျှောက်ချင်တော့ဘူးကိုကိုရယ် ခြေထောက်ညောင်းလာပြီ” “အာ့ဆိုကိုကိုကျောပိုးမယ်လာ” “လူတွေနဲ့လေ ကိုကိုကလည်း” “လာပါ ချစ်လေးရ မသိတဲ့သူတွေကချစ်သူတွေလိုမြင်ပြီး သိတဲ့သူတွေကျတော့ သိပ်ချစ်ကြတဲ့မောင်နှမလို့ မြင်လိမ့်မယ် ဂရုစိုက်မနေနဲ့တက် ” “အာ့ဆိုတက်မယ်”
ကိုကိုကျမကိုကျောပိုးပြီးအိမ်ကိုပြန်လာသည်။ကျမဝလာတယ် ဆိုပေမယ့် သန်မာတဲ့ကိုကိုအတွက်အေးဆေးပါ။ကျမကကိုကို့ကို ခဏခဏကျောပိုးစီး နေကျလေ။ပါးချင်းကပ်ပြီးကိုကို့ပါးကိုနမ်းသလို ကိုကိုကလည်းနမ်းတယ်။စကပ်အောက်ကစွင့်ကားနေတဲ့ကျမဖင်တွေ ကိုလည်းထိန်းကိုင်ရင်းညှစ်ပေးလာ သည်။ကျမနို့တွေကလည်းကိုကို့ ကျောနဲ့ဖိပြီးပိပြားနေပြီ။လူလစ်တာနဲ့ဖင်ကိုညှစ်ကိုင်လာတော့ကျမ ယွလာပြီးအဖုတ်ကအရည်စို့လာသည်။လမ်းမှာ မသိ တဲ့လူတွေက ကိုကိုပြောသလိုပဲ ဟိုမှာကြည့်စမ်းသူတို့အတွဲချစ်နေလိုက်ကြတာတဲ့။
သိတဲ့သူတွေတွေ့တော့ ဒီမောင်နှမတော်တော်ချစ်တာပဲ ဟိုမှာကြည့် စမ်း မင်းတို့တွေနဲ့ကွာပါ့တဲ့။အဲ့လိုပြောသံလေးတွေကြားရ တော့စိတ်ထဲကြည်နူးမိတာ အမှန်ပဲ။ခြံရှေ့ရောက်တော့ တံခါးတွေဖွင့်ဝင်ပြီးပြန်ပိတ်ကာအိမ်ထဲဝင်လာခဲ့သည်။ ကိုကိုက ကျမအခန်းကိုတန်းသွားပြီး ကျမကိုမွှေယာပေါ်ချပေးကာ စ ကပ်ဆွဲချွတ်ပြီး အဖုတ်လေးကိုတန်းယက်တော့သည်။ကျမလည်း ကိုကိုချွတ်ရလွယ်အောင်ဖင်လေးကော့ပေးလိုက်သည်။ ကိုကိုယက်ရလွယ်အောင်ပေါင် လေးကိုဆွဲကားပြီးဖက်ထားကာအသင့် အနေအထားပြင်ပေးထားလိုက်သည်။ကိုကိုကအဖုတ်မှာမျက်နှာအပ် ပြီး ရှလူးရှလူးနဲ့အသံတွေမြည်အောင်ကို ယက်သည်။တဘောက်ဘောက်မြည်အောင်လည်း အဖုတ်ကိုလေအားနဲ့စုပ်သည်။ ကိုကိုကအမွှေးရှင်းနေတာကြိုက်လို့ ကျမအမွှေးတွေပုံမှန်ရိတ်ပေးရ သည်။ကျမအဖုတ်လေးကခုလိုချိန်ဆိုမှာဖူးတင်ပြောင်ကားပြီး အရည်ရွဲနေတော့လိုးချင်စရာလေးဖြစ်နေတာပေါ့ရှင်။ကျမအဖုတ်ကို ပါးစပ်နဲ့တေ့စုပ်ပြီး စိမ်ပြေနပြေကိုယက်နေတော့သည်။ဖင်ဝလေးကို လည်းဖင်ကိုဖြဲပြီးယက်ပေးသည်။ကိုကိုဖင်လိုးမယ်ဆိုလည်းအလိုးခံ ဖို့အသင့်ပါပဲရှင်။တစ်ခါမှဖင်မခံဖူး တော့ကြောက်တာတော့ကြောက် တယ်ရှင်။ကိုကိုလီးကြီးနဲ့ဆို သူလိုးပုံနဲ့ဖင်ကွဲမှာလေ။ “အီးးးကိုကို အင်းးးဟင်းးးး မနေနိုင်တော့ဘူး လိုးပေးတော့” “ဖင် လိုးမယ်နော်ချစ်လေး” “အင်းး ခုဖင်လိုးနဲ့အုန်း အဖုတ်ကိုအရင်လိုးပေးအုန်း” ကိုကိုကအဖုတ်ယက်နေရင်း သူ့ဘောင်းဘီကိုချွတ်နေသည်။
မတ်တပ်ရပ်လိုက်တော့ လီးကြီးကတရမ်းရမ်းနဲ့ထွက်လာသည်။ ကိုကိုဂွင်းထုပြီးမွှေ့ယာပေါ်တက်လာကာကျမပေါ်တက်ခွသည်။ ကျမခေါင်းတစ်ဖက်စီမှာ ဒူးထောက်လိုက်တော့ သူ့လီးကြီးကကျမ မျက်နှာပေါ်ဝဲနေသည်။ကျမလည်းလီးစုပ်ကတော့မှာသိလို့ပါးစပ်ကို အသာဟကာ ကိုကို့ခရမ်းသီးကြီးကိုဖမ်းငုံ ပလိုက်သည်။ငုံရုံငုံပေးထား တော့အလိုက်သိစွာပဲကိုကိုကကျမပါးစပ်လေးကိုလိုးသည်။သူ့လီးကြီး ကိုအဆုံးထိမစုပ်နိုင်ပါ။ကြီးပြီးရှည်တော့ ပါးစပ်ဟရ တာအာညောင်း သလို အာခေါင်ကိုလည်းထိထိနေသည်။အာ့တောင်ကိုကိုစိတ်တင်းပြီ ဆို သူ့ဟာကြီးကလည်ချောင်းထဲအထိဝင်လာတတ်သည်။ကျမမှာ မျက်ရည်ဝဲပြီးအသက်ရှုရပ်မတတ်ကိုခံရတတ်သည်။ခုတော့လီးကို တစ်ဝက်လောက်ပဲသွင်းပြီးစုပ်ပေးနေသည်။ကိုကိုကလည်းကျမစုပ် ပေးသလောက်နဲ့ ပဲငြိမ်ခံနေသည်။စုပ်ပေးနေရင်းကိုကို့လီးကြီးက တဖြည်းဖြည်း ကြီးလာပြီးကျမပါးစပ်ထဲပြည့်လာသည်။ “အုအုဝု အွန်းး အုအု ဝူးးး” “ရပြီချစ်လေး လိုးစို့” “အုအုပြွတ် အီးးးကိုကိုဟာကြီးစုပ်ရတာလည်းမေးညောင်းလိုက်တာ” “အာ့ကြီးပဲကြိုက်နေတာမှတ်လား” “ဟီး ဟုတ်တယ် ညောင်းသာညောင်းတာ စုပ်မ ဝဘူး ခုလိုးမှာလား” “အင်း လိုးမှာပေါ့ အဖုတ်လေးရော ဖင်စူစူလေးကိုရောလိုးမယ်” “အင်းးလိုးးး ကိုကို ဖင်လိုးရင်နာမှာ ဖြည်းဖြည်းတော့လိုးနော်” “အင်း ပါချစ်လေးရဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်းလိုးမှာ” “ဗြစ်တစ်တစ် ပြွတ်ဘလွတ် ဘလွတ် ဘုဘု” အရည်တွေအိုက်ထွန်းပြီးရွဲနေတဲ့ကျမစပ်ပတ်လေးထဲကိုကို့လီးကြီး တင်းကြပ်ကြပ်နဲ့ဝင်လာသည်။အဆုံးထိမထည့်ဘဲတစ်ဝက်ထိပဲထည့် ပြီးတဇွပ်ဇွပ်နဲ့လိုးတော့သည်။ကျမလည်းဖင်လေးကော့ကော့တင်ပေး ရင်း ကိုကို အလိုးကိုခံနေမိသည်။အဆုံးထိမဝင်တော့အားမရ။ ဝင်တော့လည်း သူ့ဒစ်ကြီးကသားအိမ်ဝထောက်လို့ နာသည်။နာလည်း ကိုကို့ကိုအဆုံးထိထည့်စေ တော့သည်။ “ကိုကို အဆုံးထိလိုးလေ အီးးးးးရှီးးအားမရဘူးး အားးးးလိုးလိုး ကြမ်းကြမ်းလေးလိုးပေး ” “ဖောင်းဖောင်းဖောင်းဖောင်း ဒုတ်ဒုတ် ဗြွတ်ဗြစ်ဗြိ ဗြိ ဘလွတ်” ကိုကိုနဲ့ကျမ မေမေတို့ပြန်လာတဲ့အထိလိုးဖြစ်ကြသည်။ဖင်ကိုတော့ ဒစ်ပဲအသွင်းခံပြီးဆက်မလိုးခိုင်း။ကိုကိုလီးကြီးကကြီးလွန်းသည်။
ကျမဖင်လေးထဲတုတ်ကြီးနဲ့ထိုးနေသလိုပဲ။အရမ်းလည်းနာတာ။ အာ့နဲ့ဖင်ကွဲမှာစိုးလို့ဆက်မလိုးခိုင်းဘူး။ကိုကိုကလည်းနောက်နေ့ အချိန်ရမှ ဖင်ကိုသေချာ ကလိုင်းပြီးလိုးမယ်တဲ့လေ။ခုကအချိန်လည်း သိပ်မရဘူး။မေမေတို့ပြန်လာတော့ ကျမဖင်ပူးတောင်းထောင်ပြီး ကုန်းပေးနေတာ။ကိုကိုကသူ့ဝိတ်နဲ့တက်ဖိ ပြီး အသားကုန်လိုးနေတာ။ ကျမပြီးသွားလို့ ရှေ့ကိုဟတ်ထိုးကျတုန်း ကိုကိုကခါးလေးကိုဆွဲပြီး လိုးနေတာ။အဲ့အချိန် ခြံရှေ့က ကားဟွန်းသံကြားတာနဲ့ တန်းလန်းဖြစ် ပြီး တံခါးသွားဖွင့်ပေးရရှာတယ်။ကိုကိုသနားစရာ။စွပ်ကျယ်နဲ့ ဘောင်းဘီကောက်ဝတ်ပြီးပြေးတာ။ကျမလည်း ဖင်ဘူးတောင်း ထောင် လျက်လေးဇိမ်ခံနေပေမယ့်အားယူကုန်းထပြီး။အဝတ်တွေဝတ် အခန်းထဲသိမ်းဆည်းနေလိုက်သည်။ “ဟဲ့ သမီး ညကြီးမိုးချုပ်မှဘာတွေလုပ်နေလဲ” “အခန်း ရှင်းနေတာအမေ အလုပ်ရှုပ်နေတော့မရှင်းဖြစ်လို့” “အေးအေး သမီးအဖေမူးလာတယ် သားကြီးအခန်းထဲပို့နေတယ်” “အမေရောသောက်သေးလား ” “အ မေကဝိုင်ပဲနည်းနည်းသောက်လာတာပါ နည်းနည်းတော့မူးတယ် မေ့သမီးလေးကိုလာကြည့်တာ လာပါအုန်းအမေ့ဆီ” အမေကအခန်းထဲဝင်လာပြီး ကျ မကိုဖက်နမ်းသည်။ “သမီးကလည်းချွေးတွေနဲ့ပါလား သိပ်မရှင်းနဲ့တော့လေ ချွေးတိတ်အောင်လုပ်ပြီးရေချိုးအုန်း” “ဟုတ် ပြီးပါပြီ အမေ ” ကျမလည်းအ မေ့ကိုပြန်ဖက်နမ်းကာ အောက်ထပ်လိုက်ပို့သည်။ အမေကအသက်၄၅ကျော်၅၀နားကပ်နေပေမယ့်လှပစိုပြေနေဆဲ။ ကျမကိတ်တယ်ဆိုတာအမေ့ကိုဘယ် မှီမလဲ။အမေတို့အခန်းရောက် တော့ ကိုကိုကအဖေ့ကိုစောင်ခြုံပေးနေသည်။အမေ့ကိုလည်း အဖေ့နား သိပ်ကာစောင်ခြုံပေးပြီး ကျမနဲ့ကိုကိုပြန်ထွက်လာ သည်။
ကိုကိုကကျမကိုဖက်ပြီးဖင်လေးကိုလာညှစ်နေသည်။သူမဝသေးတာ သိတယ်လေ။ကျမလည်း ကိုကို့လီးကိုကိုင်ကာညှစ်ပေးပြီးအပေါ်ထပ် ခေါ်လာခဲ့ သည်။အမေနဲ့အဖေ မူးပြီးအိပ်နေပြီမို့ ကျမနဲ့ကိုကို ဒီည အေးဆေးလိုးလို့ရပြီ။အခန်းထဲရောက်တာနဲ့ လော့ချပြီး ကိုကိုရှေ့ ဒူးထောက်ကာ ဘောင်းဘီဆွဲ ချွတ်သည်။ မာယောင်ယောင်ဖြစ်နေတဲ့ လီးကိုငုံစုပ်ပြီးဂွင်းထုပေးတော့ခဏအတွင်းမာတောင်လာသည်။ ကျမကိုနေရာမှာတင်ဖင်ထောင်ခိုင်းကာစကပ် လှန်ပြီးကျုံးလိုးတော့ သည်။အတွင်းခံကခုနကတည်းကမချွတ်ထားတော့ ကွတ်တိပါပဲ။ ကျမအဖုတ်လေးထဲလီးကြီးခပ်ကြမ်းကြမ်းဝင်လာပြီးတော့ ဆောင့်ဆောင့်လိုးတာ။အောင့်တောင်အောင့်သွားသည်။ခုနကပြီး ထားတဲ့အရည်တွေရှိနေလို့ခံသာတာ။အချက်၅၀လောက် ဆက်တိုက်ခပ်ကြမ်းကြမ်းလိုး ပြီးအဖုတ်ထဲလရည် ပန်းထည့်ကာ ကိုကိုပြီးသွား တော့သည်။ကျမလည်းကိုကိုလရည်ပန်းတော့အချိန်မှီလေးပဲ ပြီးသွားသည်။ ကိုကိုကကျမကျောပေါ်မှေး နေကာဇိမ်ယူနေသည်။ “အင်းးးကိုကို လေးလာပြီ ထတော့” “မဝသေးဘူးကွာ လိုးချင်သေးတယ်” “ကိုကိုကလည်း ညီမလေးအဖုတ်ကျိန်းနေပြီ နောက်နေ့ မှလေ နော်” “မရဘူး လိုးအုန်းမှာ” “ဟွန့် နာနေပြီကိုကိုရဲ့ ကိုကိုမဝသေးရင် လီးစုပ်ပေးမယ်လေ” “အင်းစုပ်ပေးလေ မီးလေးကိုသနားလို့နော် နို့မို့ဆိုတစ်ည လုံးလိုးမှာ” “တကယ်နာနေလို့ပါကိုကိုရယ် နော် နော်” “အင်းပါ ကဲ ထ စုပ်ပေး” “ဟုတ်” ကိုကို ကျမကိုယ်ပေါ်ကနေထပြီး ကျမပါးလေးကိုနမ်းသွားကာ ကုတင်ပေါ်မှာထိုင်လိုက်သည်။ကျမလည်းမတ်တပ်မရပ်တော့ဘဲ ကိုကို့ရှေ့ကိုလေးဘက်ထောက်ပဲသွားလိုက်သည်။မိုးပေါ်ထောင်နေတဲ့ ကိုကို့လီးကြီးကို နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ပြွတ်ကနဲ စုပ်နမ်းလိုက်သည်။
ကျမအရည်တွေရွဲနေတဲ့လီးကြီးကပြောင်လက်ပြီးမာန်ဖီနေသည်။ ကျမလည်းပါးစပ်နဲ့ဝင်သလောက်စုပ်ပေးကာလီးတစ်ချောင်းလုံး လျှာနဲ့ယက် ဂွေးဥတွေ ကိုပါငုံစုပ်ပေးသည်။အစကမစုပ်တတ်ဘူး။ ကိုကိုပဲဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုကိုင်ဆိုပြီးသင်ပေးထားတာ။ကိုကိုလိုးမဝ သေးပေမယ့် ကျမအဖုတ်ကအောင့်နေ တော့ဆက်မခံနိုင်။ကိုကို့ကို သနားတာနဲ့သေသေချာချာပဲ စုပ်ပေးနေမိသည်။ကိုကိုကကျမကိုငုံ့ ကြည့်ပြီး ကျမနို့လေးတွေကိုဖွဖွလေးဆုပ်ကိုင်ပေး နေသည်။စုပ်ရင်းစိတ်ပါလာတော့ လီးကြီးကို လည်ချောင်းထိရောက်အောင်သွင်းမိ သည်။ကိုကိုကလည်းကျမခေါင်းလေးကိုင်ကာဖိဖိချပေးသည်။ “အု အွ တ် ဝု အဟွတ် အုအုပြွတ် ဝူးးး ပြွတ် ပြွတ်ပြွတ် ပြွတ် ” ၅မိနစ်လောက်စုပ်ပေးလိုက်တော့ ကိုကို ကျမခေါင်းလေးကိုမလွှတ်ဘဲ ဖိထားပြီးလရည်တွေတစ်ဗြ စ်ဗြစ်နဲ့ပန်းထည့်တော့သည်။ကိုကိုပြန် လွှတ်ပေးပြီး သူ့လီးကြီးပါးစပ်ထဲကထုတ်မှပဲကျမလည်းအသက်ရှူရ တော့သည်။အသက်ကိုမနည်းရှူနေတဲ့ကျ မကိုအပေါ်ဆွဲတင်ပြီး နှုတ်ခမ်းလေးကိုစုပ်နမ်းကာသူ့ရင်ခွင်ထဲဖက်ထားသည်။ “ချစ်တယ်ညီမလေးရယ် ကိုကိုတို့ဘယ်တော့မှမခွဲဘူးနော်” “ညီမလေး လည်းတူတူပါပဲ ဘယ်တော့မှကိုကိုနဲ့မခွဲဘူး ကိုကို့ကိုပဲချစ်မယ် ကိုကိုကညီမလေးရဲ့ချစ်သူ လင်ယောက်ျားပဲ” “ညီမလေးကလည်းကိုကို့မိန်းမပါပဲကွာ အရမ်းချစ်တယ်နော်” “အင်းအရမ်းချစ်တယ်ကိုကို” ကိုကိုနဲ့ကျမ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဝေးသွားမှာစိုးသည့်အလား တင်းကြပ်စွာဖက်ထားမိကာမွှေ ယာပေါ်လှဲချကြတော့သည်။
ကျမလေ တားဆေးတွေသောက်လို့လားသိဘူး ဝလာတယ်။ကိုကိုက နေ့တိုင်းလိုလို အချိန်ရတာနဲ့လူလစ်ရင်တက်လိုးနေကြလေ။အဲ့တော့ သန္ဓေတားဆေး ကဒ်လေးကိုကို့ကိုဝယ်ခိုင်းပြီးသောက်ရတယ်။ မဟုတ်ရင်ကိုကိုလိုးပုံနဲ့ဗိုက်ထွက်လာမှာအသေအချာပဲ။မေမေတို့ သိရင်ပြသနာအကြီးအကျယ်တက်မှာ တော့ကျိန်းသေတယ်။ဒါပေမယ့် အဆူအဆဲခံရရုံသာ။မိသားစုထဲမှာကကိစ္စမရှိ။တစ်ကယ်လို့အမေတို့ သိရင်တောင် အပြင်ကိုထုတ်ပြောမှာမဟုတ်ဘူး လေ။အမေတို့သိပြီးကျမနဲ့ကိုကို့ကိုတားလည်း ဆက်ပြီးလျှောက်မှာပဲ။ပတ်ဝန်းကျင်သိ ကုန်ရင်တော့အရှက်တစ်ကွဲဖြစ်ပြီးမိသားစုသိက္ခာကျရမယ့်ကိစ္စ လေ။အဲ့တော့မနက်တိုင်းနိုးတာနဲ့ဆေးကိုသတိတရနဲ့ကိုသောက်ရတယ်။ ကိုကိုကလည်းအမြဲသတိပေးသည်။ကျမနဲ့ကိုကိုလိုးတာအမေတို့မသိ အောင် မ ရိပ်မိအောင်လည်းနေကြတယ်။ဆေးခန်းသွားပြီး ဆေးထိုးဖို့ကလည်းကျမ မရဲတင်း။ပြီးခဲ့တဲ့လက ရာသီသွေး လာတာနောက်ကျလို့ နှစ်ယောက်စလုံး ထိတ်လန့်ပြီး ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိစစ်ကြည့်ရသေးသည်။ကိုယ်ဝန်မရှိမှန်းသိမှဘဲ စိတ်ပူနေတာတွေလျောကျရသည်။ကိုယ်ဝန်မရှိသေးပေမယ့် ဘေးထွက်ဆိုး ကျိုးအနေနဲ့ကျမဝလာတယ်။အရင်ကဗိုက်ခေါက်မရှိ ချပ်ကပ်နေတဲ့ကျမ ခုဆိုဗိုက်ခေါက်၂ခေါက်နဲ့။ခုနောက်ပိုင်း အစားတွေအရင်ကထက်စားလာတာ ကြောင့်လည်းပါတာပေါ့။ ဆံပင်အုံကောင်းတဲ့ကျမဆံပင်တွေကျွတ်လာတယ်။ဟိုတစ်ပတ်ကဆို ဆံပင်တွေကျွတ်လို့ ကျောလည်လောက်ဆံပင်ကို ဂုတ်ဝဲ လေးညှပ် ပလိုက်တယ်။မေမေတို့ကိုတော့အိုက်လို့ပေါ့။ကိုကိုကတော့သိတယ်။ ဆံပင်ဂုတ်ဝဲလေးနဲ့ဆိုတော့ကျမပိုတောင်ငယ်သွားသေးတယ်လို့ တောင် ပြောသေးတယ်။ကိုကိုကလိုင်းပေါ်မှာ sexy accဖွင့်ပြီး အင်းစက်အကြောင်း အကိုတစ်ယောက်နဲ့ဆွေးနွေးရင်းကျမနဲ့ကိုကို့ အကြောင်းကိုတိုင်ပင်ဖြစ်တယ် လို့ပြောတယ်။ကျမလည်း ကိုကို့ကိုဘာလို့ ကိုယ့်အကြောင်းသူများကိုသွားပြောရလဲလို့စိတ်ဆိုး မိသေးတယ်။အဲ့အကိုက ကိုကို့ကိုအကြံတွေပေးတယ်။ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေလည်းပြောပြတယ်။သန္ဓေတားဆေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ လည်းဆွေးနွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဟိုနေ့ကလည်း ဆေးသောက် ရ မယ့်အလုပ် ဆေးကဒ်ကိုအမေတွေ့နိုင်မယ့်ရန်ကနေဝေးအောင် လက်မောင်းထဲထည့်ပြီးသုံးရတဲ့ Implant ဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေး အကြောင်းပြောပြတယ်။ Implantဆိုတာ မီးခြစ်ဆံလောက်ရှိတဲ့ ဟော်မုန်း၂မျိုးပါတဲ့ ပလက်စတစ်သားဆက်ခြားဆေးတစ်မျိုးလို့ ပြောတယ်။တစ်ခါထည့်ထားရင် ၄နှစ်လောက်ခံ တယ်လို့ပြောတယ်။ကျမနဲ့ကိုကိုလည်းစိတ်ဝင်စားပြီး အဲ့နည်းကိုသုံးဖို့လေ့လာခဲ့ကြတယ်။
အဲ့နည်းကလူသိနည်းသေးတယ်လို့ပြောတယ်။တကယ့်ကို အကျိုးရှိစေမယ့်နည်းလေးပါပဲ။အဲ့အကိုရှာဖွေပြီး ပေးပို့သမျှကိုပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ “လက်မောင်းတွင်းထည့် သားဆက်ခြားပစ္စည်းအကြောင်း” (Implant) လက်မောင်းအရေပြားအောက်မှာ ထည့်ထားရတဲ့ သားဆက်ခြားပစ္စည်းတစ်မျိုးပါ။ ဟော်မုန်းနှစ်မျိုးပါဝင်ပြီး မီးခြစ်ဆံအရွယ်အစားလောက် ရှိတဲ့ ပလစ်စတစ်အပျော့ချောင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ၃နှစ်ခံ၊ ၄နှစ်ခံ၊ ၅နှစ်ခံရယ်လို့ ရှိပြီး ၃နှစ်ခံက တစ်ချောင်းတည်း ထည့်ရပါတယ်၊ ၄နှစ်ခံနဲ့ ၅နှစ်ခံကတော့ နှစ်ချောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ဝန်ရတယ်ဆိုတာ အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်ထဲက မမျိုးဥနဲ့ အမျိုးသား ဆီက သုက်ပိုးနဲ့ ပေါင်းစပ်မိတဲ့အခါ ဖြစ်လာတာပါ။ ဒီပစ္စည်းလေးကတော့ အမျိုးသမီးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ မမျိုးဥမကြွေအောင် တားဆီပေးပါတယ်။ ဒီတော့ အမျိုးသားဆီက သုက်ပိုးတွေ ဝင်လာပေမယ့် ကိုယ်ဝန်မရတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပါ။ အဲဒီအပြင် သားအိမ်ခေါင်းကိုချွဲပျစ်စေခြင်းအားဖြင့်လည်း သားအိမ် ခေါင်းကို ဖြတ်ပြီးမှ မမျိုးဥနဲ့သွားပေါင်းရမယ့် သုက်ပိုးတွေကို မဝင်နိုင်အောင် တားဆီးပေးပါတယ်။ ဘယ်လိုထည့်ပေးတာလဲ? အသေးစားခွဲစိတ်မှုလေး တော့ လုပ်ရပါတယ်။ ခွဲခန်းတွေဘာတွေတော့ ဝင်စရာမလိုပါဘူး။ မထည့်ခင်မှာ လက်မောင်းကို နေရာမှတ်ပါတယ်။ အဲဒီနေရာအတိုင်းလေး ထုံဆေးထိုး မယ်။ ထုံသွားပြီ၊ ဘာမှမသိတော့ဘူးဆိုတော့မှ ထည့်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကြောက်စရာ မလိုပါဘူး။ ဓါးကလည်း လက်သည်းခွံတစ်ဝက် လောက် အရွယ်ပဲရှိပါတယ်။ ပြီးသွားရင်လည်း ချုပ်ရိုးတွေနဲ့ ပြန်ချုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအတိုင်း အနာကပ်ခွါလေးနဲ့ပဲ ကပ်ပေးလိုက်တာပါ။
ထည့်ပြီးသွားရင်တော့ (၅)ရက်တိတိ အဲဒီနေရာကို ရေမစိုအောင် ထားရပါမယ်။ အညှော်ရှောင်ရတာ၊ အနားယူရတာတွေ လုပ်စရာ မလိုပါဘူး။ ထည့်ပြီးစ ရက်ပိုင်းလောက် ပြင်းပြင်းထန်ထန် မလှုပ်ရှားရင် ရပါပြီ(မီးဖိုချောင်မှာဓားရှတဲ့ဓားရာကမှ ကြီးဦးမယ်ဒါကဒဏ်ရာလို့တောင်မဆိုပါဘူး) ထိရောက်မှုအရှိ ဆုံး သားဆက်ခြားနည်းတစ်ခုပါ အသုံးပြုပြီး ပထမတစ်နှစ်အတွင်းမှာ ကိုယ်ဝန်ရနှုန်းက အမျိုးသမီးအယောက်တစ်သောင်းမှာ (၅)ယောက်သာ ရှိပါ တယ်။အားသာချက်တွေက ဘာတွေလဲ လက်မောင်းတွင်းထည့်ထားရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပျောက်သွားမလား၊ ထွက်ကျသွားမလား စိတ်ပူနေစရာ မလို ဘူး။ စမ်းကြည့်လို့လည်းရတယ်၊ မြင်လည်းမြင်နေရတယ်။ ဒီပစ္စည်းက (၃)လခံထိုးဆေးနဲ့ ပါဝင်တဲ့ဟော်မုန်းချင်း အတူတူပါပဲ။ ဒါပေမယ့် (၃)လခံဆေး ထက်စာရင် ဒီပစ္စည်းမှာ အားသာချက်(၄)ချက် ရှိပါတယ်။ ထိရောက်မှု ပိုကောင်းတယ်။ နှစ်ရှည်ခံတယ်။ ဒီတော့ အလုပ်ရှုပ်သက်သာတယ်။ (၃)လတစ်ခါ ဆေးထိုးနေစရာ မလိုတော့ဘူး။ (၃)လခံထိုးဆေးက သွေးပေါင်ချိန်(၁၆၀)အထက် ထိုးဖို့မသင့်တော်ပေမယ့် ဒီပစ္စည်းကတော့ ထည့်လို့ရတယ်။ သူ့ထက်စာ ရင် သားအိမ်တွင်းထည့်ပစ္စည်းကတော့ ပိုသင့်တော်တာပေါ့။ (၃)လခံဆေးက ဆေးထိုးရပ်လိုက်ပေမယ့် အရှိန်ကျန်တတ်တယ်။ လုံးဝကို မရနိုင်တော့တာ မဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ်ဝန်ပြန်ရဖို့ လအနည်းငယ်စောင့်ရတတ်တယ်။ ဒီပစ္စည်းကတော့ စောင့်စရာမလိုဘူး။ ဒါကြောင့် ခုမှအိမ်ထောင်ကျစ၊ ကလေးတစ်ခါမှ မမွေးဖူးသေးတဲ့သူတွေ စိတ်ချလက်ချ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
အားနည်းချက်တွေဆိုးကျိုးက ဘာတွေလဲ ထည့်ပေးမယ့် ဆရာဝန်၊ ဆရာမ၊ သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်သူရဲ့ အကူအညီလိုတယ်။ ရာသီသွေး မပေါ်တတ်ဘူး။ သူ့အာနိသင်တစ်ခုက သားအိမ်နံရံ ထူထဲမှုကို တားဆီးပေးတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ တစ်လတစ်ခါ သားအိမ်နံရံက ထူထဲလာ တယ်၊ ဘာလို့ဆိုတော့ မမျိုးဥနဲ့ သုက်ပိုးနဲ့ပေါင်းပြီး သန္ဓေများအောင်သွားခဲ့ရင် သားအိမ်မှာ သန္ဓေတည်နိုင်အောင်လို့။ အဲဒီလို သန္ဓေအောင်မသွားတဲ့အခါ ခုနက ထူထဲထားတဲ့ သားအိမ်နံရံက ကွာကျတယ်။ အဲဒါကို ရာသီလာတယ်လို့ ခေါ်တယ်။ အခု သူက အဲဒီသားအိမ်နံရံကို ထူမလာအောင် လုပ်ပေးလိုက် တော့ အောက်ကို ဘာမှကွာကျလာစရာ မရှိတော့ဘူး။ ဒီတော့ ရာသီသွေးလည်း မဆင်းတော့ဘူးပေါ့။ ဆိုလိုတာက သွေးမပေါ်တာဟာ အထဲမှာ အပုပ်တွေ အောင်း၊ အလုံးတွေတည်၊ ကင်ဆာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး၊ သွေးအနေနဲ့ ဆင်းလာစရာမရှိလို့သာ ဖြစ်တယ် ဆိုတာလေး သိစေချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွေးမပေါ် တာ စိတ်ပူစရာ မလိုဘူး။ စိတ်အေးလက်အေး နေလို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မက သွေးပေါ်မှကြိုက်တာ ဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ဖို့ စဉ်းစားစေ ချင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကဘယ်လိုရှိလဲ ဟော်မုန်းပါတဲ့အတွက် ဟော်မုန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ခေါင်း မူးတာ၊ ဇက်ကြောတက်တာ၊ ပျို့အန်တာ၊ ကိုယ်အလေးချိန် အပြောင်းအလဲဖြစ်တာ၊ ရင်သားတွေတင်းပြီး နာတာ၊ ဒါတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မသုံးစွဲသင့်သော အခြေအနေများ ရင်သားကင်ဆာ (Breast cancer) ၊ ခြေထောက်တို့ အဆုတ်တို့မှာ သွေးကြောပိတ်တာ (Deep vein thrombosis) ၊ အသည်းရောဂါ (Liver diseases) နဲ့ ပုံမမှန်သွေးဆင်းနေတဲ့သူတွေ (Irregular bleeding) ဆို အသုံးပြုလို့ မသင့်တော်ပါဘူး။
ဝနေတဲ့သူတွေလည်း အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ တစ်ခုပါပဲ၊ ကိုယ်အလေးချိန် (၁၇၆)ပေါင်အထက် ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ သက်တမ်းတစ်နှစ်လျော့ပါမယ်။ (၅)နှစ်ခံထည့်ပေမယ့် (၄)နှစ်ပဲ ခံမယ်။ (၄)နှစ်ခံထည့်ပေမယ့် (၃)နှစ်ပဲ ခံမယ်။ ခြွင်းချက်အနေနဲ့ (၃)နှစ်ခံပစ္စည်းကတော့ တစ်နှစ်မလျော့ပါဘူး။ ဘယ်လောက်ဝတဲ့သူ ထည့်ပါစေ၊ (၃)နှစ်အပြည့် ခံပါတယ်။ တီဘီဆေး၊ အတက်ကျဆေးတွေကတော့ ဟော်မုန်းတွေရဲ့ အာနိသင်ကို လျော့ကျစေတာမို့ ဒီ ဆေးတွေ သောက်နေရတဲ့အချိန်ဆို မထည့်ထားသင့်သေးပါဘူး။ ထည့်ပြီးမှ ရောဂါဖြစ်လို့ ဒီဆေးတွေ သောက်ရတော့မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီပစ္စည်းအပြင် ဟော်မုန်းမပါတဲ့ နောက်ထပ်သားဆက်ခြားနည်းတစ်ခုကို ထပ်အသုံးပြုဖို့ လိုပါမယ်။ (ဥပမာ ကွန်ဒုံး၊ သားအိမ်တွင်းထည့်ပစ္စည်း)။ ရောဂါကိုပိုဆိုးစေလို့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ပစ္စည်းရဲ့ အာနိသင်ကို ကျစေတဲ့အတွက် ကိုယ်ဝန်ရသွားနိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ လွဲမှားတဲ့ အယူအဆများ ဒီပစ္စည်းကို အပ်၊ ပိုက် စသဖြင့် ထင် တတ်ကြတယ်။ အပ်တို့ ပိုက်တို့သာဆိုရင် လက်မောင်းထဲထည့်ထားတဲ့အခါ စူးနေ၊ ထောက်နေကြမှာပေါ့။(ကျမတို့fieldဆင်းတဲ့အခါအိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးတွေကမေးလေ့/ပြောလေ့ရှိတယ်)ခုဟာက ပျော့ပျောင်းတဲ့ ပလပ်စတစ်ချောင်းလေးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွေ့လို့ကောက်လို့လည်း ရပါတယ်။ ဒါ ကြောင့် လက်မောင်းထဲထည့်ထားပြီးလည်း စူးမှာစိတ်ပူနေစရာ မလိုပါဘူး။ ခွဲစိတ်မှုလုပ်ရမယ် ထင်တတ်ကြတယ်။ ဒါလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ထည့်ပေးသူ ဆရာ/ဆရာမရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ် မူတည်ပြီး မိနစ်အနည်းငယ်သာ ကြာမြင့်ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းလေးကတော့ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတော်တော်များ များ သိချင်နေကြတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သားဆက်ခြားနည်းလမ်းတွေအားလုံးမှာ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်ကိုယ်စီ ရှိကြပါတယ်။ အဓိကကတော့ ဘယ်သူပြောလို့၊ ဘယ်ဝါတိုက်တွန်းလို့ ဆိုတာထက် ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တဲ့ သားဆက်ခြားနည်းတစ်ခုကို ကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ရွေးချယ် အသုံးပြုနိုင်ကြဖို့ပါပဲ။
“မေမေရေ မောင်လေးလေ သမီးကိုလိုက်စနေတယ်” “သားငယ် မမကိုမစနဲ့လေ မေမေဘာမှာထားလဲ” “မမကိုသားကချစ်လို့စတာပါမေမေရ” “သား သားဖေကြီးကိုထတော့လို့ မေမေ့ကိုရှောပင်လိုက်ပို့လို့” “ဟုတ်ကဲ့မေမေ” ခုဆို ကျမ အမေရိကန်မှာကိုကိုနဲ့တူတူနေလာတာနှစ်၂၀ကျော်လာပြီ။ ကျမနဲ့ ကိုကိုဒီမှာတရားဝင်ယူလိုက်ကြပြီလေ။ဒီမှာကျမတို့ကို မောင်နှမလို့သိတဲ့သူတစ်ယောက်မှမရှိကြဘူးလေ။နာမည်လည်း ပြောင်းထားတယ်။ကျမက ဆူဇီ။ ကိုကိုက ပက်ထရစ်။ လွန်ခဲ့တဲ့၁၅နှစ်လောက်က ကျမနဲ့ကိုကိုလိုးနေတာကိုအမေ ပက်ပင်းကြီးမိသွားတယ်။ဆူလိုက်ဆဲလိုက်တာရစရာကိုမရှိဘူး။ ကျမနဲ့ ကိုကိုကဖြစ်လာခဲ့တဲ့အရာအပေါ်ကြံကြံခံရင်ဆိုင်ကြတာပေါ့။ ကိုကို့ကိုတစ်ခါမှလက်ဖျားနဲ့တောင်မထိဖူးတဲ့အဖေတောင် ကိုကို့ကို ထိုးတယ်။ကျမကို လည်းပါးရိုက်တယ်။တစ်မိသားစုလုံး တစ်ပတ် လောက်မစားမသောက်နိုင်ဖြစ်ကြတယ်။ကျမတို့ကိုခွဲထားဖို့ လုပ်ပေမယ့်ကျမနဲ့ကိုကိုကအဆိပ်သောက် သတ်သေမယ်ပြောလို့ ချစ်ခြင်းကိုမခွဲတော့ဘူးမင်းတို့ဘဝနဲ့မင်းတို့ရှိစေတော့တဲ့။မြန်မာပြည် မှာဆက်နေရင် လူတွေသိသွားနိုင်လို့အမေရိကန်ကိုအတင်းပဲ ပို့လိုက်တယ်။အဖေဆုံးတုန်းကတောင်ပြန်မလာရဘူး။အားလုံးနဲ့ အဆက်အသွယ်ကိုဖျက်ခိုင်းခဲ့ပြီးအမေနဲ့ပဲအဆက်အသွယ်ရတယ်။အမေကခုတရားစခန်း မှာပဲနေနေတယ်။သူ့မြေးလေးတွေနဲ့တော့ ဖုန်းမှာပဲမြင်ဖူး စကားပြောဖူးခဲ့တယ်။မြန်မာပြည်မှာ ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်မှန်းမသိပေမယ့် ကိုကိုနဲ့ကျမဒီမှာ ဘဝ အသစ်လေးနဲ့ ပျော်နေပါပြီ။သမီးကလည်း၁၃နှစ်ထဲမှာ။သားငယ်ကတော့၉နှစ်။၂ယောက်စလုံး သွက်သွက်လက်လက်နဲ့ကိုယ်လက်အဂ်ါ အပြည့်အစုံနဲ့ပါပဲ။ လူတွေကပြောကြတယ်။သွေးသားရင်းနီးစပ်ပြီး ရလာတဲ့မျိုးစပ်ကလူစင်မမှီဖြစ်တတ်ကြတယ်တဲ့။ကျမ သားနဲ့သမီး ကတော့အားလုံးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘတ်ပါပဲ တစ်ခါတစ်လေတော့တွေး မိတယ်။ငါ ကိုကိုနဲ့မောင်နှမချင်းလိုးခဲ့မိယူခဲ့မိတာမှားသလားပေါ့။ ဒါပေမယ့်မမှားပါဘူးရှင်။ကိုကိုကကျမကိုချစ်သလိုကျမက လည်း ကိုကို့ကိုချစ်နေဆဲ ချစ်နေမြဲမို့လို့ပါပဲရှင်။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ကိုကိုမောငျနဲ့ခြိုခြိုအောငျ